ကာတွန်း, တိုင်းရင်းသားများသတင်း, တိုင်းရင်းသားအကြောင်း
(No. 61 , September 29, 2020)
၁။ မဲဆွယ်မှုကို ခြိမ်းခြောက်သည့် RCSS ကို TNP ပါတီက ကော်မရှင်ထံ တိုင်ကြား
၂။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် NCA-S EAO တပ်ဖွဲ့ဝင်များမဲထည့်ရေး အမြင်တူညီမှုမရှိ
၃။ ဦးခွန်ထွန်းဦး ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ရာထူး ကနေ နုတ်ထွက်မယ်လို့ကြေညာ
၄။ ဓနုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီပါတီ (DNDP) ၏ ပထမဆုံး မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းကို ရွာငံမြို့နယ် တွင် ပြုလုပ်
၅။ အနောက်အုပ်စုက မြန်မာ NGO များကို ငွေပေး ဆန့်ကျင်ခိုင်းနေကြောင်း တရုတ်မီဒီယာ စွပ်စွဲ
၆။ တရုတ်ဘက်အားကိုးနေရတဲ့ ခေါင်လန်ဖူးဒေသမှာ ရိက္ခာခက်ခဲနေ
၇။ တီးတိန် ဒေသခံတချို့ အစိုးရ အထောက်အပံ့ လိုအပ်နေ
၈။ သိန်းနီမြို့နယ်တွင် ရေကြီးမှုဖြစ်ကာ ဆုံးရှုံးမှုများစွာရှိ
၉။ တပ်မတော်မှ အပြည့်အဝ တာဝန်ယူပါက ပလက်ဝမြို့နယ်တခုလုံး ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်မည့် အနေထားရှိဟုဆို
၁၀။ ရှမ်းမြောက် KIA နှင့် ဖြစ်ပွားသော တိုက်ပွဲတွင် မြန်မာ စစ်သား ၆ ဦးသေ၊ ၅ ဦး ထိခိုက်
၁၁။ တပ်မတော်၏ ဖမ်းဆီးခံရသည့် မြောက်ဦးမှ သုံးဘီးယာဉ်မောင်း ဦးအေးကျော် ဦးခေါင်းသွေးယို စုတ်ပြဲဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံး
၁၂။ ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း ပြောင်းဈေးကျပြီး တောင်သူတွေစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာ
၁၃။ ရခိုင်မှာ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ကပ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး ခက်ခဲနေ
၁၄။ ဖားအံကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့ရှိသူနှင့် ဆက်စပ်သူများအား နှာခေါင်း၊အာခေါင်တို့ဖတ်(Swab) ရယူထား
၁၅။ ပန်နန်းဒင်သွားလမ်း တောင်ပြိုမှုကြောင့် ပြတ်တောက်
၁၆။ သိန္ဒီနှင့် မိုင်းပွန်ဟော်နန်းတို့ကို တပ်မတော်က ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးမည်
၁၇။ ဖားဆောင်းတွင် ကရင်အမျိုးသားပါတီ အင်အားရာချီ လှည့်လည် မဲဆွယ်
၁၈။ ချင်းပြည်နယ်တွင် တာဝန်ကျရာ ကျေးရွာများရှိမဲရုံများသို့ သွားရောက်ကြမည့် ကျောင်းဆရာ/ဆရာမများအနေဖြင့် အခက် အခဲများစွာရှိ
၁၉။ မွန်အမျိုးသားကျောင်း ဆရာတွေကို အစိုးရမှ လစာထောက်ပံ့ပေးဖို့ တောင်းဆို
၂၀။ ကပ်ဘေးကြောင့်အပစ်ရပ်ချင်ပေမယ့် ရခိုင်မှာတော့ လက်တွေ့မဖြစ်နိုင်လို့ တပ်မတော်ပြောကြား၂၁။ သီပေါတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးဖမ်းဆီးစဉ် အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁ ဦး ကျဆုံး
၂၂။ တစ်သီးပုဂ္ဂလ ဝင်ရောက်မည့်သူ ပြည်နယ်အတွင်း ၁၃ ဦးရှိ\_
၂၃။ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာအများစုတွင် Covid ကြောင့် လူဝင်လူထွက်ပိတ်ထား
၂၄။ မူဆယ်(၁၀၅)မိုင် ကားသမားတဦးထံ ကိုဗစ်-၁၉ ပိုးတွေ့၊ မန္တလေးထပ်မံ စစ်ဆေးထား
၂၅။ မောင်တောခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ အပါအဝင် ၁၀ ဦး ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံရ
၂၆။ တရုတ်ပြည်သို့ မြန်မာကုန်တင်ယာဉ် တရက် အစီး ( ၁၅၀ )သာ ဝင်နိုင်
၂၇။ တာချီလိတ်- မယ်ဆိုင် ကုန်သွယ်ရေး အကန့်အသတ်များ ပြန်ဖြေလျှော့ရန် သဘောတူမှုရ
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ မဲလာဆွယ်သည်ကို လက်ခံပါက ကျေးရွာ ဥက္ကဋ္ဌများ ငွေ ၁၀ သိန်းပေးရမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်သဖြင့် ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS)ကို တအန်း (ပလောင်) အမျိုး သားပါတီက ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံတွင် တိုင်ကြားထားသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၏ အတွင်းရေးမှူး ဦးသိန်းနိုင်က “တအန်း(ပလောင်)ပါတီက တိုင်ကြား လာတာ ဟုတ်ပါတယ်။ သူတို့ အခက်အခဲတွေ ပေါ်ပေါက်တယ်ပေါ့။ တိုင်ထားတာ ရှိပါတယ်။ ပါတီက ပြောတဲ့ထဲမှာတော့ ပန်ကေတုအုပ်စုက ရွာ ၃ ရွာလို့ ပြောပါတယ်။ အခြားပါတီတွေကတော့ တင်ပြတာ မရှိဘူး”ဟု ပြောသည်။ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီအချင်းချင်း မပြေမလည်ဖြစ်ပါက စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီမှတဆင့်ဖြေရှင်းပေးနိုင် သော်လည်း လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနှင့် မပြေမလည်ဖြစ်သည့် ပြဿနာတွင် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းလျှင်လည်း ထိရောက်မှု မရှိနိုင်ပါဟု ဦးသိန်းနိုင်က မှတ်ချက်ပြုသည်။ TNP မှ တိုင်ကြားစာကို ပြည်နယ်အဆင့်၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ထံသို့ တင်ပြထားသည်ဟုလည်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ RCSS သည် ၎င်းတို့၏ ရုံးတံဆိပ်၊ အဖွဲ့အစည်း အမှတ်အသားပါ စာရွက်များဖြင့် အကြောင်းကြားခြင်း မဟုတ်ဘဲ မိုင်းကိုင် မြို့နယ်တွင်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်တာဝန်ခံဆိုသူ ၁ ဦးက ပန်ကေတုကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာအုပ်စု စာရေးကို ပြောဆိုကာ စာဖြင့်အကြောင်းကြားခိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ ခြိမ်းခြောက်စာ ပို့ခံရသည့် ပန်ကေတုကျေးရွာအုပ်စု သည် မိုင်းကိုင်မြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်မြေ (၁) တွင် ပါဝင်သည့် ကျေးရွာအုပ်စု ဖြစ်သည်။ RCSS သည် ၎င်းတို့ လှုပ်ရှားသည့် နယ်မြေအားလုံးတွင် မဲဆွယ်စည်းရုံးမည်ဆိုပါက နိုင်ငံရေးပါတီ အားလုံးက ၎င်းတို့ကို ကြိုတင် ခွင့်တောင်းကာ ခွင့်ပြုချက် ယူပြီးမှသာ မဲလာဆွယ်နိုင်မည်ဟုလည်း စက်တင်ဘာ ၁ ရက်က ထုတ်ပြန်ထားရာ TNP ပါတီ၊ ဗဟိုနှင့် မိုင်းကိုင်မြို့နယ် အခြေစိုက်ပါတီရုံးတို့မှ RCSS ထံသို့ ၂ ကြိမ်ခန့်စာပို့ထားသော်လည်း အကြောင်းပြန် စာမရဟု မိုင်းကိုင်မြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်မြေ (၂) တွင် ဝင်ပြိုင်မည့် TNP ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးမိုင်း အောင်ခမ်းထံက သိရသည်။
RCSS ၏ လုပ်ဆောင်ချက်သည် ဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီခြင်း မရှိဘဲ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း များ၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်မှာ ကော်မရှင်တွင်သာ ခွင့်ပြုချက်တင်ရမည် ဖြစ်ပြီး မည်သည့် လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ကိုမှ တင်ရန် မလိုကြောင်း လွိုင်လင်ခရိုင်၊ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးက ပြောဆိုထားသည်။ ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌများကို ခြိမ်းခြောက်စာ ပေးခြင်း၊ ကျေးရွာများကို မဲလာမဆွယ်နိုင်ရန် ပိတ်ဆို့ထားခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းရန် RCSS ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းအုဏ်ခေးကို ဖုန်းဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်ဆက်သွယ်သော်လည်း ဆက်သွယ်မရသဖြင့် သီးခြားမှတ်ချက် ရယူ နိုင်ခြင်း မရှိပါ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/09/28/230647.html
တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် NCA-S EAO အဖွဲ့ဝင်အကြား ၎င်းတို့၏တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ တပ်ဖွဲ့ဝင်များမဲထည့်ရေးတွင် အမြင်တူညီမှုမရှိ ကြောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်အရ သိရသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ NMSP က ၎င်းတို့၏တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို မဲထည့်ခွင့်ပြုထားသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်မြေများတွင် မိမိ နှစ်သက်ရာ ပါတီကို မဲပေးနိုင်သည်ဟု မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် နိုင်အောင်မငေးက ဆို သည်။“ကျွန်တော်တို့ကတော့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဟာ သူ့ဆီမှာ အိမ်ထောင်စုစာရင်းပုံစံ ၁၀ နဲ့ မှတ်ပုံတင်ရှိရင် သူတို့ စိတ်ကြိုက် မဲသွားထည့်လို့ရတယ် မဲထည့်တဲ့ မဲဧရိယာရှိတာပေါ့နော် သူတို့မှတ်ပုံတင်နဲ့ သူတို့ ဧရိယာ သူတို့ကိုတော့ မပိတ် ပင်ဘူး သူတို့အခွင့်အရေးဆိုတော့ မဲသွားထည့်ဖို့ ခွင့်ပြုပါတယ်ခင်ဗျား”ဟု နိုင်အောင်မငေးက ဆိုသည်။ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုသည်မှာ လူတိုင်း၏ အမျိုးသားရေးတာဝန်အရ မဲထည့်ရမှာဖြစ်ပြီး မိမိနှစ်သက်ရာပါတီကို မဲပေးသင့်သည်ဟု နိုင်အောင်မငေး က ဆက်လက်တိုက်တွန်းထားသည်။
ရှမ်းပြည်ပြည်လည်ထူထောင်ရေးကော်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား မဲထည့်ခွင့် မပေးထားဟု ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး အုမ်းခေးက ဆိုသည်။“မဲပေးခွင့်တော့ မပေးထားဘူး ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ RCSS တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ ဘယ် ပါတီ ထည့်ကိုမှ အားမပေးဘူး ကန့်ကွက်တာလည်း မရှိဘူးပေါ့လေ အဲလိုပဲ ရပ်တည်ထားတာပေါ့နော တပ်သားတွေ အနေနဲ့ မဲထည့်ခွင့်ရဖို့ တောင်းဆိုတာ မရှိဘူး သူတို့လည်း နားလည်ပြီးသားပဲ တောင်းဆိုတာ ရှိခဲ့ရင်လည်း မပေးဘူးထင်တယ် အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းရှိပြီးသားလေ သူတို့လည်း မတောင်းဆိုပါဘူး”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။“ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဖို့က ခက်မှာပေါ့နော် ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဒါက ၂၀၀၈ အခြေခံအောက်မှာ လုပ်တဲ့ ကိစ္စ ကျွန်တော် တို့က ၂၀၀၈ ရဲ့ အဓိက ကျွန်တော်တို့ ဖက်ဒရယ်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ကိစ္စတွေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ပြီး တော့ ဒီမိုကရေစီကို ဆန့်ကျင်တဲ့ကိစ္စတွေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အခြေခံနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်လာတာကိုး ဆိုတော့လော လောဆယ်တော့ မဲထည့်ခွင့်ရရင်တောင် ကျွန်တော်တို့ ထည့်ဖို့တော့ မရှိသေးပါဘူး” ဟု ပဒိုစောတာဒိုမှုးကပြောသည်။
ဒီမိုကရေစီ ထူထောင်ပါက ရွေးကောက်ပွဲသည် အရေးကြီးသော်လည်း တဖက်တွင် ဒီမိုကရေစီ၏ အနှစ်သာရများ ပါဝင် သည့် ရွေးကောက်ပွဲအလေ့အထနှင့် အကျင့်စရိုက်ပိုင်း ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်နေပြီး ပြည်သူများ ရွေးချယ်တင်မြောက်ထား သည့် ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် ပြောပိုင်ခွင့်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ တားဆီးပိတ်ပင်မှုများလည်း ရှိနေသေး သည်ဟု ဆိုသည်။ http://burmese.monnews.org/2020/09/28/%e1%81%82%e1%81%80%e1% 81%82%e1%81%8
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(SNLD)ပါတီ စတင်ထူထောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်၊ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် နှစ်ပေါင်း ၃၀ကျော် တာဝန်ယူခဲ့သူလည်း ဖြစ်တဲ့ ဦးခွန်ထွန်းဦးဟာ ရာထူးကနေ နုတ်ထွက်မယ်လို့ ရန်ကုန် အခြေစိုက် 7Day News သတင်းစာမှာ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက် ကကြော်ငြာ ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်ထွန်းဦး နုတ်ထွက်မယ့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ပါတီကို တရားဝင် နုတ်ထွက်စာပေးပို့တာ မရှိကြောင်းနဲ့ သတင်းစာမှာ ကြော်ငြာချက် ဖော်ပြမှသာ သူတို့အနေနဲ့ သိရှိရတယ်လို့ ပါတီရဲ့ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ(၁) စိုင်းညွန့်လွင်က ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။ ဦးခွန်ထွန်းဦး ပါတီက အနားယူမယ့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပါတီနဲ့ နှစ်ဖက် ပြောဆိုထားတာရှိပြီး လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှ အနားယူဖို့ ပြောထားတာ ဖြစ်ကြောင်း၊ အခုလို ရုတ်တရက် နုတ်ထွက် တယ်လို့ ကြော်ငြာထည့်လိုက်တဲ့အပေါ် သူတို့အနေနဲ့လည်း နားမလည်နိုင်ကြောင်းလည်း စိုင်းညွန့်လွင် ကဘီဘီစီကို ပြောပါ တယ်။ အခုလို ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်က နုတ်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကလည်း ပါတီဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးက အတည်ပြုပြီးမှ သာ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်က နုတ်ထွက်တာကို အတည်ပြုလို့ရမှာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း စိုင်းညွှန့်လွင်က ရှင်းပြပါတယ်။
SNLD ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကနေ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်မှာ နုတ်ထွက်တယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကာယကံရှင်ဦးခွန်ထွန်းဦးကို ဘီဘီစီက ဆက်သွယ်ပေမယ့် ဆက်သွယ်လို့ မရခဲ့ပါဘူး။ ပါတီဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်က အနားယူပြီး မျိုးဆက်သစ်များကို လမ်းဖွင့် ပေးထားရမယ်လို့ ဦးခွန်းထွန်းဦးက ၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ အတွင်းကလည်း မီဒီယာတွေကို ထုတ်ဖော်ပြော ကြားခဲ့ပါ သေးတယ်။ နုတ်ထွက်ကြောင်း ကြော်ငြာထည့်ခဲ့တဲ့ ပါတီဥက္ကဋ္ဌ နဲ့ ပါတီဗဟိုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ဒီလိုနုတ်ထွက် ကြောင်း ကြော်ငြာပါအပြီးမှာ အဆက်အသွယ် မရသလို မတွေ့ရသေးတဲ့အတွက် ဘာကြောင့် အခုလိုနုတ်ထွက်ရတယ်ဆို တာကို မပြောနိုင်သေးဘူးလို့လည်း စိုင်းညွန့်လွင်ကပြောပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ကျန်းမာရေး၊ မိသားစုအရေးကိစ္စတွေကြောင့် အနားယူချင်တယ်လို့ ပြောတာမျိုးတော့ ရှိတယ်လို့ စိုင်းညွန့်လွင်က ဦးခွန်ထွန်းဦး နုတ်ထွက်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။ ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေး မထိုင်သေးဘဲနဲ့ အခုလိုမျိုး ပါတီကနုတ်ထွက်တဲ့ ဒီကိစ္စဟာ အတည် ဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့ မရသေးကြောင်းလည်း သူကပြောပါတယ်။ https:/ /www.bbc.com/burmese/54315615
ဓနုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီပါတီ (DNDP) ၏ ပထမဆုံး မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းကို ရွာငံမြို့နယ်၊ မြို့ကြီးဇုန်တွင် စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ထိုသို့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး လှည့်လည်ရာတွင် မော်တော်ယာဉ်အစီးရေ ၈၀ ကျော်၊ လူအင်အား တစ်ထောင်ခန့်ရှိပြီး၊ ကျန်းမာရေးညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဆည်ရွာတွင် ဆိုင်းဘုတ်တင်ခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ နောက်ပိုင်းတွင် Door to Door စနစ်ဖြင့် ရွာတစ်ရွ လျှင် သုံးနေရာခွဲ၍ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ ဒီနေ့မှာ စီတန်းလှည့်လည်တယ်။ ဆည်ရွာမှာ ဆိုင်းဘုတ်တင်တယ်ပေါ့။ စီတန်းလှည့်လည်တာပေ့ါ။ စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ် ကတော့ သွားနေတာတွေတော့ ရှိပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီနေ့ အားရကျေနပ်တယ်ပေါ့။ သွားမယ်လို့ လိုင်းပေါ် ကြေညာတဲ့အနေအထားပဲ၊ ဝန်းရံမယ်ဆိုပြီး ရွာအသီးသီးက ထွက်လာတာအားရတယ်။ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေအားလုံး ကျွန်တော်တို့ ပါတီကိုဆက်လက်ဝန်းရံပေးဖို့ပေ့ါ။ ကိုဗစ်မဖြစ်ရင် ဒီထက်ဝန်းရံမယ့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေ အများကြီးရှိ သေးတယ်။ အကြီးအကျယ်လည်း လုပ်လို့မရဘူးပေါ့။ မြို့နယ်ပေါင်း လေးမြို့နယ်မှာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းပေါင်း ၁၂ ယောက်၊ အမျိုးသမီးသုံးယောက်ပါတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အမျိုးသမီးပါဝင်မှုနှုန်းက ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းပေါ့”ဟု ဓနုတိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီပါတီဥက္ကဌ ဦးခင်မောင်ချိုက ပြောကြားသည်။
ဓနုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီပါတီ (DNDP) ပါတီက အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ရွာငံမြို့နယ်နှင့် ပင်းတယ မြို့နယ်တို့တွင် အမျိုးသားလွှတ်တော် တစ်နေရာ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် နှစ်နေရာနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော် လေးနေရာ၊ ကလောမြို့နယ်တွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နှစ်နေရာ၊ နောင်ချိုမြို့နယ်တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်တစ်နေရာ၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်နေရာ စုစုပေါင်း ၁၂ နေရာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ https://news-eleven.com/article/194105
အနောက်နိုင်ငံများမှ အဖွဲ့အစည်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အခြားအရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများမှ အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့ အစည်းများ (NGOs) တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများမြှင့်တင်ရန်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ မြှင့်တင်သည့် ပုံစံဖြင့် တရုတ်ကျောထောက်နောက်ခံပြု စီမံကိန်းများကို ဆန့်ကျင်ရန် အားပေးနေကြောင်း တရုတ်အစိုးရ မီဒီယာက စွပ်စွဲ လိုက်သည်။
အရှေ့တောင်အာရှမှ အချို့သော အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ (NGOs) အနက် အချို့သည် အနောက်နိုင်ငံများမှ ဝါဒဖြန့်ချိမှုတွင် အသုံးချခံများဖြစ်နေပြီး တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်နေသည်ဟု တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ အာဘော် ပြည်သူ့နေ့စဉ် သတင်းစာက ထုတ်ဝေသည် ဂလိုဘယ်တိုင်းမ် Global Times သတင်းစာက အင်္ဂါနေ့တွင် စွပ်စွဲပြီး ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်များသည် အများပြည်သူအကျိုးဆောင်ရွက်သည့် နယ်ပယ်ထက် ကျော်လွန်နေကြောင်းပြောကြား လိုက်သည်။ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအကြားတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ မငြိမ်သက်သော နိုင်ငံရေး အခြေအနေသည် အနောက် နိုင်ငံ NGOs များအတွက် လွန်စွာကောင်းမွန်သည့် အနေအထားကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖန်တီးပေးခဲ့ကြောင်း ထိုသတင်းစာက ဆိုသည်။ တရုတ်နိုင်ငံအကူအညီဖြင့် သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ပြုလုပ်သည့် အခြေခံအဆောက်အအုံ စီမံကိန်းများကို ဝေဖန်သည့် အစီရင်ခံစာများ ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြင့် တရုတ်စီမံကိန်းများကို အယုံအကြည်ကင်းမဲ့အောင် လုပ်ဆောင်ရာတွင် NGOs ဝန်ထမ်းများသည် အခန်းကဏ္ဍတခုမှ ပါဝင်နေကြာင်း မြန်မာနိုင်ငံမြို့တော် နေပြည်တော်မှ “ကျောင်” အမည်ရှိ တရုတ်တဦးကို ကိုးကားပြီးနောက် ဂလိုဘယ်တိုင်းသတင်းစာရေးသားသည်။ လွတ်လပ်ပြီး အကျိုးအမြတ်မယူသည့် အမေရိကန် အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်သော National Endowment for Democracy (NED) သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီမံကိန်းများ ကို ဆန့်ကျင်ရန် မြန်မာ NGOs များကို ငွေကြေးထောက်ပံ့နေသည်ဟု ထိုသတင်းစာက စွပ်စွဲသည်။
NGOs များသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝအရ ပြည်ပအကူအညီနှင့် အခြားအလှူရှင်များကို မှီခိုရကြောင်း Equality Myanmar မှ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်မျိုးမင်းက တရုတ်မီဒီယာ၏ စွပ်စွဲချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ သို့သော် “ကျနော်တို့က ရုပ်သေးတွေ မဟုတ်ဘူး။ ပြည်သူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေအတွက် ရပ်တည်တာဖြစ် တယ်”ဟု သူပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ သဘာဝသယံဇာတ ထုတ်ယူခြင်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဖျက်ဆီးမှု အများစုကို ကြည့်လျှင် တရုတ်ကုမ္ပဏီများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုလုပ်သော စီမံက်ိန်းများကြောင့် အများဆုံးဖြစ်ပြီး အနောက်နိုင်ငံလုပ်ငန်း များက ထိုသို့ပြဿနာများ မဖြစ်စေကြောင်းလည်း သူပြောသည်။“ကျနော်တို့ရဲ့ NGOs သဘောထားက လူ့အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ပြီး ဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေရဲ့အသံကိုနားထောင်ခြင်းဖြင့် အမှန်တရားအတွက် ရပ်တည်ခြင်းဖြစ်တယ်”ဟု သူပြောသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/09/26/230568.html
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်နှုန်း မြင့်တက်နေချိန် မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ်ဂိတ်တွေကို ပိတ်လိုက်တာကြောင့် ရိက္ခာအတွက် နယ်ခြားဖြတ်တင်သွင်းမှုကို အားကိုးနေရတဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်ထဲက ကျေးရွာတွေမှာ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲကြုံနေရတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ ကပ်ဘေးကာလ ဒေသအသီးသီးမှာ မတူညီတဲ့ အခက်အခဲတွေ ရှိနေပြီး တစ်ရွာနဲ့တစ်ရွာ သွားလာရေးခက်ခဲလွန်းတဲ့ ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်မှာ ရင်ဆိုင်နေရတာကတော့ စားနပ်ရိက္ခာ ဝယ်ယူရ ခက်ခဲနေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဘက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်နှုန်း မြင့်တက်နေချိန်မှာ ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်ထဲက တရားမဝင် တရုတ်နယ်စပ်ဂိတ်တွေဖြစ်တဲ့ နယ်စပ်မှတ်တိုင် ၃၀၊ ၃၁၊ ၄၅ နဲ့ ၄၁ နေရာတွေကို တရုတ်ဘက်က ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ကတည်းက ပိတ်ထားလိုက်တာပါ။
ဒီလို ပိတ်ထားပြီနောက်ပိုင်း ကုန်စည်စီးဆင်းမှု ရပ်တန့်နေတာ ခြောက်လ ကျော်လာပြီဖြစ်လို့ ရိက္ခာရှားပါးနေပြီလို့ ခေါင်လန်ဖူး ဒေသခံ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဉီးဒခွမ်ဖေရမ် က ပြောပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လမှာ ခေါင်လန်ဖူးဒေသက ကျေးရွာတွေမှာ ဆန်အိတ် အများအပြား လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဇော်က ပြောပါတယ်။ ခေါင်လန်းဖူးမြို့ကနေ ရွာတစ်ရွာနဲ့တစ်ရွာဟာ ၅ မိုင်ကနေ မိုင် ၇၀ လောက်အထိ အကွာ အဝေးရှိပြီး အနည်းဆုံး ၇ ရက်ကနေ ၁၀ ရက်အထိ လမ်းလျှောက်သွားရတာပါ။ အစိုးရ ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဆန်ရိက္ခာဟာ လမ်း တစ်ဝက်လောက်အထိပဲ ပို့ပေးနိုင်တာကြောင့် တကယ်လိုအပ်တဲ့ ရွာတွေအထိ ရောက်ဖို့ ခက်ခဲနေတယ်လို့ ဒေသခံ နောက်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုဆားအောင်က ပြောပါတယ်။
ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်မှာ ကျေးရွာအုပ်စု နှစ်ဆယ့်လေးခုက အိမ်ခြေ နှစ်ထောင်ကျော်မှာ လူဉီးရေ တစ်သောင်းကျော် နေထိုင် နေကြတာပါ။ https://www.rfa.org/burmese/news/food-difficulty-in-khaunglanhpu-kachin-09262020040945.
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဆင်းရဲဆုံးပြည်နယ်လို့ သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ ချင်းပြည်နယ်က ဒေသခံတချို့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (Covid 19) ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့ကာလမှာ အစိုးရရဲ့ ကူညီထောက်ပံ့မှုကို မရဘဲဖြစ်နေတာပါ။ ထောက်ပံ့ကြေးမရသူ တွေထဲ မှာ ချင်းပြည်နယ်၊ တီးတိန်မြို့နယ်က သိုင်းငင်းကျေးရွာက ဦးနန်ပီးတို့ မိသားစုလည်း ပါဝင်ပါတယ်။“ကိုဗစ်ကာလမှာ ကျွန်တော်တို့ ဘာတစ်ခုမှလည်း ရောင်းလို့မရဘူး ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ သိုင်းငင်းရွာ ကဆိုရင် ကားကို အားကိုးပြီးတော့မှ အသက်ရှင်တယ်။ ကားလည်း မထွက်တော့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အဲဒီချိန်မှာ အရမ်းကို ဒုက္ခရောက်တဲ့ အချိန်မှာ တောင်ယာ လည်း မလုပ်ရဘူး။ တောင်ယာလုပ်ကိုင်တဲ့ ဦးနန်ပီးတို့ မိသားစုဟာ သူတို့စိုက်ထားတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို သိုင်းငင်း ကားလမ်း ဘေးကနေ ခရီးသွားတွေကို ရောင်းချနေတာပါ။ အခုလို ခရီးသွားတွေ မရှိသလောက် နည်းပါး သွားချိန်မှာ ဝင်ငွေ မရတော့တဲ့အပြင် ထောက်ပံ့မှုလည်း မရတာကြောင့် အခက်ခဲဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပထမအကြိမ် ထောက်ပံ့ပစ္စည်း ပေးအပ်ရာမှာ ကန့်သတ်ချက် ၁၅ ချက်နဲ့ ညီတဲ့ အိမ်ထောင်စုတွေကိုသာ ပေးအပ်ရမယ် ဆိုပြီး ညွှန်ကြားထားတာကြောင့် မရသူတွေရှိတာလို့ တီးတိန်မြို့နယ် မောင်ကင်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဒါးလ်ခန့်ခုပ်က RFA ကို ပြောပါတယ်။ အဲဒီသတ်မှတ်ချက်တွေကြောင့် ထောက်ပံ့ကြေးမရတဲ့ ဒေသခံတွေလည်း ရှိနေပြီး ပိုးကူးစက်မှု အန္တရာယ် ရှိနေတဲ့ကာလမှာ ခက်ခက်ခဲခဲ ရုန်းကန်နေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ခေါ်ဆကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကိုခိုင်ကျင့် ဒါလ်းကလည်း အဲဒီလို ဒေသခံတွေနဲ့ အငြင်းပွားစရာတွေ ရှိလာတာကြောင့် မြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို နောက်ထပ်ပေးမယ့် အစိုးရထောက်ပံ့မှုမှာ စာရင်းထပ်မံတင်ပြဖို့ စာတင်ထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ချင်းပြည်နယ်မှာ အစိုးရရဲ့ ထောက်ပံ့တဲ့ အစီအစဉ်ထဲ မပါသေးတာကြောင့် ထပ်မံတင်ပြတောင်းခံထားတဲ့ မိသားစုဝင် ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ ပြောဆိုနိုင်သူ မရှိပါဘူး။ ကပ်ဘေးကာလ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲဖြစ်နေပြီး ထောက်ပံ့ကြေးမရတဲ့ ဒေသခံတွေဟာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးမှူးတွေက ကျန်ရှိနေတဲ့စာရင်း ပြန်လည်စိစစ်တင်ပြပေးရင် ထောက်ပံ့ကြေးရမယ်လို့ မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/chin-refugees-0928202005
သျှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း သိန်းနီမြို့နယ် နမ့်စလပ်ကျေးရွာတွင် မိုးသည်ထန်းရွာသွန်းမှုကြာင့် နေအိမ်နှင့် လယ်ယာပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှုများကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။
စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက် မနက်ပိုင်း ၁ နာရီအချိန်တွင် မိုးသည်ထန်းစွာရွာသွန်းပြီး တောင်ကျရေ နှင့် ပေါင်းစပ်မှုကြောင့် ရေကြီး ရေလျှံဖြစ်ပွားကာ နေအိမ်များရေဝင်ပြီး ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း။ လယ်ယာမြေများစွာလည်း ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း သိန္နီ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စိုင်းဦးခမ်း က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကို ပြောသည်။“ မိုးက တစ်ညလုံးရွာပြီး တောင်ကျရေနဲ ဆိုတော့ ရေကြီးသွားတာ။ အိမ်ခြေ ၃၆ အိမ် လောက်တော့ ရေနှစ်သွားတယ်။ အိမ်ပျက်စီး ဆုံးရှုံးတာက တော့ (၃) အိမ်ရှိ တယ်။ ပြိုသွားတာအိမ်တွေက နဲနဲဟောင်းနေပြီး။ အိမ်ကလည်း ကြာနေပြီး” ဟု စိုင်းဦးခမ်းက ပြောသည်။
ထို့ပြင် ရေကြီးမှုကြောင့် လယ်ယာမြေများစွာ နစ်ခဲ့ကြောင်း၊ လက်ရှိမှာ ဆုံးရှုံးသွားသည့် လယ်ယာမြေများကို စာရင်း ကောက်နေကြောင်းလည်း သိရသည်။ အဆိုပါ ရေကြီးမှု ဖြစ်ရခြင်းသည် အဓိကအားဖြင့် ရေမြောင်းထဲအမှိုက်များ စွန့်ပစ် ခြင်း၊ သစ်ခုတ်မှုများဖြစ်ပွားခြင်း၊ တို့ ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်းလည်း စိုင်းဦးခမ်းက ထပ်လောင်းပြောသည်။“ မိုးရွာက ည ၁၁ နာရီ လောက်က။ ၂ နာရီမှာ ရေတွေ အိမ်ထဲဝင်တော့ အိပ်မရတော့ဘူး။ ညကြီးထွက်ပြေးရတာ။ ဘာပစ္စည်းမှ မရခဲ့ဘူး။ အိမ် ထဲမှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေ အားလုံးဆုံးရှုံ့းတယ်”ဟု နန်းယိင်းဆိုင် က ပြောသည်။“ကျမတို့ လယ်တွေအားလုံးပျက်စီးသွားပြီ။ ဘာမှ မရဘူး။ ဒီနှစ်တော့ မလှူနိုင် မဒါန်းနိုင်တော့ဘူး။ တခါမှ မဖြစ်ဖူးဘူး”ဟု စပါး ဆုံးရှုံးသွားသည့် အသက် ၅၀ အရွယ်ရှိ အမျိုးသမီး ကပြောသည်။ သိန်းနီမြို့နယ် နမ့်စလပ်ကျေးရွာရှိ ရေဘေးဒုက္ခသင့်နေသည့် ပြည်သူများကို သက်ဆိုင်ရာမှ ကူညီထောက်ပံ့ပြီး၊ ဆုံးရှုံးသွားသည့် ပစ္စည်းများ၊ လယ်ယာများစာရင်းကို ကောက်ပြီး ကူညီထောက်ပံ့ပေးရန်လည်းရှိ ကြောင်းသိရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/18679
၂၀၂ဝပြည့်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် တပ်မတော်မှအပြည့်အဝတာဝန်ယူပါက ပလက်ဝမြို့နယ်တခုလုံး ကျင်းပနိုင် မည်ဟု ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၊ချင်းပြည်နယ်အစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ စည်ပင်ဝန်ကြီး ဦးစိုးထက် မှ ပြောသည်။
“မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)ဘက်မှာဆိုရင် ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း ၄၅ အုပ်စုရှိတယ်၊ ၄၅ အုပ်စုမှာ ကျင်းပလို့ရတဲ့ အုပ်စု က ၃၄ အုပ်စု ကျင်းပလို့ရတယ်၊ ကျင်းပလို့မရတာ ၁၁ အုပ်စုရှိတယ်၊ အဲတာ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တွက်လို့ရှိရင် ရ၅.၅၅ ရာခိုင်နှုန်း လောက်ကကျင်းပလို့ရတယ်လို့ ကျွန်တော်ပြောလိုတယ်၊ ဒါမဲဆန္ဒနယ်(၁)၊ မဲဆန္ဒနယ်(၂)မှာတော့ ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း (၅၇)အုပ်စုရှိတယ်၊ ကျင်းပလို့ရတာ(၄၃)အုပ်စုရှိတယ်၊ သူလည်းပဲ ရာခိုင်နှုန်းအရတွက်မယ်ဆိုရင် ၇၅.၄၄ ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်၊ အဲတာကြောင့် မဲဆန္ဒနယ် (၁)ရော မဲဆန္ဒနယ်(၂)မှာရော နှစ်ခုလုံးက ကျင်းပလို့ရတဲ့ အနေထားရှိတယ်၊ကျွန်တော်တို့ သုံးပုံနှစ်ပုံ ကျင်းပလို့ရတဲ့ အနေထားရှိတာပေါ့နော်၊ကျန်တဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံကလည်း တပ်မတော်ကသာလုံခြုံရေး အပြည့်ဝ တာဝန်ယူပေးမယ်ဆိုရင်လည်း ကျင်းပလို့ရတယ်အဲတာလည်းပြောချင်တယ်”ဟု စည်ပင်ဝန်ကြီးဦးစိုးထက်မှပြောသည်။
လက်ရှိပလက်ဝမြို့နယ် အချို့နေရာများတွင် စစ်ဖြစ်သည့်နေရများဖြစ်ပြီး တစ်မြို့နယ်လုံးစစ်ဖြစ်ပြီး မအေးချမ်းသည့် နယ်မြေမဖြစ်သောကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်သည့် အနေထားပိုများကြောင်းလည်းသိရသည်။ ပလက်ဝသွားမည့် ကုန်းလမ်းသည် လက်ရှိမိုးရာသီအတွင်း သွားလာရေးအဆင်မပြေမှုကြောင့် မဲရုံသုံးပစ္စည်းများ အပြည့်အဝမရောက်ရှိနိုင်သေ ကြောလည်းင်းသိရသည်။ https://www.chinworld.org/2020/09/28/%e1%80%90%e1%80% 95%e1%80%ba% e1%80%99%e1%80
မူဆယ်ခရိုင် မုံကိုးမြို့ကို ဖြတ်သွားတဲ့ နယ်မြေရှင်းလင်းရေး စစ်ဆင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ မြန်မာစစ်တပ် တပ်မ (၉၉) တပ်ဖွဲ့ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်ခရိုင်အတွင်း ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA အား နယ်မြေရှင်းလင်းရေး’ စစ်ဆင်တိုက် ခိုက်ရာတွင် စက်တင်ဘာ (၂၈) တနင်္လာနေ့ က မြန်မာ စစ်သား အနည်းဆုံး (၆)ဦး သေဆုံးပြီး ဒဏ်ရာရရှိသူ အနည်းဆုံး (၅)ဦး ရှိကြောင်း KIA ဘက်မှ ဆိုပါသည်။ တနင်္လာနေ့ နံနက်ပိုင်းမှ ညနေပိုင်း ထိ KIA တပ်မဟာ (၆) လက်အောက် တပ်ရင်း (၃၆) နယ်မြေ ကြူကုတ် (ပန်ဆိုင်း)မြို့နယ်ခွဲ သုံးနေရာတွင် တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားကာ တပ်မတော်ဘက်က ထိခိုက် သေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး KIA တပ်မဟာ (၆) အရာရှိ တစ်ဦး ကချင်သတင်းဌာန KNG ကို ယခုလို ပြောပါသည်။ “အနည်း ဆုံး (၆)ဦး (၇)ဦးခန့် သေဆုံးနိုင်တယ်။ ဒဏ်ရာ ရတာကတော့ (၅)ဦးမှ (၇)ဦးထိ ရှိနိုင်တယ်။”KIA ဘက်မှ ထိခိုက်မှု မရှိ ကြောင်း သူက ဆိုပါသည်။
တပ်မ (၈၈) စစ်ကြောင်းများ မုန်းဘော် (Mungbaw) ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင် တောင်းကုန်များရှိ KIA တပ်ရင်း (၃၆) စခန်းများကို သုံးနေရာမှ ‘နယ်မြေရှင်းလင်းရေး’ထိုးစစ်ဆင်တိုက်မှု ပြုလုပ်ပြီး ပြန်ဆင်းလာစဉ် နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်း ဖြစ်သည်။ “မိုင်ဖန် (Mai Hpang) ဘက်ကနေ ဆင်းလာတဲ့ စစ်ကြောင်းဟာ နမ်တောင်း (Nam Tau)၊ မခေါယန် (Mahkaw Yang)နားမှာ စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်တယ်၊ အဲဒီမှာ ထိခိုက်သေဆုံးမှု အနည်းငယ် ရှိတယ်။ မနက်ပိုင်းမှာပဲ မန်နောင်ယန် (Man Nawng Yang)မှာ နှစ်ဖက် ထိတွေ့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတယ်၊ အဲဒီမှာတော့ အတော်လေး အထိနာလို့ ကြားရတယ်။ ညနေပိုင်း မှာတော့ မုန်ဘော် (Mungbaw)မှ ပလဲခက် (Pale Hkyet) ဘက်ဆီ တက်လာတဲ့ စစ်ကြောင်းကို ခကျန်ခရော့ (Hka Chyang Hkaraw) ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ထပ်ပြီး မိုင်းနဲ့ ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တော့ ထိခိုက်မှုများတယ်”ဟု လုံခြုံရေးအရ အမည် မဖော်လိုသူ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ နယ်မြေမှဒေသခံ တစ်ဦး ကချင်သတင်းဌာန KNG ကို ပြောပါသည်။
နှစ်ဖက် တိုက်ပွဲကြောင့် စစ်ဘေးရှောင် ရွာသား (၆၀)ကျော်သည် မန်နောင်ကောင် (Man Nawng Kawng) ကျေးရွာ ခရစ်ယာန်အသင်းတော် ဘုရားကျောင်းဝင်းတွင် စက်တင်ဘာ (၂၄)ကတည်း ခိုလှုံနေကြောင်း ကြားသိရသော်လည်း လက်ရှိ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသေည့် အခြေအနေကြောင့် ပြင်ပမှ အကူအညီများ သယ်လာပေးရန် ခက်ခဲနေသည်ဟု မုန်းဘော် (Mungbaw)ကျေးရွာ လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။ https://burmese.kachinnews.com /2020/09/29/%e1 %80%9b%e1%80%be%e1%80%99%e1%80%ba%e1
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးမြို့တွင် အောင်တိုက်အုပ်စု၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်သော သုံးဘီးယာဉ်မောင်း တစ်ဦးကို စက်တင်ဘာလ ၂၇ရက်နေ့ တပ်မတော် ၃၇၇ တပ်ရင်းက ဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက် တစ်ရက်အကြာ ယနေ့ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ ဆေးရုံတွင် အလောင်းသာ ပြန်လည်တွေ့ရှိရဟု သေဆုံးသွားသူ ဦးအေးကျော်၏ ယောက္ခထီးဖြစ်သူ ဦးမောင်နု ကပြောဆိုသည်။“ ဦးအေးကျော် (သေဆုံးသူ အမျိုးသားအမည်) ဆေးရုံကိုရောက်နေတယ်လို့ကြားလို့ လာရောက်တွေ့တဲ့ အချိန်မှာတော့ ညနေ ၄နာရီ ၄ဝလောက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် အလောင်းကို ခေတ္တခဏ ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ခေါင်းမှာ သွေးတွေယိုပြီးတော့ စုတ်ပြဲပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်။ နောက်ကိုယ်ခန္ဓာတွေလည်း ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာ အခုတော့ ကျွန်တော်မကြည့်ရသေးဘူး။ ဆရာဝန်ဆီက အဖြေမရသေးတော့ ဘယ်လို သေဆုံးလဲဆိုတာတော့ တိတိကျကျမသိရ သေးဘူး။ မြောက်ဦးဆေးရုံကို ဆေးရုံကားနဲ့ပို့တာပါ ” ဟု ၎င်းကပြောဆိုသည်။
အဆိုပါ သေဆုံးသူ သုံးဘီးယာဉ်မောင်း ဦးအေးကျော်သည် စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် လက်ကျိုးနေသည့် အသက် ၈၀ ကျော်အဖွားတစ်ဦးကို ဆေးကုသရန် နထင်ကျေးရွာသို့ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်ဖြင့် ပို့ဆောင်စဉ် ၃၇၇ တပ်ရင်းက ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၊ထိုသို့ဖမ်းဆီးခံရခြင်းကြောင့် မိသားစုဝင်များက တပ်ရင်းသို့ သွားရောက်မေးမြန်းသော်လည်း ဖမ်းဆီးထားမှုမရှိပြန်လည်ပြောဆိုကြောင်း၊ ထိုကြောင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် မြောက်ဦးမြို့ ရဲစခန်းကို တိုင်ကြားပြီးနောက် ယနေ့တွင် သေဆုံးလျက်ပြန်လည် တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးမောင်နုကပြောဆိုသည်။ မြောက်ဦးမြို့နယ်မှ ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းသာစိန်ကလည်း တပ်မတော်၏ ဖမ်းဆီးခြင်းခံရသူ ဦးအေးကျော် သေဆုံးသွားကြောင်းကို မိသားစုဝင်များ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရကြောင်း အတည်ပြုပြောဆိုသည်။
တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းသော်လည်း ဖုန်းပြန်လည်ဖြေဆိုခြင်းမရှိပေ။ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့နယ် ကျောက်ဂူစုကျေးရွာတွင် စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက တပ်မတော်စစ်ကြောင်း ရွာသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး အမျိုးသားတစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း ကျောက်တော်မြို့နယ် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင်သန်းစိန်ကပြောဆိုသည်။ https://www.khitthitn ews.com/2020/09/ %e1%80%90%e1%80%95%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်(စ်)ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှာ ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေ ပိတ်ထားတဲ့အတွက် ပြောင်းဝယ်သူတွေ နည်းလာပြီးတော့ ဈေးတွေလည်း တဖြည်းဖြည်းထိုးကျလာတဲ့အပေါ် ပြောင်းစိုက်တောင်သူတွေ အခက်တွေ့ပြီး စိုးရိမ်မှုတွေ ရှိနေကြပါတယ်။ အခုလိုပြောင်းဈေးတွေကျလာတဲ့အတွက် လုပ်အားခနဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေက အမြတ်မရှိတဲ့အပြင် အရှုံးပေါ် မှာကို စိုးရိမ်နေကြရပါတယ်။
“ တစ်ကယ်လို့ဈေးမရှိတဲ့အချိန်ဆိုရင် အလုပ်သမားခေါ်တဲ့အပေါ်မှာလည်း တစ်နေ့ကို ၆၀၀၀ ကျပ် ပေးရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့တစ်ခါတစ်လေပြန်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီဈေးနှုန်းနဲ့ ဒီအလုပ်သမားခနဲ့ ပြန်ပြီးတော့ ရနိုင်မလား မရနိုင်ဘူးလား ဆိုပြီး အဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်တယ်ပေါ့။” လို့ ရုမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဖယ်ခုံမြို့နယ် နောင်လှိုင်ကျေးရွာ ကိုဘီးဒူ ကပြော ပါတယ်။
အရင်နှစ်က အခုချိန်ဆိုရင် ပြောင်းဈေး အနှိမ့်ဆုံး တစ်ပိသာ၄၁၀ ရှိပြီးတော့ ယခုချိန်မှာတော့ ၃၇၀ ကျပ် အထိ ဈေးကျ သွားပြီး တဖြည်းဖြည်းဆက်ကျသွားမှာကို ပြောင်းစိုက် တောင်သူတွေ စိုးရိမ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။“လာမယ့် အစိုးရ တက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း ကျနော်တို့ပြောင်းတောင်သူတွေအတွက် အဆင်ပြေတဲ့ဈေးနှုန်းကို တိတိကျကျသတ်မှတ်ပြီး တော့မှ တောင်သူတွေမနစ်နာအောင် တောင်သူတွေအကျိုးခံစားခွင့်က အဲ့တာလေးပဲရှိတော့ တင့်တင့်မျှတတဲ့ဈေးနှုန်းကို စီစဉ်ပေးဖို့ကျနော့်အနေနဲ့ တောင်းဆိုချင်တယ်။” လို့ ကွိုင်ငံရွာဟောင်း ကျေးရွာနေ ဦးပိုပီးယို ကပြောပါတယ်။
ပြောင်းဈေးမကောင်းလို့ လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့ ပြောင်းရုံကိုနားတော့မယ့်လို့ ဒေါးငံခါး ရပ်ကွက် (၁) ပြောင်းရုံပိုင်ရှင် ဦးမောင်ကောင်း က ပြောပါတယ်။“ ကျနော်တို့လည်း ဒီတစ်စီးတင်ပြီးရင်တော့ နားမယ်လို့တော့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ပေါ့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ ဈေးကဆက်တိုက်ကျနေတော့ နားမယ်လို့တော့ စီစဉ်ထားတယ်ပေါ့။”လို့ပြောပါတယ်။ ပြည်သူ များကတော့ ထိုပြာသနာများပြေလည်ဖို့ဆိုရင် အစိုးရမှာတာဝန်ရှိပြီး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးဖို့လိုတယ်လို့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက် ပွဲ မှာ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကနေ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီမှ စေားခူးတလေ ကပြောပါတယ်။ ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာပေါင်း (၁၀၀)ရှိတောင်သူတွေရဲ့ ကျေးရွာအလိုက် ဦးစားပေးသီးနှံတွေကို အချက်အလက်လိုက်လံကောက်ခံရာမှာ ပြောင်းသီးနှံက ဒုတိယအများဆုံး ဦးစားပေးစိုက်ပျိုးတဲ့ သီးနှံ ဖြစ်တယ်လို့ LAIN နည်းပညာအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ရဲ့ သီးနှံများရဲ့ ဈေးကွက်ချိတ်ဆက်မှု အတွက် စစ်တမ်းစာအုပ်မှာ ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ https://www.bnionline.net/mm/news-75825
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရတဲ့လူနာတွေ့ နေစဉ်နဲ့အမျှ တိုးလာနေသလို စစ်ရေးပဋိပက္ခကြောင့် ထွက် ပြေးရတဲ့ ဒေသခံတွေ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ တိုးနေပါတယ်။ တိုက်ပွဲတွေ မရပ်ရင် ကပ်ရောဂါထိန်းချုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ရခိုင်ဒေသ မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဆရာဝန် တွေက ထောက်ပြပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဒီနေ့ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းအထိ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့လူနာ ၁၂၅၈ ဦးနဲ့ သေဆုံးလူနာ သုံးဦးအထိရှိနေပြီလို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစား ဝန်ကြီးဌာန က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ပိုးတွေ့လူနာတွေ တစ်နေ့တခြားတိုးလာသလို တစ်ဖက်မှာလည်း တိုက်ပွဲတွေနဲ့ ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့် ဒီလအတွင်း ရသေ့တောင်မြို့နယ် အပါအဝင် တခြားဒေသတွေက လူပေါင်းသောင်းချီ ဘေးလွှတ်ရာကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် နေရပါ တယ်။ ထွက်ပြေးလာတဲ့ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေဟာ ရတဲ့နေရာမှာ နေထိုင်ရတာကြောင့် အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုကာကွယ်ရေး ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီ နေထိုင်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမရှိဘဲ ပိုးကူးစက်မှုကို ထိန်းချုပ်ဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေတာပါ။ အဲဒီလိုပြေးလာသူတွေဟာ ပိုမို လုံခြုံတဲ့နေရာ ရောက်နေပေမယ့် နေရာသစ်ဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုအန္တရာယ်များတဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်လို့ ရသေ့တောင်မြို့နယ်က ဆရာဝန်ဒေါက်တာ တင်မြင့်ဦး က RFA ကို ပြော ပါတယ်။ ရသေ့တောင်ကနေ ထွက်ပြေးလာရသူ အများစုဟာ စစ်တွေမြို့က သောဗိတာရာမကျောင်း စစ်ဘေးဒုက္ခသည် စခန်းနဲ့ နီးစပ်ရာ ဆွေမျိုးတွေအိမ်မှာ ခိုလှုံနေကြပါတယ်။
ရသေ့တောင်မြို့နယ် ရွှေလောင်းတင်ကျေးရွာကနေ စစ်တွေကို ရောက်လာတဲ့ ဦးငြိမ်းချမ်းကတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ထက် ကျည်ဆန်ကို ပိုကြောက်ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ လူတွေအစုလိုက် အပြုံလိုက်ထွက်ပြေးလာတာဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ထိန်းချုပ်ဖို့ အခက်အခဲဖြစ်စေတယ်လို့ စစ်တွေဆေးရုံက အထူးကုဆရာဝန် ဒေါက်တာ အောင်နိုင်လင်းက RFA ကို ပြောပါ တယ်။ ရခိုင်ဒေသမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ရခိုင် လူသားချင်း စာနာ ထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (AHCT) အတွင်းရေးမှူး ဦးဇော်ဇော်ထွန်းကတော့ အခက်အခဲကြီး နှစ်ခုနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေရသူပေါင်းကလည်း လက်ရှိအချိန်အထိ နှစ်သိန်း တစ်သောင်းကျော် လောက်ရှိနေပြီလို့ REC က ဆိုပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/rathedaung-villag ers-flee-9282020035940.html
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖားအံမြို့နယ်၊ ကော့ဒါန်းမယ်ရွာသားတစ်ဦးတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်(Covid-19) ရောဂါပိုး စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ သည့်အတွက်ကြောင့် ၎င်းနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူများအား နှာခေါင်း၊ အာခေါင် တို့ဖတ်(Swab)များကို (စက် တင်ဘာ ၂၈) တွင် ရယူပြီးစီးထားကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ နှာခေါင်း၊ အာခေါင် တို့ဖတ်များကို အမျိုးသားဓာတ်ခွဲဌာန(ရန်ကုန်)သို့ ပေးပို့ စစ်ဆေးရမည်ဖြစ်ပြီး ရောဂါပိုးရှိ မရှိ အဖြေရရန် ရက်အတိအကျ မခန့်မှန်းနိုင်ကြောင်း ကရင်ပြည်နယ်၊ ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာ ကျော်စွာမြင့် က ယခုလို ပြောသည်။“ရန်ကုန်မှာက သောင်းဂဏန်းနဲ့ စစ်ရတာကိုး။ (အဖြေသိဖို့) သုံးလေးရက် ကြာသွားတတ်တယ် ပေါ့နော်။ အရေးတကြီး လည်းဖြစ်တယ်။ ရောဂါသည်လည်း ဖြစ်တယ်ဆို ဖားအံ(ဆေးရုံ)မှာ စစ်လို့ရတာပေါ့။”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က ကော့လှိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝါးဆူးကျေးရွာ၌ ပြုလုပ်ခဲ့သော ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ-KNDP ၏ မဲဆွယ်ပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့သော ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၃ ဦးနှင့်အတူ စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ ဖားအံ တက္ကသိုလ်ဝင်းရှိ အဆောင်တစ်ခု၌ Q ဝင်ခဲ့သည့် ဝါးဆူးရွာနှင့် အခြားကျေးရွာအချို့မှ ရွာသူရွာသား ၄၇ ဦး၏ နှာခေါင်း၊ အာခေါင် တို့ဖတ်တို့ကိုမူ ယနေ့မှသာ စတင် ရယူထားခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ Q ဝင်နေသူ KNDP ၏ ဖားအံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နန်းစေးအွာ က “ကျမတို့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၃ဦးကတော့ ဒီနေ့ နှာခေါင်း၊အာခေါင်တို့ဖတ် ယူပြီးပြီပေါ့နော်။ ကျန်တဲ့သူတွေကိုလည်း အကုန်ယူထားပြီးပါပြီ။”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ကရင်ပြည်နယ် အတိုင်းအတာဖြင့် ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရန် စောင့်ကြည့်ခံထားရသူ ၅၀၀ဦးခန့်ရှိကြောင်း လည်း ဒေါက်တာကျော်စွာမြင့်က ဖြည့်စွက် ပြောဆိုသည်။ http://kicnews.org/2020/09/%e1%80%96%e1%80 %ac%e1%80%b8%e1%80%a1%e1%80%b6%e1%
ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ဖျားပိုင်း ပန်နန်းဒင်မြို့သွားသည့်လမ်းတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် တောင်များပြိုကျကာ လမ်းပိတ်ဆို့မှုရှိနေသဖြင့် အလွန်ခက်ခဲနေကြောင်း ဒေသခံများ ပြောဆိုချက်မှ သိရသည်။
မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့် စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့ နောင်မွန်းမြို့မှ ပန်နန်းဒင်မြို့သို့ သွားသောလမ်းမကြီးတွင် တောင်ကမ်းပါးများပြိုကျပြီး၊ ကြိုးတံတားလည်း ပျက်စီးသွားကြောင်း နောင်မွန်းဒေသခံ ဦး ကူရှင်မင်းထံမှ သိရသည်။“ပြီးတဲ့အပတ်မှာဘဲ မိုးတအားရွာတော့ နောင်မွန်းကျေးရွာနဲ့ ပန်းနန်းဒင်ဘက် သွားတဲ့ လမ်းမကြီးပေါ်မှာ ၃နေရာလောက်မှာ မြေပြိုကျပြီး လမ်းတွေလူသွားလို့မရအောင်ပိတ်ဆို့နေတယ်။ နောက်ပြီး ပန်နန်းဒင်ကိုသွားတဲ့ လမ်းပေါ်က ကြိုးတံတားလည်း ကမ်းပါးတွေပြိုတော့ တစ်ဖက်စောင်းသွားတယ်။ အခုက သွားလို့မရတဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့တော့ ကြားတယ်” ဟု ပြောဆိုသည်။ နောင်မွန်းမြို့မှ ပန်နန်းဒင်သို့သွားသောလမ်းတွင် ခက်ခဲနေသဖြင့် ဒေသခံများ၏ စာနပ်ရိက္ခာအတွက်လည်း များစွာအခက်အခဲရှိလာ နိုင်သောကြောင့်လမ်းအမြန်ပြုပြင်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
“အရင်နှစ်တွေမှာက ပြိုတော့ပြိုတယ်။ ဒီလောက်ဆိုးဆိုးရွားရွာမဖြစ်ဘူး။ ချောင်းရေတွေလည်း တော်တော်ကြီးတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ပျက်နေတဲ့လမ်းတွေကို အစိုးရက မြန်မြန်ဆန်ဆန် မလုပ်နိုင်သေးရင် အဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ ဒေသခံတွေက စားရေး သောက်ရေးအတွက် အင်မတန်ခက်ခဲလာမယ်လို့ ထင်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ဘက်က စားနပ်ရိက္ခာတွေက နောင်မွန်းမြို့ထဲကဘဲ လာဝယ်ယူကြတာလေ။ နောက်အဲ့မှာက တောင်ယာတွေလည်း သိပ်မလုပ်ကြဘူး။ အဲ့ကြောင့် လမ်း ပျက်နေရင် ဘယ်သူမှ လာနိုင်ကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ ပြီးရင် ကူညီထောက်ပံ့ပေးမယ့် သူတွေလည်း သွားလို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် တာဝန်ရှိတဲ့ သူတွေအနနဲ့ အချိန်သိပ်မဆွဲစေချင်ဘူး”ဟု ပြောသည်။ https://burmese.kachinnews .com/ 2020/09/28/%e1%80%95%e 1%80%94%e1%80%ba%e1%80%94%e1
ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ သိန္ဒီဟော်နန်းနှင့် မိုင်းပွန်ဟော်နန်းတို့ကို တပ်မတော် GE တပ်က ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းပေးမည်ဖြစ်ရာ ယခု အခါ နယ်မြေကွင်းဆင်းပြီး မြေပြင်အခြေအနေများကိုလေ့လာခြင်း၊ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများ ရယူခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၏ ကျိုင်းတုံနှင့်လားရှိုး ခရီးစဉ်များတွင် ရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ရာ ယင်းအဖွဲ့များက ဟော်နန်းများကို ပြင်ဆင်ပေးရန် တင်ပြမှုများရှိသဖြင့် အထက်ပါ အတိုင်း စတင် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော်မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောသည်။“သမိုင်းကြောင်းတွေရယ်၊ အခုလောလောဆယ် လက်ရှိ ရှိနေတဲ့ ပုံလေးတွေရယ်၊ သိန္ဒီဟော်နန်းကတော့ အစအဆုံး ပြင်ရ မှာဆိုတော့ သူက ကြည့်နေတုန်းပဲ ရှိသေးတယ်။ မိုင်းပွန်ဟော်နန်းကတော့ ဘာတွေ ပြင်ရမလဲဆိုတာ ထည့်ရေးထားတာ ရှိတယ်။ ပြင်မှာကတော့ GE တပ်က ပြင်မှာ”ဟု ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောသည်။
သိန္ဒီဟော်နန်းကို ရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအသင်းက ထိန်းသိမ်းထားပြီး ယင်းဟော်နန်းကို စော်ဘွားကြီးကိုယ်တိုင်က စာ ချွန်တော့်ဖြင့် ၎င်းတို့အသင်းသို့ လွှဲပြောင်းပေးထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုအချိန်တွင် ဟော်နန်းမှာ အုပ်ခုံသာသာရှိပြီး အစိုးရ ကလည်း ၎င်းတို့၏ ထိန်းသိမ်းမှုအောက်တွင် မရှိသဖြင့် ပံ့ပိုးကူညီမှု မပေးနိုင်ကြောင်း သိန်းနီမြို့ ရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အသင်း ဥက္ကဌ ဦးစိုင်းမြင့်ထွန်းက ပြောသည်။“ကျနော်တို့ သွားတောင်းတာ မဟုတ်ဘူး။ အခုတော့ ကျနော်တို့ကိုခေါ်တွေ့ တာပေါ့။ ကျနော်တို့ ဖြစ်ချင်တဲ့ ပုံစံလေးတွေ တပ်ချုပ်ဆီကို တင်ပြတော့ ဝိုင်းလုပ်ကြတာပေါ့။ ကူညီပေးပါ့မယ်ဆိုပြီ ရခဲ့ တယ်။ GE တပ်ကတော့ Survey ဆင်းနေတယ်။ ကျနော်တို့ကလည်း ဒါက တည်ဆောက်ရေး ကော်မတီ ဖွဲ့ ထားပြီးသား ရှိပါတယ်”ဟု ဥက္ကဌ ဦးစိုင်းမြင့်ထွန်းက ပြောသည်။
မိုင်းပွန်ဟော်နန်းမှာလည်း အဆောက်အဦမှာ ပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီး လိုအပ်သည့် အပိုင်းလိုက်ပြုပြင်မည်ဆိုပါက အမိုးမိုးခြင်း၊ ကြမ်းခင်းခင်းခြင်း၊ ရေနံချေးသုတ်ခြင်း၊ ကွန်ကရက်တိုင်အဖြောင့် ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ် လျက်ရှိ ကြောင်း၊ ယင်းဟော်နန်းကိုပြုပြင်ရန် ကျန်ရှိသူ မိသားစုဝင်များ၏ သဘောထားကို ရယူထားကြောင်း သိရသည်။ ရှမ်းပြည် နယ်ရှိ ဟော်နန်းများမှာ မိုင်းပွန်ဟော်နန်း၊ ကျိုင်းတုံဟော်နန်း၊ ကျေးသီးဟော်နန်း၊ လဲချားဟော်နန်း၊ သီပေါဟော်နန်း၊ မိုင်းပန်ဟော်နန်း၊ မိုင်းပန်ဟော်နန်း၊ ညောင်ရွှေဟော်နန်း၊ သိန္ဒီဟော်နန်း၊ မိုင်းနောင်ဟော်နန်း၊ မိုးနဲဟော်နန်း၊ မိုးမိတ် ဟော်နန်း၊ မောက်မယ်ဟော်နန်၊ မိုင်းကိုင်ဟော်နန်းနှင့် ပင်လောင်းဟော်နန်းတို့ ဖြစ်ကြသည်။ https://burma.irrawaddy .com/news/2020/09/28/230630.html
ကယားပြည်နယ်၊ ဖားဆောင်းမြို့တွင် ကရင်အမျိုးသားပါတီက ဖားဆောင်း-မော်ချီး လမ်းတလျှောက် အင်းအား ရာချီ လှည့်လည် မဲဆွယ်ပွဲကို စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်းတွင် ပြုလုပ်လျှက်ရှိကြောင်း ကရင်အမျိုးသားပါတီ ဖားဆောင်း မြို့နယ်၊ ပြည်နယ်အမှတ်-၁ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း စောထောနေမူးက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။ ၎င်းက “ ဒီနေ့မနက်ပိုင်း မှာ ဝတ်ပြုဆုတောင်းပြီးတော့ ဖားဆောင်းကနေ မော်ချီးကို ကျနော်တို့ ကားတွေ၊ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ တက်လာတယ်။ လမ်းက ကရင်များတဲ့ ရွာတွေမှာ ဟောပြောတယ်။ ဟောပြောတယ်ဆိုတာက အသံသွင်းထားတဲ့ အခွေတွေကို ဖွင့်ပြတာ။ မော်ချီး ရောက်တော့ မိုးအရမ်းရွာတယ်။ ကျနော်အခု ပြန်ဆင်းလာပြီ” ဟု ပြောသည်။
ကရင်အမျိုးသားပါတီ၏ ယနေ့မဲဆွယ်ပွဲတွင် ကား ၁၇ စီး၊ ဆိုင်ကယ် အစီး ၃၀ နှင့် လူအင်အား ၂၀၀ ကျော်ပါဝင်ကာ ပါတီလက်ကမ်းစာစောင်များဝေငှခြင်း၊ ပါတီ တီရှပ်များဝေငှခြင်းများလုပ်ဆောင်ကာ ဒေသခံ ကရင် ပြည်သူများကလည်း ကြိုဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု မဲဆွယ်ပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သူများက ပြောသည်။ ကရင်အမျိုးသားပါတီ အနေဖြင့် ကယားပြည်နယ် (ကရင်နီပြည်) ဖားဆောင်းမြို့နယ်တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်တွင် စောဆာကဘရူရှီး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ဦးကျော်စိုး (ခ) ဘိုဘိုရွှေနှင့် ပြည်နယ် လွှတ်တော် အမှတ် -၁ တွင် စောထောနေမူးတို့ အသီးသီးဝင်ပြိုင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ကယားပြည်နယ်တွင် ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်တို့ စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့ တွင် အင်အားရာချီကာ လွိုင်ကော်နှင့် ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တို့ တွင် မဲဆွယ်မှုအသီးသီး ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ http://kicnews.org/2020/09/%e1%80%96%e1%80 %ac%e1%80% b8%e1%80%b1%e1%80%86%e1%
အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် ချင်းပြည်နယ်တောင် ပေါ်ဒေသတွင် တာဝန်ကျရာကျေးရွာများရှိ မဲရုံများသို့ သွားရောက် ကြမည့် ကျောင်းဆရာ/ဆရာမများအနေဖြင့် အခက်အခဲများစွာရှိနေကြောင်းသိရသည်။
ဖလမ်းမြို့နယ် ဗန်ဗား အ.လ.က ကျောင်းဆရာမ ဒေါ်ဝေဝေတင်က “ကျောင်းဖက်ကလည်း အောက်တိုဘာလ (၁) ရက်နေ့ ရောက်ရမယ်လို့ ပြောတယ် အထက်ကနေ အမိန့်စာနဲ့ ဖြစ်တဲ့အတွက် မလာရင်လည်း ကိုယ့်ဘာသာ ဖြေရှင်းလို့ပြောတယ် နို့်ဆို့အရွယ်ကလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ အန္တရယ်များတယ် လူလွတ်ဆိုရင်တော်သေးတယ် ကလေးနဲ့ဆိုတော့ အခုလိုမျိုး ကာလ မှာ လုံးဝအဆင်မပြေဘူး ကားတွေကလည်း မရှိဘူး အောက်တိုဘာလ (၁)ရက်နေ့ ရောက်ပြီးတော့ Quarantine ကို (၂၁) ရက် ကိုယ့်အိမ်ယာမှာ နေရမယ်ပေါ့ အဲလိုမျိုးပြောတယ်”ဟုဆိုသည်။
ကိုဗစ်ကာလတွင် ချင်းပြည်နယ်ဖက်သို့ မဲရုံကိစ္စနှင့် ပက်သက်ပြီး တာဝန်ထမ်း ဆောင်မည့် ကျောင်းဆရာ/ ဆရာမများတွက် ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံး၊ ပြည်နယ် ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေး ကော်မတီများနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုများ လုပ်နေကြောင်း ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အရာရှိ ဦးလင်းကျော်က ပြောသည်။ ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အရာရှိ ဦးလင်းကျော်က “ကျတော်တို့နှစ်ပိုင်းခွဲပြီး စဉ်းစားပါတယ် ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးကနေ အောက်တိုဘာ(၁) ရက်နေ့ ခေါ်တာရှိတော့ ဒီလိုကာလမှာ ကန့်သက်ချက်တွေကို တော့ ဆရာ/ဆရာမတွေဖက်ကတော့ အခက်အခဲတော့ ကြုံရမှာဘဲ ကြုံရတဲ့အခါမှာ လည်း ဖြေလျော့နိုင်ဖို့ ပြည်နယ်အဆင့် ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေး ကော်မတီလမ်းညွှန်ချက်က ဘာရှိမလဲမသိရသေးဘူး အစည်း အဝေးမှာတော့ ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးထားတယ် နောက်ဆုံးမဖြစ်မနေ လာပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့ ဆရာ/ဆရာမ တွေ ရှိရင် ဒီဖက်မှာရှိတဲ့ မဲစာရင်းမှာ ပါတဲ့သူ အများက လေးစားယုံကြည်တဲ့သူ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လောင်း တွေနဲ့ အမျိုးမတော်တဲ့ မဲစာရင်းမှာပါတဲ့ သူတွေကို တာဝန်ပေးနိုင်ဖို့ကို လျာထားတာတွေရှိတယ်”ဟုပြောသည်။
ချင်းပြည်နယ်တောင်ပေါ်ဒေသဖက်တွင် ကျောင်းဆရာ/ဆရာမတာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်အများစုမှာ မြေပြန့်ဒေသမှ အများစု ဖြစ်ပြီး ကိုဗစ်ကာလတွင် ခရီးသွား စသည့် ကန့်သက်ချက် များစွာရှိသည့်တွက် တာဝန်ကျ ဒေသဖက်သို့ သွားရောက်ရန် အခက်ခဲများစွာရှိကြောင်း သိရသည်။ https://www.chinworl d.org/2020/09/28/%e1%80%81%e1%80%bb%e1 %80%84%e1%80%ba%e1%80
မွန်အမျိုးသားပညာရေးကျောင်းတွေက ဆရာ ဆရာမတွေကို အစိုးရမှ လစာထောက်ပံ့ပေးဖို့ အပါအဝင် အချက်သုံးချက်ကို တောင်းဆိုထားတယ်လို့ မွန်အမျိုးသားပညာရေးကော်မတီက ပြောပါတယ်။ ဒေသခံတွေရဲ့ အလှူငွေတွေနဲ့ ရပ်တည်နေရတဲ့ မွန်အမျိုးသားကျောင်းတွေဟာ ဘဏ္ဍာရေးအခက်အခဲရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အစိုးရ ကျောင်းဆရာတွေကို ပေးတဲ့ လစာရဲ့ (၄၀)ရာခိုင်နှုန်းကို မွန်အမျိုးသားကျောင်းဆရာတွေကို ထောက်ပံ့ ပေးဖို့ ၊မွန်အမျိုးသားကျောင်းတွေလည်း အစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့မှု ရရှိဖို့ နဲ့ ပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့ ကျောင်းတွေကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်ပေးဖို့ အစရှိတာတွေကို တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“အကုန်လုံးညိနှိုင်းထားပြီးပြီး သဘောတူတယ်။ အဓိကတော့ ကျောင်းဆရာတွေရဲ့ ထောက်ပံ့လစာကို (၄၀) ရာခိုင်နှုန်း လောက် ပေးဖို့ပေါ့။ ဥပမာ အစိုးရ ကျောင်းဆရာတွေက တစ်သိန်းရှစ်သောင်းရရင် အာ့တာရဲ့ လေးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက် ကို ထောက်ပံ့ပေးဖို့ပေါ့ ကျန်တာက အလှူရှင်တွေရဲ့ ထောက်ပံ့မှုနဲ့ ပေးမယ်ပေါ့”လို့ မွန်အမျိုးသားကျောင်း တာဝန်ခံဆရာ မင်းအောင်ဇေက ပြောပါတယ်။ မွန်အမျိုးသားကျောင်းတွေဟာ မြန်မာစကားနားမလည်တဲ့ ဒေသခံ တိုင်ရင်းသား ကလေး တွေကို မိခင်မွန်ဘာသာစကားအခြေပြုကာ မူလတန်းအဆင့်မှစတင်ပြီးတော့ မြန်မာစကားကိုသင်ကြားပေးနေတာ ဖြစ်ပါ တယ်။ မူလတန်းပြီးမြောက်ပါက မြန်မာစကားတတ်မြောက်ပြီးဖြစ်လို့ အလယ်တန်းအဆင့်မှာ မွန်စာနဲ့ မွန်သမိုင်းကို ထပ်ဆောင်းဘာသာအနေနဲ့ သင်ကြားနေသလို အစိုးရသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေကိုလည်းသင်ကြားပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မွန်အမျိုးသားကျောင်းတွေရဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေဟာ လစာနည်းပါးတဲ့အပြင် အစိုးရရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုကိုလည်း မခံရတာ ကြောင့် စေတနာရှေ့ထားပြီးတော့သာ လုပ်ကိုင်နေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။“ဆရာတွေက စေတနာ ရှေ့ထားပြီးတော့ လုပ်နေကြတာပါ လစာက နည်းတယ်လေ အစိုးရရဲ့ အသိမှတ်ပြုမှုကိုလည်း မခံရဘူး စိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲ လုပ်နေရတာပါ”လို့ မွန်ပညာရေးဌာန(ဗဟို)တာဝန်ခံ မိစာထားက ပြောပါတယ်။ မွန် ကရင် တနင်္သာရီ ဒေသတွေမှာတော့ မွန်အမျိုးသားကျောင်း ၁၃၃ ကျောင်းရှိပြီး ဆရာ ဆရာမ ၇၀၀ ကျော်နဲ့ ကျောင်းသူ ကျောင်းသား တစ်သောင်းကျော်တို့က ပညာသင်ကြား နေပါ တယ်။ https://www.bnionline.net/mm/news-75823
၂၀။ ကပ်ဘေးကြောင့်အပစ်ရပ်ချင်ပေမယ့် ရခိုင်မှာတော့ လက်တွေ့မဖြစ်နိုင်လို့ တပ်မတော်ပြောကြား
ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ လက်ရှိကာလမျိုးမှာ တပ်မတော်က တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ကြေညာ သင့်တယ်လို့ ဝေဖန်ကြပေမယ့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ AA အဖွဲ့က တိုက်ခိုက်နေတာရှိတဲ့အတွက် လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်လို့မရဘူးလို့ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က အင်တာနက်အွန်လိုင်းကနေ ဒီနေ့ နေပြည်တော်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ သတင်းထောက် တစ်ဦးရဲ့ မေးခွန်းကို ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
ကပ်ဘေးကာလအတွင်း ရခိုင်မှာ တပ်မတော်က ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့ တိုက်ပွဲတွေကို လျှော့ချဖို့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း တွေအပါအဝင် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေက တောင်းဆိုနေတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ RFA သတင်းဌာနက မေးမြန်းရာမှာ တပ်မတော်ဘက်က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာတွေမရှိပဲ AA အဖွဲ့က စစ်ရေယာဉ်တွေကို ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်တဲ့အတွက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေရှိပြီး ခုခံကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေ ရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် ထဲမှာ သြဂုတ်လ လယ်လောက်ကစပြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး တစ်ကျော့ပြန်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အခုဆိုရင် ရန်ကုန်နဲ့ ပြည်နယ်တိုင်း လေးခုတို့မှာ ကူစက်နှုန်းတွေ မြင့်တက်နေပါတယ်။ ဒေသခံတွေရဲ့ ပြောဆိုချက်အရ မေယုမြစ်မှာရှိတဲ့ တပ်မတော်ဇက် ရေယာဉ်က လက်နက်ကြီးတွေ၊ လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်တာတွေကြောင့် ရွာထဲကို လက်နက်ကြီးကျည်ကျပြီး ရွာသား တွေ သေဆုံးတာ၊ ဒဏ်ရာရတာတွေရှိလို့ ကြောက်လန့်ပြီး ထွက်ပြေးလာရတာဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တရားစီရင်ရေးစနစ်ကို စိန်ခေါ်တာ၊ အချုပ်အခြာအာဏာကို စော်ကားတဲ့သဘောမျိုး ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် အစိုးရကို ပြန်လွှဲပြောင်းပေးသင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/cannot-stop-war-in-rakh ine-09262020063720.html
၂၁။ သီပေါတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးဖမ်းဆီးစဉ် အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁ ဦး ကျဆုံး
ရှမ်းပြည်နယ်၊ သီပေါမြို့မှာ မနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းက မူးယစ်ဆေးဝါးဖမ်းဆီးရာမှာ အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်တာကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင် ၁ ယောက် ကျဆုံးခဲ့တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့က တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ သတင်းအရ သီပေါတံတားအဝင်မှာ လားရှိုးမြို့ကနေ သီပေါမြို့ဘက်ကို မောင်းနှင်လာတဲ့ Mark II အမျိုးအစား မော်တော်ယာဉ်ကို စစ်ဆေးဖို့ တားဆီးခဲ့တာမှာ နောက်ပြန်လှည့်မောင်းနှင်ထွက်ပြေး သွားပါတယ်။
အတားအဆီးတွေနဲ့ ပိတ်ဆို့ခဲ့တာကြောင့် ကားရပ်တန့်ပြီး အမျိုးသား ၃ ယောက် ဆင်းလာကာ ၁ ယောက်က သေနတ် အတိုနဲ့ ပစ်ခတ်လို့ အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
သေနတ်နဲ့ပစ်တဲ့ အမျိုးသားက ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီး ကျန် ၂ ယောက်ကိုတော့ အရှင်ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ ဆိုပါ တယ်။ အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တာကြောင့် မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့က ရဲတပ်ကြပ်ကြီး အေးလွင်မှာ ကျည်ထိ မှန်ကျဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သူတွေကတော့ သီပေါမြို့နယ် နမ့်လန်ရွာနေ စိုင်းစံဌေးနဲ့ ကျောက်မဲမြို့နယ် မိုင်းတင်းရွာ နေ စိုင်းမွမ်းဦးတို့ဖြစ်ပြီး ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားသူကတော့ မိုင်းကိုင်မြို့နယ် ရပ်ကွက် ၂ မှာ နေတဲ့ စိုင်းစောထွန်း ဖြစ် တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကားပေါ်ကနေ ဘိန်းဖြူ ၁၁၀ ဂရမ်၊ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ၁၁,၉၉၅ ပြား၊ ပွိုင့် ၂၂ ကျည် ၁၇ တောင့် တို့ကို သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့ပြီး ကျဆုံးသွားတဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုကို လူမှုရေးထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားပါ တယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/413296
၂၂။ တစ်သီးပုဂ္ဂလ ဝင်ရောက်မည့်သူ ပြည်နယ်အတွင်း ၁၃ ဦးရှိ
ကယားပြည်နယ်အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့်သူတွေထဲမှာ တစ်သီးပုဂ္ဂလအနေဖြင့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် မည့် လူဦးရေသည် ၁၃ ဦးရှိပါတယ်။ လက်ရှိ ဖရူဆိုမြို့နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော်အမှတ်(၅) ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ရှားမူ က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေ ပြန်လည်ရွေးခြယ်ခြင်းမခံရတဲ့အတွက် တစ်သီးပုဂ္ဂလအနေဖြင့် ပြန်လည် ဝင် ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ” ပြည်သူပေးလာတဲ့တာဝန်တွေကို တစ်ခေါက်မဟုတ်ရင် နှစ်ခေါက်၊ နှစ်ခေါက်မဟုတ်ရင် သုံးခေါက် ရအောင်လုပ်ဆောင်ပေးမယ်။ အရင်တုန်းကလည်း ဒီလိုပဲလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ ဘာလုပ်ပေးမယ်၊ ညာလုပ်ပေးမယ် အန်တီကတိမပေးဘူး ပြည်သူက တောင်းဆိုလာတဲ့ဟာ အန်တီလုပ်ပေးမယ်။ ″ လို့ ဒေါ်ဆားမူက ပြောပါတယ်။
တစ်သီးပုဂ္ဂလအနေဖြင့် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ခွန်းရို မောင်းဒို ကလည်း ၎င်းအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရသည့် အကြောင်းရင်းကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ ″ အဓိက ကျနော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ၂၀၂၀မှာ နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် တောင်သူလယ်သမားအရေး၊ အလုပ်သမားအရေးကို ထိထိရောက် ရောက်နဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး၊ ကျနော်တို့ တောင်သူလယ်သမားက အရမ်းကြီးနိမ့်ကျတာကော ကျနော်တို့ ကယားပြည်နယ် မှာလေး။ အဲ့ဒါ ကျနော်တို့ တောင်သူလယ်သမားတွေ အများကြီးလိုအပ်တာကိုး။ ကျနော်တို့ပြည်နယ်မှာ အလုပ်လက်မဲ့တွေ အများကြီးရှိတာကို။ ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။ ကျနော်တို့တွေ အပင်လေးတွေက ဖြစ်လာတဲ့ဟာ ဈေးကွက်မရှိတာတွေလည်း ကျနော်တို့တွေ့ရတယ်။ ဒါ တောင်သူတွေ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ အခက်အခဲပေါ့နော။ ဒါတွေကို လုပ်ပေးမယ်လို့ ကျနော်ရည်ရွယ် ချက်ရှိပါတယ်။″လို့ ပြောပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကယား(ကရင်နီ)ပြည်တွင်း ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ပါတီ (၁၃)ပါတီရှိပြီး ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအပါအဝင် ၂၇၂ ဦး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့်အထဲမှာမှ တစ်သီးပုဂ္ဂလကအနေနဲ့ ၁၃ ဦးပါဝင်ပါတယ်။ မြို့နယ်အသီးသီးမှ တစ်သီးပုဂ္ဂလ အနေဖြင့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေက လွိုင်ကော်မြို့နယ်မှာ (၁)ဦး၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်မှာ (၁)ဦး၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်တွင်(၅)ဦး၊ ဘောလခဲမြို့နယ်မှာ (၁)ဦး၊ ဖားဆောင်းမြို့နယ်(၂)ဦး၊ မယ်စဲမြို့နယ်(၂)ဦးနှင့် ရှားတောမြို့နယ် (၁)ဦး စုစုပေါင်း ၁၃ဦးဖြစ်ပါတယ်။ https://www.bnionline.net/mm/news-75824
လက်ရှိကရင်ပြည်နယ်တွင် Covid-19 ရောဂါ ကူးစက်မှု အနည်းငယ်တိုးလာသည့်အတွက် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာအများစုသည် Covid ရောဂါပိုးကို ကာကွယ်တားဆီးသည့်အနေဖြင့် ပြင်ပမှ လူဝင်လူထွက် သွားလာခွင့်ကို ပိတ်ထားသည်ဟု သိရသည်။ မိမိကျေးရွာအတွင်း ကပ်ရောဂါကူးစက်မှု မရှိစေရန်အတွက် ပြင်ပဧည့်သည်များ ကျေးရွာ အတွင်း ဝင်ခွင့်မပေးသည့် ရွာ များရှိသလို ကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်သည့်သူများကလည်း စားဝတ်နေရေးအတွက် လိုအပ်မှ သာ အပြင်ထွက်ပြီး ထွက်ပါကလည်း သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ ထောက်ခံစာပါမှ ထွက်ခွင့်ပေးကြောင်းလည်း သိရသည်။ အဆိုပါ တင်းကြပ်ထားမှုသည် မြို့ပြနှင့် နီးစပ်သည့် ကျေးရွာများမှ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူနှင့် နီးစပ်သည့် ကျေးရွာ အချို့အပြင် အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ နှစ်ဖက် ရောနှောအုပ်ချုပ်နေသည့် ကျေးရွာများတွင် ပို၍ တင်းကြပ်ထားကြောင်းလည်း သိရသည်။
KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေ ကော့ကရိတ်တောင်ပိုင်းတွင် ဒေသခံများ Covid ရောဂါ မကူးစက်ရန်အတွက် ကော့ကရိတ်နှင့် မြဝတီမြို့များသို့ သွားခွင့်မပြုသလို ကော့ကရိတ်မြို့နယ် တောင်ပိုင်းနယ်မြေတစ်ခုလုံးကို ပိတ်ပင်မှု(Lock Down) ချထား ကြောင်းလည်း သိရသည်။ KNU ကော့ကရိတ်မြို့နယ် Covid ၁၉ အရေးပေါ်တုန့်ပြန်ရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး-၂ မန်းမြအေး က “အခု မြဝတီမှာ ပိုးတွေ့လူနာတိုးလာတယ်။ အဲဒီပိုးတွေ့လူနာနဲ့ ထိစပ်တဲ့လူတွေကလည်း ကော့ကရိတ်မြို့ မှာ သွားလာတာရှိတာ ကြောင့် ကျနော်တို့ ကော့ကရိတ်တောင်ပိုင်းတစ်ခုလုံးမှာ မြို့တွေကို လုံးဝ ပေးမသွားတော့ဘူး။ ကျနော်တို့ ဒီလိုလုပ် တာကလည်း အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းလည်း သူတို့အားပေးတယ်။ ဒါက ကိုယ့်ပြည်သူလူထုတွေကို ကြိုတင်ကာကွယ် ပေးထားတာပဲ။”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
“အောက်ခြေမှာတော့ အဲလိုသွားလာကန့်သတ် စီစစ်တာတွေ ရှိတယ်လို့ သိရတယ်။ တရားဝင်တော့ ကျနော်တို့ စာထုတ် ထားတာတော့ မရှိဘူး။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင် အားကစားနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ကနေ ထုတ်ပြန်ထားတာတို့ စသဖြင့် အဲဒီလိုပေါ်မှာပဲ ကျနော်တို့က ထုတ်ရတာပေါ့နော်။ အခုတလော ကျေးရွာ သော်လည်းကောင်း၊ ကန့်သတ်တားဆီးတာတို့ စသဖြင့် ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ညွန်ကြားထားတာတော့ မရှိပါဘူး။”ဟု ကေအိုင်စီ သို့ ပြောသည်။ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဌာနများမှ Covid-19 ကာကွယ် ထိန်းချုပ်တား ဆီးရေးအတွက် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ထုတ်ပြန်ထားခဲ့သော ပြည်သူသို့ ပန်ကြားချက်၊ အမိန့်၊ အမိန့်ကြော် ငြာစာ၊ ညွှန်ကြား ချက်များအား အောက်တိုဘာလ ၃၁ရက်နေ့အထိ ရက်တိုးမြှင့် သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ထားပါကြောင်း COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီက စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်(ယမန်နေ့) တွင် အသိပေး ကြေညာ လိုက်သည်။ http://kicnews.org/2020/09/%e1%80%80%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူဆယ် (၁၀၅) မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန်တွင် ကားသမားတဦးထံ ကိုဗစ်-၁၉ တွေ့ရှိကြောင်း စုံစမ်း သိရသည်။ အဆိုပါ ကားသမား၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာကို မူဆယ်ဆေးရုံတွင် စစ်ဆေးခဲ့ရာ ကိုဗစ်-၁၉ (positive) တွေ့ရှိပြီး၊ မန္တလေးသို့ ဓာတ်ခွဲနမူနာထပ်မံစစ်ဆေးရန် ပို့ထားကြောင်း မူဆယ်မြို့ ဂရုဏာလူမှုရေး အသင်းမှ ဦးသောင်းထွန်း က သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။ အဆိုပါ ကားသမားသည် ကျောက်မဲမြို့တွင် နေထိုင်သည့် အသက် ၃၁နှစ် အရွယ် ဖြစ်ပြီး၊ ယမန်နေ့(စက်တင်ဘာ ၂၈) ရက် တွင် အနံ့မရခြင်း၊ ခေါင်းနှောက်ခြင်း၊ မောခြင်း စသည့် ဝေဒနာခံစားရသဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ ပိုးရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ရာ ကိုဗစ်-၁၉ Positive တွေ့ရကြောင်း ဦးသောင်းထွန်း က ပြောသည်။
ထိုကားသမားထံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်ကြောင်းကို မူဆယ်ဆေးရုံ မှဆရာဝန်ကြီး ကိုယ်တိုင် ပြောကြားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် သေချာရန် အတွက် မန္တလေးကို ထပ်မံပို့ဆောင်စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း လည်း သိရသည်။“မန္တလေးကို ပို့တာက သေချာအောင်လို့ပါ။ ဒီနေ့ ည အဖြေပါချင်ပါမယ်။ ဒါပေမယ့် မူဆယ် ဆေးရုံကတော့ Positive ဆိုတာ အတည်ပြုတယ်” ဟု ဦးသောင်းထွန်း ကဆိုသည်။ ထို ကာသမားနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သည့် ကား (၄) စီး မှာ ကားသမား ၆ ဦးရှိပြီး ၎င်းတို့ကိုလည်း ဓါတ်ခွဲနမူနာ စစ်ဆေးရန် ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။“သူနဲ့ ထိတွေ့ ဆက်စပ်သူက အားလုံး ကား (၄) စီးမှာ သူအပါအဝင်ဆို ၇ ဦးပါ။ ကျန်တဲ့သူတွေကိုလည်း ဆေးစစ်ဖို့ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ၁၀၅ မိုင်မှာပဲ ကားတန်းနေတုန်းပဲ ရှိသေးတယ်” ဟု ဦးသောင်းထွန်း ကပြောသည်။
ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး မူဆယ်ဆေးရုံမှ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊တားဆီးရေး မှ ဆရာဝန်များကို သျှမ်းသံတော်ဆင့် မှ ဆက်သွယ်ခဲ့ရာ ဖုန်းကိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့သည် မြန်မာ – တရုတ် နယ်စပ်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံး ကုန်သွယ်ရေးဇုန်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်သို့ဝင်မည့် ကုန်ကားများသည် ယာဉ်မောင်း အစားထိုး မောင်းရ ကြောင်းသိရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/18688
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့မှာ မောင်တောခရိုင်ရွေးကောင်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ အပါအဝင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရ သူ လူနာသစ် ၈ ဦးနဲ့ ဘူးသီးတောင်မြို့မှာ လူနာသစ် ၂ ဦး ထပ်တိုးလာပါတယ်။ မောင်တောမြို့နယ် ကိုဗစ်-၁၉ ကာ ကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှူး ဦးအောင်ရဲက “ဟုတ်ပါတယ်။ ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မ ရှင် ဥက္ကဋ္ဌ အပါအဝင် မောင်တောမှာ လူနာသစ် ၈ ဦး ရောဂါပိုးထပ်တွေ့တယ်။ ဆေးရုံကဆင်းတာက ၁၃ ဦးရှိတယ်။ ကျန်တာကတော ၂၀ ဦးကျန်တယ်။”လို့ ပြောပါတယ်။
မောင်တောခရိုင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟာ အနံ့မရတာကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ ၆ ရက်လောက်က ဆေးရုံသွားပြရာမှ သူ့ကို Home Quarantine နေထိုင်စေခဲ့ပြီး သူရဲ့ နှာခေါင်းနဲ့ အာခေါင်တို့ဖတ်တွေကို စစ်ဆေးရာမှာ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက် ညနေ ၈နာရီ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိကြောင်း သိရှိခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကို မောင်တောခရိုင်ပြည်သူဆေးရုံကြီးရဲ့ အထူးကြပ်မတ်ဆောင် မှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေပြီး ကျန်းမာနေတယ်လို့ ခရိုင်ကျန်းမားရေးဌာနက သိရပါတယ်။ မောင်တောမြို့က ကိုဗစ်-၁၉ လူနာ ၈ ဦးကတော့ မောင်တောခရိုင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ၁ ဦး၊ ဝေသာလီကျေးရွာသား ၂ ဦး၊ မြို့မ ကညင်တန်း ကျေးရွာသား ၂ ဦး၊ နယ်စည်းမခြားဆရာဝန်များအသင်းMFS မှ ပိုးတွေ့သူရဲ့ မိသားစုဝင် ၂ ဦးနဲ့ အနံ့မရတဲ့အတွက် စစ်ဆေးရာမှ ပိုးတွေ့သူအမျိုးသမီး ၁ ဦး တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
မောင်တောခရိုင်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူတွေ ဒုတိယလှိုင်းအဖြစ် သြဂုတ် ၂၆ ရက်မှ စတင်တွေ့ရှိလာရာ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်အထိ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ မောင်တောမြို့မှာ ၅၉ ဦး၊ ဘူးသီတောင်မြို့မှာ ၂၉ ဦး စုစုပေါင်း ၈၈ ဦးအထိ ရှိလာနေတာပါ။ http://burmese.dvb.no/archives/413293
ကိုဗစ်-၁၉ ကာလမှာ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ကုန်တင်ယာဉ် တစ်ရက်လျှင် ကားအစီးရေ (၁၅၀) ဝန်းကျင် သာ ပို့ဆောင်နိုင်ကြောင်း သစ်သီးဝလံ ကုန်စည်ဒိုင် မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။ သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့နယ်ရှိ မြန်မာ – တရုတ် နယ်စပ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ဘက်မှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ သည့်ကုန်တင်ယာဉ် တစ်ရက်လျှင် ကားအစီးရေ (၁၅၀) ခန့်သာ ရှိကြောင်း မူဆယ် ၁၀၅ မိုင် သစ်သီးဝလံ ကုန်စည်ဒိုင် ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင် က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကိုပြောသည်။“တစ်ရက်ကို ကား အစီး (၁၅၀) လောက်ပဲ ဝင်လို့ရတယ်။ တန်းစီ ထားတဲ့ ကားတွေက ၃၀၀ လောက်ရှိတယ်။ အကုန်ဝင်လို့ မရဘူး။ ” ဟု ဦးခင်မောင် ကပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်သို့ဝင်မည့် ကုန်ကားများသည် ယာဉ်မောင်း အစားထိုးမောင်းရသဖြင့် အခက်အခဲရှိပြီး အချိန်ကုန် ကြောင်း ၊ တရုတ်ပြည်သို့ဝင်ရန် အတွက် တစီးလျှင် တပတ်စောင့်ဆိုင်းရကြောင်း လည်း ဦးခင်မော်ငက ပြောသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ မဖြစ်ခင် ကာလတွင် မြန်မာ မှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ တစ်ရက်လျှင် ကုန်တင်ယာဉ်ပေါင်း (၆၀၀) ဝန်းကျင်ခန့်ရှိကြောင်း သိရ သည်။“ကိုဗစ် မဖြစ်ခင်ကတော့ ကုန်တင်ယာဉ်တွေ တစ်ရက် ၅၀၀ ၊ ၆၀၀ လောက် တရုတ်ဘက်ခြမ်း ဝင်လို့ရတယ်”ဟု ဦးခင်မောင် ကပြောသည်။ ရွှေလီမြို့မှာ ကိုဗစ် -၁၉ အတည်ပြု လူနာရှိသည့်အတွက် ရွှေလီ၊ ကျယ်ဂေါင်နဲ့ ဝမ်တိန်မြို့ တို့မှာ နေထိုင်သည့် ပြည်သူ အားလုံးကို ကိုဗစ်-၁၉ စစ်ဆေးပေးခဲ့ပြီး ပိုးတွေ့လူနာ မရှိသည့်အတွက် တရုတ်ဘက်မှ Lockdown ဖြေလျော့ပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
မူဆယ် (၁၀၅) မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးသော ကုန်သွယ်ရေးဇုန် တစ်ခုဖြစ်သည်။မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ် ဝင်၊ ထွက် ဂိတ်များတွင် ကုန်ပစ္စည်း စီးဆင်းမှု သာဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး၊ လူဝင် ၊ လူထွက်များကို ဧပြီလ နှောင်းပိုင်း က စတင်ပြီး ပိတ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ https://burmese.shan news.org/archives/18671
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးစခန်း တခုဖြစ်သည့် တာချီလိတ်- မယ်ဆိုင် ကုန်သွယ်ရေး အကန့်အသတ်များကို ပြန်လည် ဖြေလျှော့ရန် ၂ နိုင်ငံ သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ နှစ်နိုင်ငံမှ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး တာဝန်ရှိ သူတို့က ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်တွင် အလွတ်သဘော တွေ့ ဆုံ ညှိနှိုင်းပြီးနောက် စက်တင်ဘာလ ၂၈ (ယနေ့) တွင် ထပ်မံ ဆွေးနွေးကာ သဘောတူညီချက်များ ရရှိခဲ့ကြောင်း တာချီလိတ် ကုန်သွယ်ရေးတာဝန်ခံ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစိန်ဝင်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။“အကန့်အသတ်တွေ လုပ်တာမှာနှစ်ဖက် နားလည်မှု လွဲနေတဲ့ကိစ္စတွေ ပြန်လည်သွား တယ်။ ဒီဘက်က လျှော့ချပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ တချို့အခွန်တွေက ထိုင်းအစိုးရက ကိုဗစ် စဖြစ်ကတည်းက လျှော့ချ ပေးထားပြီးပေါ့။ ဒါပေမယ့် အောက်ခြေ မှာက ဒီအတိုင်း ကောက်နေတာမျိုး ဖြစ်တာကို သူတို့ စိစစ်ပေးမယ်လို့ ပြောသွား တယ်”ဟု ဆိုသည်။
ယင်းကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုထားသော ကုန်တင်မော်တော်ယာဉ်အရေအတွက် ၁၆၈ စီး(၁ရက် ဝင် ရောက်ခွင့်ပြုသော အရေအတွက်) တွင် မြန်မာမှတ်ပုံတင် မော်တော်ယာဉ်သည်လည်း ပြန်လည် အကျုံးဝင်ပြီး ဖြတ်သန်း ခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ယနေ့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသော သဘောတူ ညီချက်များကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရသို့ တင်ပြပြီးခွင့်ပြုညွှန်ကြားပါက စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက် သို့မဟုတ် စက်တင်ဘာလ ကုန်ပိုင်း၌ ပုံမှန်ကုန်သွယ်ရေး အခြေအနေနီးပါး ပြန်လည် ဖြစ်နိုင်မည် ဟု ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစိန်ဝင်းက ပြောသည်။ တာချီလိတ်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးချမ်းမြေ့စောက “ကားတွေကို မကန့်သတ်တော့ဘဲ ပုံမှန်အတိုင်း သွားမယ်ပေါ့။ နောက် ဖြတ်သန်းခွင့် စလစ် ရက်လွန်ဒဏ်ကြေးတွေ မကောက်ဘဲနဲ့ ဒီအတိုင်း ပြန်လုပ်ပေးသွားမယ်။ နောက်တံတား ဖြတ်သန်းခွင့် စလစ်အတွက် ဘတ်သုံးလေးသောင်းကိုလည်း ဘတ်တသောင်းခွဲအထိ လျှော့ချပေးသွားမယ်ဆိုပြီး သဘောတူညီမှုတွေ ရခဲ့တယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
တာချီလိတ်-မယ်ဆိုင်ကြား ပုံမှန်အချိန်ကာလတွင် ကုန်စည်ယာဉ်များ ဖြတ်သန်းမှုမှာ နေ့စဉ် အစီးရေ ၂၀၀ ခန့်ရှိပြီး ယခုတွင် ကုန်စည်ယာဉ်ဖြတ်သန်းမှုသည် အစီးရေ ၅၀ ခန့်သာ ရှိတော့ပြီး ကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာ သုံးပုံတပုံခန့် လျော့ကျ သွားကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက သိရသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/09/28 /230649.html
၁။ မဲဆှယျမှုကို ခွိမျးခွောကျသညျ့ RCSS ကို TNP ပါတီက ကျောမရှငျထံ တိုငျကွား
၂။ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ NCA-S EAO တပျဖှဲ့ဝငျမြားမဲထညျ့ရေး အမွငျတူညီမှုမရှိ
၃။ ဦးခှနျထှနျးဦး ပါတီဥက်ကဋ်ဌ ရာထူး ကနေ နုတျထှကျမယျလို့ကွညော
၄။ ဓနုတိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြား ဒီမိုကရစေီပါတီ (DNDP) ၏ ပထမဆုံး မဲဆှယျစညျးရုံးရေး စီတနျးလှညျ့လညျခွငျးကို ရှာငံမွို့နယျ တှငျ ပွုလုပျ
၅။ အနောကျအုပျစုက မွနျမာ NGO မြားကို ငှပေေး ဆနျ့ကငျြခိုငျးနကွေောငျး တရုတျမီဒီယာ စှပျစှဲ
၆။ တရုတျဘကျအားကိုးနရေတဲ့ ခေါငျလနျဖူးဒသေမှာ ရိက်ခာခကျခဲနေ
၇။ တီးတိနျ ဒသေခံတခြို့ အစိုးရ အထောကျအပံ့ လိုအပျနေ
၈။ သိနျးနီမွို့နယျတှငျ ရကွေီးမှုဖွဈကာ ဆုံးရှုံးမှုမြားစှာရှိ
၉။ တပျမတျောမှ အပွညျ့အဝ တာဝနျယူပါက ပလကျဝမွို့နယျတခုလုံး ရှေးကောကျပှဲကငျြးပနိုငျမညျ့ အနထေားရှိဟုဆို
၁၀။ ရှမျးမွောကျ KIA နှငျ့ ဖွဈပှားသော တိုကျပှဲတှငျ မွနျမာ စဈသား ၆ ဦးသေ၊ ၅ ဦး ထိခိုကျ
၁၁။ တပျမတျော၏ ဖမျးဆီးခံရသညျ့ မွောကျဦးမှ သုံးဘီးယာဉျမောငျး ဦးအေးကြျော ဦးခေါငျးသှေးယို စုတျပွဲဒဏျရာမြားဖွငျ့ သဆေုံး
၁၂။ ကပျရောဂါကာလအတှငျး ပွောငျးဈေးကပြွီး တောငျသူတှစေိုးရိမျမှုတှမွေငျ့တကျလာ
၁၃။ ရခိုငျမှာ တိုကျပှဲတှကွေောငျ့ ကပျရောဂါထိနျးခြုပျရေး ခကျခဲနေ
၁၄။ ဖားအံကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈပိုးတှရှေိ့သူနှငျ့ ဆကျစပျသူမြားအား နှာခေါငျး၊အာခေါငျတို့ဖတျ(Swab) ရယူထား
၁၅။ ပနျနနျးဒငျသှားလမျး တောငျပွိုမှုကွောငျ့ ပွတျတောကျ
၁၆။ သိန်ဒီနှငျ့ မိုငျးပှနျဟျောနနျးတို့ကို တပျမတျောက ပွုပွငျထိနျးသိမျးပေးမညျ
၁၇။ ဖားဆောငျးတှငျ ကရငျအမြိုးသားပါတီ အငျအားရာခြီ လှညျ့လညျ မဲဆှယျ
၁၈။ ခငျြးပွညျနယျတှငျ တာဝနျကရြာ ကြေးရှာမြားရှိမဲရုံမြားသို့ သှားရောကျကွမညျ့ ကြောငျးဆရာ/ဆရာမမြားအနဖွေငျ့ အခကျ အခဲမြားစှာရှိ
၁၉။ မှနျအမြိုးသားကြောငျး ဆရာတှကေို အစိုးရမှ လစာထောကျပံ့ပေးဖို့ တောငျးဆို
၂၀။ ကပျဘေးကွောငျ့အပဈရပျခငျြပမေယျ့ ရခိုငျမှာတော့ လကျတှမေ့ဖွဈနိုငျလို့ တပျမတျောပွောကွား
၂၁။ သီပေါတှငျ မူးယဈဆေးဝါးဖမျးဆီးစဉျ အပွနျအလှနျပဈခတျမှုကွောငျ့ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျ ၁ ဦး ကဆြုံး
၂၂။ တဈသီးပုဂ်ဂလ ဝငျရောကျမညျ့သူ ပွညျနယျအတှငျး ၁၃ ဦးရှိ
၂၃။ ကရငျပွညျနယျအတှငျးရှိ ကြေးရှာအမြားစုတှငျ Covid ကွောငျ့ လူဝငျလူထှကျပိတျထား
၂၄။ မူဆယျ(၁၀၅)မိုငျ ကားသမားတဦးထံ ကိုဗဈ-၁၉ ပိုးတှေ့၊ မန်တလေးထပျမံ စဈဆေးထား
၂၅။ မောငျတောခရိုငျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျဥက်ကဋ်ဌ အပါအဝငျ ၁၀ ဦး ကိုဗဈ-၁၉ ကူးစကျခံရ
၂၆။ တရုတျပွညျသို့ မွနျမာကုနျတငျယာဉျ တရကျ အစီး ( ၁၅၀ )သာ ဝငျနိုငျ
၂၇။ တာခြီလိတျ- မယျဆိုငျ ကုနျသှယျရေး အကနျ့အသတျမြား ပွနျဖွလြှေော့ရနျ သဘောတူမှုရ
လှိုငျလငျခရိုငျ၊ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲ၏ အတှငျးရေးမှူး ဦးသိနျးနိုငျက “တအနျး(ပလောငျ)ပါတီက တိုငျကွား လာတာ ဟုတျပါတယျ။ သူတို့ အခကျအခဲတှေ ပျေါပေါကျတယျပေါ့။ တိုငျထားတာ ရှိပါတယျ။ ပါတီက ပွောတဲ့ထဲမှာတော့ ပနျကတေုအုပျစုက ရှာ ၃ ရှာလို့ ပွောပါတယျ။ အခွားပါတီတှကေတော့ တငျပွတာ မရှိဘူး”ဟု ပွောသညျ။ ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျအနဖွေငျ့ နိုငျငံရေးပါတီအခငျြးခငျြး မပွမေလညျဖွဈပါက စစေ့ပျညှိနှိုငျးရေး ကျောမတီမှတဆငျ့ဖွရှေငျးပေးနိုငျ သျောလညျး လကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးနှငျ့ မပွမေလညျဖွဈသညျ့ ပွဿနာတှငျ စစေ့ပျညှိနှိုငျးလြှငျလညျး ထိရောကျမှု မရှိနိုငျပါဟု ဦးသိနျးနိုငျက မှတျခကျြပွုသညျ။ TNP မှ တိုငျကွားစာကို ပွညျနယျအဆငျ့၊ ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျထံသို့ တငျပွထားသညျဟုလညျး သိရသညျ။
ဖွဈစဉျမှာ RCSS သညျ ၎င်းငျးတို့၏ ရုံးတံဆိပျ၊ အဖှဲ့အစညျး အမှတျအသားပါ စာရှကျမြားဖွငျ့ အကွောငျးကွားခွငျး မဟုတျဘဲ မိုငျးကိုငျ မွို့နယျတှငျးမှ တပျဖှဲ့ဝငျတာဝနျခံဆိုသူ ၁ ဦးက ပနျကတေုကြေးရှာအုပျစုအတှငျးရှိ ကြေးရှာအုပျစု စာရေးကို ပွောဆိုကာ စာဖွငျ့အကွောငျးကွားခိုငျးခွငျး ဖွဈသညျဟု သိရသညျ။ ခွိမျးခွောကျစာ ပို့ခံရသညျ့ ပနျကတေုကြေးရှာအုပျစု သညျ မိုငျးကိုငျမွို့နယျ၊ ပွညျနယျလှတျတျော မဲဆန်ဒနယျမွေ (၁) တှငျ ပါဝငျသညျ့ ကြေးရှာအုပျစု ဖွဈသညျ။ RCSS သညျ ၎င်းငျးတို့ လှုပျရှားသညျ့ နယျမွအေားလုံးတှငျ မဲဆှယျစညျးရုံးမညျဆိုပါက နိုငျငံရေးပါတီ အားလုံးက ၎င်းငျးတို့ကို ကွိုတငျ ခှငျ့တောငျးကာ ခှငျ့ပွုခကျြ ယူပွီးမှသာ မဲလာဆှယျနိုငျမညျဟုလညျး စကျတငျဘာ ၁ ရကျက ထုတျပွနျထားရာ TNP ပါတီ၊ ဗဟိုနှငျ့ မိုငျးကိုငျမွို့နယျ အခွစေိုကျပါတီရုံးတို့မှ RCSS ထံသို့ ၂ ကွိမျခနျ့စာပို့ထားသျောလညျး အကွောငျးပွနျ စာမရဟု မိုငျးကိုငျမွို့နယျ၊ ပွညျနယျလှတျတျော မဲဆန်ဒနယျမွေ (၂) တှငျ ဝငျပွိုငျမညျ့ TNP ပါတီမှ ကိုယျစားလှယျလောငျး ဦးမိုငျး အောငျခမျးထံက သိရသညျ။
RCSS ၏ လုပျဆောငျခကျြသညျ ဥပဒနှေငျ့ ကိုကျညီခွငျး မရှိဘဲ ရှေးကောကျပှဲနှငျ့ ပတျသကျ၍ ကိုယျစားလှယျလောငျး မြား၏ မဲဆှယျစညျးရုံးခှငျ့မှာ ကျောမရှငျတှငျသာ ခှငျ့ပွုခကျြတငျရမညျ ဖွဈပွီး မညျသညျ့ လကျနကျကိုငျ တပျဖှဲ့ကိုမှ တငျရနျ မလိုကွောငျး လှိုငျလငျခရိုငျ၊ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲရုံးက ပွောဆိုထားသညျ။ ကြေးရှာဥက်ကဋ်ဌမြားကို ခွိမျးခွောကျစာ ပေးခွငျး၊ ကြေးရှာမြားကို မဲလာမဆှယျနိုငျရနျ ပိတျဆို့ထားခွငျးမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ မေးမွနျးရနျ RCSS ၏ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဒုဗိုလျမှူးကွီး စိုငျးအုဏျခေးကို ဖုနျးဖွငျ့ အကွိမျကွိမျဆကျသှယျသျောလညျး ဆကျသှယျမရသဖွငျ့ သီးခွားမှတျခကျြ ရယူ နိုငျခွငျး မရှိပါ။ https://burma.irrawaddy.com/n ews/2020/09/ 28/230647.html
တဈနိုငျငံလုံးပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေး သဘောတူစာခြုပျလကျမှတျရေးထိုးထားသညျ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ NCA-S EAO အဖှဲ့ဝငျအကွား ၎င်းငျးတို့၏တပျဖှဲ့ဝငျမြားအား ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲ တပျဖှဲ့ဝငျမြားမဲထညျ့ရေးတှငျ အမွငျတူညီမှုမရှိ ကွောငျး ဆကျသှယျမေးမွနျးခကျြအရ သိရသညျ။
မှနျပွညျသဈပါတီ NMSP က ၎င်းငျးတို့၏တပျဖှဲ့ဝငျမြားကို မဲထညျ့ခှငျ့ပွုထားသဖွငျ့ သကျဆိုငျရာမဲဆန်ဒနယျမွမြေားတှငျ မိမိ နှဈသကျရာ ပါတီကို မဲပေးနိုငျသညျဟု မှနျပွညျသဈပါတီ (NMSP) ဗဟိုအလုပျအမှုဆောငျအဖှဲ့ဝငျ နိုငျအောငျမငေးက ဆို သညျ။“ကြှနျတျောတို့ကတော့ လကျနကျကိုငျအဖှဲ့ဟာ သူ့ဆီမှာ အိမျထောငျစုစာရငျးပုံစံ ၁၀ နဲ့ မှတျပုံတငျရှိရငျ သူတို့ စိတျကွိုကျ မဲသှားထညျ့လို့ရတယျ မဲထညျ့တဲ့ မဲဧရိယာရှိတာပေါ့နျော သူတို့မှတျပုံတငျနဲ့ သူတို့ ဧရိယာ သူတို့ကိုတော့ မပိတျ ပငျဘူး သူတို့အခှငျ့အရေးဆိုတော့ မဲသှားထညျ့ဖို့ ခှငျ့ပွုပါတယျခငျဗြား”ဟု နိုငျအောငျမငေးက ဆိုသညျ။ ရှေးကောကျပှဲ ဆိုသညျမှာ လူတိုငျး၏ အမြိုးသားရေးတာဝနျအရ မဲထညျ့ရမှာဖွဈပွီး မိမိနှဈသကျရာပါတီကို မဲပေးသငျ့သညျဟု နိုငျအောငျမငေး က ဆကျလကျတိုကျတှနျးထားသညျ။
ရှမျးပွညျပွညျလညျထူထောငျရေးကျောစီ RCSS တပျဖှဲ့ဝငျမြားအား မဲထညျ့ခှငျ့ မပေးထားဟု ပွောရေးဆိုခှငျ့ ရှိသူ ဒုတိယ ဗိုလျမှူးကွီး အုမျးခေးက ဆိုသညျ။“မဲပေးခှငျ့တော့ မပေးထားဘူး ဘာဖွဈလို့လညျးဆိုတော့ RCSS တပျဖှဲ့အနနေဲ့ ဘယျ ပါတီ ထညျ့ကိုမှ အားမပေးဘူး ကနျ့ကှကျတာလညျး မရှိဘူးပေါ့လေ အဲလိုပဲ ရပျတညျထားတာပေါ့နော တပျသားတှေ အနနေဲ့ မဲထညျ့ခှငျ့ရဖို့ တောငျးဆိုတာ မရှိဘူး သူတို့လညျး နားလညျပွီးသားပဲ တောငျးဆိုတာ ရှိခဲ့ရငျလညျး မပေးဘူးထငျတယျ အဖှဲ့တဈခုရဲ့ စညျးမဉျြးစညျးကမျးရှိပွီးသားလေ သူတို့လညျး မတောငျးဆိုပါဘူး”ဟု ၎င်းငျးက ပွောသညျ။“ကြှနျတျောတို့ ကိုယျတိုငျပါဝငျဖို့က ခကျမှာပေါ့နျော ဘာကွောငျ့လညျးဆိုတော့ ဒါက ၂၀၀၈ အခွခေံအောကျမှာ လုပျတဲ့ ကိစ်စ ကြှနျတျော တို့က ၂၀၀၈ ရဲ့ အဓိက ကြှနျတျောတို့ ဖကျဒရယျကို ဆနျ့ကငျြတဲ့ ကိစ်စတှကေို ပွုပွငျပွောငျးလဲမှုလုပျပွီး တော့ ဒီမိုကရစေီကို ဆနျ့ကငျြတဲ့ကိစ်စတှကေို ပွုပွငျပွောငျးလဲမှု လုပျဖို့ဆိုတဲ့အခွခေံနဲ့ ငွိမျးခမျြးရေး လုပျငနျးစဉျဖွဈလာတာကိုး ဆိုတော့လော လောဆယျတော့ မဲထညျ့ခှငျ့ရရငျတောငျ ကြှနျတျောတို့ ထညျ့ဖို့တော့ မရှိသေးပါဘူး” ဟု ပဒိုစောတာဒိုမှုးကပွောသညျ။
ဒီမိုကရစေီ ထူထောငျပါက ရှေးကောကျပှဲသညျ အရေးကွီးသျောလညျး တဖကျတှငျ ဒီမိုကရစေီ၏ အနှဈသာရမြား ပါဝငျ သညျ့ ရှေးကောကျပှဲအလအေ့ထနှငျ့ အကငျြ့စရိုကျပိုငျး ထိနျးသိမျးရနျလိုအပျနပွေီး ပွညျသူမြား ရှေးခယျြတငျမွောကျထား သညျ့ ကိုယျစားလှယျမြားအနဖွေငျ့ ပွောပိုငျခှငျ့၊ လုပျပိုငျခှငျ့နှငျ့ ပတျသကျ၍ တားဆီးပိတျပငျမှုမြားလညျး ရှိနသေေး သညျဟု ဆိုသညျ။ http://burmese.monnews.org/2 020/09/28/%e1%81%82%e1%81%80%e1%81%82%e1%81%8
ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ(SNLD)ပါတီ စတငျထူထောငျခဲ့သူလညျးဖွဈ၊ ဥက်ကဋ်ဌအဖွဈ နှဈပေါငျး ၃၀ကြျော တာဝနျယူခဲ့သူလညျး ဖွဈတဲ့ ဦးခှနျထှနျးဦးဟာ ရာထူးကနေ နုတျထှကျမယျလို့ ရနျကုနျ အခွစေိုကျ 7Day News သတငျးစာမှာ စကျတငျဘာ ၂၇ ရကျ ကကွျောငွာ ထညျ့သှငျးဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ၊ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးခှနျထှနျးဦး နုတျထှကျမယျ့ကိစ်စနဲ့ပတျသကျလို့ ပါတီကို တရားဝငျ နုတျထှကျစာပေးပို့တာ မရှိကွောငျးနဲ့ သတငျးစာမှာ ကွျောငွာခကျြ ဖျောပွမှသာ သူတို့အနနေဲ့ သိရှိရတယျလို့ ပါတီရဲ့ ဒုတိယ ဥက်ကဋ်ဌ(၁) စိုငျးညှနျ့လှငျက ဘီဘီစီကိုပွောပါတယျ။ ဦးခှနျထှနျးဦး ပါတီက အနားယူမယျ့ကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး ပါတီနဲ့ နှဈဖကျ ပွောဆိုထားတာရှိပွီး လာမယျ့ရှေးကောကျပှဲပွီးမှ အနားယူဖို့ ပွောထားတာ ဖွဈကွောငျး၊ အခုလို ရုတျတရကျ နုတျထှကျ တယျလို့ ကွျောငွာထညျ့လိုကျတဲ့အပျေါ သူတို့အနနေဲ့လညျး နားမလညျနိုငျကွောငျးလညျး စိုငျးညှနျ့လှငျ ကဘီဘီစီကို ပွောပါ တယျ။ အခုလို ဥက်ကဋ်ဌအဖွဈက နုတျထှကျတယျဆိုတဲ့ ကိစ်စကလညျး ပါတီဗဟိုကျောမတီ အစညျးအဝေးက အတညျပွုပွီးမှ သာ ဥက်ကဋ်ဌ အဖွဈက နုတျထှကျတာကို အတညျပွုလို့ရမှာ ဖွဈကွောငျးလညျး စိုငျးညှနျ့လှငျက ရှငျးပွပါတယျ။
SNLD ဥက်ကဋ်ဌအဖွဈကနေ စကျတငျဘာ ၂၇ ရကျမှာ နုတျထှကျတယျဆိုတာနဲ့ ပတျသကျလို့ ကာယကံရှငျဦးခှနျထှနျးဦးကို ဘီဘီစီက ဆကျသှယျပမေယျ့ ဆကျသှယျလို့ မရခဲ့ပါဘူး။ ပါတီဥက်ကဋ်ဌ တာဝနျက အနားယူပွီး မြိုးဆကျသဈမြားကို လမျးဖှငျ့ ပေးထားရမယျလို့ ဦးခှနျးထှနျးဦးက ၂၀၁၈ ခုနှဈ သွဂုတျလ အတှငျးကလညျး မီဒီယာတှကေို ထုတျဖျောပွော ကွားခဲ့ပါ သေးတယျ။ နုတျထှကျကွောငျး ကွျောငွာထညျ့ခဲ့တဲ့ ပါတီဥက်ကဋ်ဌ နဲ့ ပါတီဗဟိုကျောမတီ အဖှဲ့ဝငျတှဟော ဒီလိုနုတျထှကျ ကွောငျး ကွျောငွာပါအပွီးမှာ အဆကျအသှယျ မရသလို မတှရေ့သေးတဲ့အတှကျ ဘာကွောငျ့ အခုလိုနုတျထှကျရတယျဆို တာကို မပွောနိုငျသေးဘူးလို့လညျး စိုငျးညှနျ့လှငျကပွောပါတယျ။
သူ့ရဲ့ ကနျြးမာရေး၊ မိသားစုအရေးကိစ်စတှကွေောငျ့ အနားယူခငျြတယျလို့ ပွောတာမြိုးတော့ ရှိတယျလို့ စိုငျးညှနျ့လှငျက ဦးခှနျထှနျးဦး နုတျထှကျတာနဲ့ ပတျသကျလို့ ဘီဘီစီကို ပွောပါတယျ။ ပါတီ ဗဟိုကျောမတီ အစညျးအဝေး မထိုငျသေးဘဲနဲ့ အခုလိုမြိုး ပါတီကနုတျထှကျတဲ့ ဒီကိစ်စဟာ အတညျ ဖွဈပွီလို့ပွောလို့ မရသေးကွောငျးလညျး သူကပွောပါတယျ။ https:/ /www.bbc.com/burmese/54315615
ဓနုတိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြား ဒီမိုကရစေီပါတီ (DNDP) ၏ ပထမဆုံး မဲဆှယျစညျးရုံးရေး စီတနျးလှညျ့လညျခွငျးကို ရှာငံမွို့နယျ၊ မွို့ကွီးဇုနျတှငျ စကျတငျဘာ ၂၆ ရကျက ပွုလုပျခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ ထိုသို့ မဲဆှယျစညျးရုံးရေး လှညျ့လညျရာတှငျ မျောတျောယာဉျအစီးရေ ၈၀ ကြျော၊ လူအငျအား တဈထောငျခနျ့ရှိပွီး၊ ကနျြးမာရေးညှနျကွားခကျြနှငျ့အညီ ပွုလုပျခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး၊ ဆညျရှာတှငျ ဆိုငျးဘုတျတငျခွငျး ပွုလုပျခဲ့ကွောငျး၊ နောကျပိုငျးတှငျ Door to Door စနဈဖွငျ့ ရှာတဈရှ လြှငျ သုံးနရောခှဲ၍ ပွုလုပျမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
“ ဒီနမှေ့ာ စီတနျးလှညျ့လညျတယျ။ ဆညျရှာမှာ ဆိုငျးဘုတျတငျတယျပေါ့။ စီတနျးလှညျ့လညျတာပေ့ါ။ စညျးရုံးရေး ခရီးစဉျ ကတော့ သှားနတောတှတေော့ ရှိပါတယျ။ အားလုံးအဆငျပွပေါတယျ။ ဒီနေ့ အားရကနြေပျတယျပေါ့။ သှားမယျလို့ လိုငျးပျေါ ကွညောတဲ့အနအေထားပဲ၊ ဝနျးရံမယျဆိုပွီး ရှာအသီးသီးက ထှကျလာတာအားရတယျ။ တိုငျးရငျးသားပွညျသူတှအေားလုံး ကြှနျတျောတို့ ပါတီကိုဆကျလကျဝနျးရံပေးဖို့ပေ့ါ။ ကိုဗဈမဖွဈရငျ ဒီထကျဝနျးရံမယျ့ တိုငျးရငျးသားပွညျသူတှေ အမြားကွီးရှိ သေးတယျ။ အကွီးအကယျြလညျး လုပျလို့မရဘူးပေါ့။ မွို့နယျပေါငျး လေးမွို့နယျမှာ ကိုယျစားလှယျလောငျးပေါငျး ၁၂ ယောကျ၊ အမြိုးသမီးသုံးယောကျပါတာ ဖွဈတဲ့အတှကျ အမြိုးသမီးပါဝငျမှုနှုနျးက ၂၅ ရာခိုငျနှုနျးပေါ့”ဟု ဓနုတိုငျးရငျးသား လူမြိုးမြား ဒီမိုကရစေီပါတီဥက်ကဌ ဦးခငျမောငျခြိုက ပွောကွားသညျ။
ဓနုတိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြား ဒီမိုကရစေီပါတီ (DNDP) ပါတီက အထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှငျ ရှာငံမွို့နယျနှငျ့ ပငျးတယ မွို့နယျတို့တှငျ အမြိုးသားလှတျတျော တဈနရော၊ ပွညျသူ့လှတျတျော နှဈနရောနှငျ့ ပွညျနယျလှတျတျော လေးနရော၊ ကလောမွို့နယျတှငျ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျ နှဈနရော၊ နောငျခြိုမွို့နယျတှငျ ပွညျသူ့လှတျတျောတဈနရော၊ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျနှဈနရော စုစုပေါငျး ၁၂ နရော ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
အနောကျနိုငျငံမြားမှ အဖှဲ့အစညျးမြားသညျ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ အခွားအရှတေ့ောငျအာရှ နိုငျငံမြားမှ အစိုးရမဟုတျသညျ့ အဖှဲ့ အစညျးမြား (NGOs) တရုတျဆနျ့ကငျြရေးလှုပျရှားမှုမြားမွှငျ့တငျရနျနှငျ့ လူ့အခှငျ့အရေးနှငျ့ ဒီမိုကရစေီ မွှငျ့တငျသညျ့ ပုံစံဖွငျ့ တရုတျကြောထောကျနောကျခံပွု စီမံကိနျးမြားကို ဆနျ့ကငျြရနျ အားပေးနကွေောငျး တရုတျအစိုးရ မီဒီယာက စှပျစှဲ လိုကျသညျ။
အရှတေ့ောငျအာရှမှ အခြို့သော အစိုးရမဟုတျသညျ့ အဖှဲ့အစညျးမြား (NGOs) အနကျ အခြို့သညျ အနောကျနိုငျငံမြားမှ ဝါဒဖွနျ့ခြိမှုတှငျ အသုံးခခြံမြားဖွဈနပွေီး တရုတျဆနျ့ကငျြရေးလှုပျရှားမှုမြားတှငျပါဝငျနသေညျဟု တရုတျကှနျမွူနဈပါတီ အာဘျော ပွညျသူ့နစေ့ဉျ သတငျးစာက ထုတျဝသေညျ ဂလိုဘယျတိုငျးမျ Global Times သတငျးစာက အင်ျဂါနတှေ့ငျ စှပျစှဲပွီး ထိုကဲ့သို့သောလုပျရပျမြားသညျ အမြားပွညျသူအကြိုးဆောငျရှကျသညျ့ နယျပယျထကျ ကြျောလှနျနကွေောငျးပွောကွား လိုကျသညျ။ အရှတေ့ောငျအာရှ နိုငျငံမြားအကွားတှငျ မွနျမာနိုငျငံမှ မငွိမျသကျသော နိုငျငံရေး အခွအေနသေညျ အနောကျ နိုငျငံ NGOs မြားအတှကျ လှနျစှာကောငျးမှနျသညျ့ အနအေထားကို နှဈပေါငျးမြားစှာ ဖနျတီးပေးခဲ့ကွောငျး ထိုသတငျးစာက ဆိုသညျ။ တရုတျနိုငျငံအကူအညီဖွငျ့ သို့မဟုတျ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုဖွငျ့ ပွုလုပျသညျ့ အခွခေံအဆောကျအအုံ စီမံကိနျးမြားကို ဝဖေနျသညျ့ အစီရငျခံစာမြား ထုတျပွနျခွငျးဖွငျ့ တရုတျစီမံကိနျးမြားကို အယုံအကွညျကငျးမဲ့အောငျ လုပျဆောငျရာတှငျ NGOs ဝနျထမျးမြားသညျ အခနျးကဏ်ဍတခုမှ ပါဝငျနကွောငျး မွနျမာနိုငျငံမွို့တျော နပွေညျတျောမှ “ကြောငျ” အမညျရှိ တရုတျတဦးကို ကိုးကားပွီးနောကျ ဂလိုဘယျတိုငျးသတငျးစာရေးသားသညျ။ လှတျလပျပွီး အကြိုးအမွတျမယူသညျ့ အမရေိကနျ အဖှဲ့အစညျးတခုဖွဈသော National Endowment for Democracy (NED) သညျ တရုတျနိုငျငံ၏ စီမံကိနျးမြား ကို ဆနျ့ကငျြရနျ မွနျမာ NGOs မြားကို ငှကွေေးထောကျပံ့နသေညျဟု ထိုသတငျးစာက စှပျစှဲသညျ။
NGOs မြားသညျ ၎င်းငျးတို့၏ လုပျငနျးသဘောသဘာဝအရ ပွညျပအကူအညီနှငျ့ အခွားအလှူရှငျမြားကို မှီခိုရကွောငျး Equality Myanmar မှ အမှုဆောငျဒါရိုကျတာ ဦးအောငျမြိုးမငျးက တရုတျမီဒီယာ၏ စှပျစှဲခကျြနှငျ့ပတျသကျပွီး ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။ သို့သျော “ကနြျောတို့က ရုပျသေးတှေ မဟုတျဘူး။ ပွညျသူတှရေဲ့ လိုအပျခကျြတှအေတှကျ ရပျတညျတာဖွဈ တယျ”ဟု သူပွောသညျ။ မွနျမာနိုငျငံမှ သဘာဝသယံဇာတ ထုတျယူခွငျးနှငျ့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ဖကျြဆီးမှု အမြားစုကို ကွညျ့လြှငျ တရုတျကုမ်ပဏီမြား ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှု ပွုလုပျသော စီမံကိနျးမြားကွောငျ့ အမြားဆုံးဖွဈပွီး အနောကျနိုငျငံလုပျငနျး မြားက ထိုသို့ပွဿနာမြား မဖွဈစကွေောငျးလညျး သူပွောသညျ။“ကနြျောတို့ရဲ့ NGOs သဘောထားက လူ့အခှငျ့အရေး မွှငျ့တငျပွီး ဖိနှိပျခံပွညျသူတှရေဲ့အသံကိုနားထောငျခွငျးဖွငျ့ အမှနျတရားအတှကျ ရပျတညျခွငျးဖွဈတယျ”ဟု သူပွောသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/09/26/230568.html
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကူးစကျနှုနျး မွငျ့တကျနခြေိနျ မွနျမာ-တရုတျ နယျစပျဂိတျတှကေို ပိတျလိုကျတာကွောငျ့ ရိက်ခာအတှကျ နယျခွားဖွတျတငျသှငျးမှုကို အားကိုးနရေတဲ့ ကခငျြပွညျနယျ ခေါငျလနျဖူးမွို့နယျထဲက ကြေးရှာတှမှော စားနပျရိက်ခာ အခကျအခဲကွုံနရေတယျလို့ ဒသေခံတှကေ ပွောပါတယျ။ ကပျဘေးကာလ ဒသေအသီးသီးမှာ မတူညီတဲ့ အခကျအခဲတှေ ရှိနပွေီး တဈရှာနဲ့တဈရှာ သှားလာရေးခကျခဲလှနျးတဲ့ ခေါငျလနျဖူးမွို့နယျမှာ ရငျဆိုငျနရေတာကတော့ စားနပျရိက်ခာ ဝယျယူရ ခကျခဲနခွေငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံဘကျ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကူးစကျနှုနျး မွငျ့တကျနခြေိနျမှာ ခေါငျလနျဖူးမွို့နယျထဲက တရားမဝငျ တရုတျနယျစပျဂိတျတှဖွေဈတဲ့ နယျစပျမှတျတိုငျ ၃၀၊ ၃၁၊ ၄၅ နဲ့ ၄၁ နရောတှကေို တရုတျဘကျက ပွီးခဲ့တဲ့ မတျလ ကတညျးက ပိတျထားလိုကျတာပါ။
ဒီလို ပိတျထားပွီနောကျပိုငျး ကုနျစညျစီးဆငျးမှု ရပျတနျ့နတော ခွောကျလ ကြျောလာပွီဖွဈလို့ ရိက်ခာရှားပါးနပွေီလို့ ခေါငျလနျဖူး ဒသေခံ တဈဦးဖွဈတဲ့ ဉီးဒခှမျဖရေမျ က ပွောပါတယျ။ ကခငျြပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုငျလမှာ ခေါငျလနျဖူးဒသေက ကြေးရှာတှမှော ဆနျအိတျ အမြားအပွား လှူဒါနျးခဲ့တယျလို့ ပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ ညှနျကွားရေးမှူး ဦးဇျောဇျောက ပွောပါတယျ။ ခေါငျလနျးဖူးမွို့ကနေ ရှာတဈရှာနဲ့တဈရှာဟာ ၅ မိုငျကနေ မိုငျ ၇၀ လောကျအထိ အကှာ အဝေးရှိပွီး အနညျးဆုံး ၇ ရကျကနေ ၁၀ ရကျအထိ လမျးလြှောကျသှားရတာပါ။ အစိုးရ ထောကျပံ့ပေးတဲ့ဆနျရိက်ခာဟာ လမျး တဈဝကျလောကျအထိပဲ ပို့ပေးနိုငျတာကွောငျ့ တကယျလိုအပျတဲ့ ရှာတှအေထိ ရောကျဖို့ ခကျခဲနတေယျလို့ ဒသေခံ နောကျတဈဦးဖွဈတဲ့ ကိုဆားအောငျက ပွောပါတယျ။
ခေါငျလနျဖူးမွို့နယျမှာ ကြေးရှာအုပျစု နှဈဆယျ့လေးခုက အိမျခွေ နှဈထောငျကြျောမှာ လူဉီးရေ တဈသောငျးကြျော နထေိုငျ နကွေတာပါ။ https://www.rfa.org/burmese/news/food-difficulty-in-khaunglanhpu-kachin-09262020040945.
မွနျမာနိုငျငံမှာ အဆငျးရဲဆုံးပွညျနယျလို့ သတျမှတျခံထားရတဲ့ ခငျြးပွညျနယျက ဒသေခံတခြို့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ (Covid 19) ကူးစကျပြံ့နှံ့မှု အန်တရာယျရှိနတေဲ့ကာလမှာ အစိုးရရဲ့ ကူညီထောကျပံ့မှုကို မရဘဲဖွဈနတောပါ။ ထောကျပံ့ကွေးမရသူ တှထေဲ မှာ ခငျြးပွညျနယျ၊ တီးတိနျမွို့နယျက သိုငျးငငျးကြေးရှာက ဦးနနျပီးတို့ မိသားစုလညျး ပါဝငျပါတယျ။“ကိုဗဈကာလမှာ ကြှနျတျောတို့ ဘာတဈခုမှလညျး ရောငျးလို့မရဘူး ဆိုတော့ ကြှနျတျောတို့ သိုငျးငငျးရှာ ကဆိုရငျ ကားကို အားကိုးပွီးတော့မှ အသကျရှငျတယျ။ ကားလညျး မထှကျတော့ဘူး။ ကြှနျတျောတို့ အဲဒီခြိနျမှာ အရမျးကို ဒုက်ခရောကျတဲ့ အခြိနျမှာ တောငျယာ လညျး မလုပျရဘူး။ တောငျယာလုပျကိုငျတဲ့ ဦးနနျပီးတို့ မိသားစုဟာ သူတို့စိုကျထားတဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေို သိုငျးငငျး ကားလမျး ဘေးကနေ ခရီးသှားတှကေို ရောငျးခနြတောပါ။ အခုလို ခရီးသှားတှေ မရှိသလောကျ နညျးပါး သှားခြိနျမှာ ဝငျငှေ မရတော့တဲ့အပွငျ ထောကျပံ့မှုလညျး မရတာကွောငျ့ အခကျခဲဖွဈနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ပထမအကွိမျ ထောကျပံ့ပစ်စညျး ပေးအပျရာမှာ ကနျ့သတျခကျြ ၁၅ ခကျြနဲ့ ညီတဲ့ အိမျထောငျစုတှကေိုသာ ပေးအပျရမယျ ဆိုပွီး ညှနျကွားထားတာကွောငျ့ မရသူတှရှေိတာလို့ တီးတိနျမွို့နယျ မောငျကငျကြေးရှာ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးဒါးလျခနျ့ခုပျက RFA ကို ပွောပါတယျ။ အဲဒီသတျမှတျခကျြတှကွေောငျ့ ထောကျပံ့ကွေးမရတဲ့ ဒသေခံတှလေညျး ရှိနပွေီး ပိုးကူးစကျမှု အန်တရာယျ ရှိနတေဲ့ကာလမှာ ခကျခကျခဲခဲ ရုနျးကနျနရေတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ချေါဆကြေးရှာ အုပျခြုပျရေးမှူး ကိုခိုငျကငျြ့ ဒါလျးကလညျး အဲဒီလို ဒသေခံတှနေဲ့ အငွငျးပှားစရာတှေ ရှိလာတာကွောငျ့ မွို့နယျ အထှထှေေ အုပျခြုပျရေးမှူးကို နောကျထပျပေးမယျ့ အစိုးရထောကျပံ့မှုမှာ စာရငျးထပျမံတငျပွဖို့ စာတငျထားတယျလို့ ပွောပါတယျ။
ခငျြးပွညျနယျမှာ အစိုးရရဲ့ ထောကျပံ့တဲ့ အစီအစဉျထဲ မပါသေးတာကွောငျ့ ထပျမံတငျပွတောငျးခံထားတဲ့ မိသားစုဝငျ ဘယျလောကျရှိတယျဆိုတာကိုတော့ ပွောဆိုနိုငျသူ မရှိပါဘူး။ ကပျဘေးကာလ စားဝတျနရေေး အခကျအခဲဖွဈနပွေီး ထောကျပံ့ကွေးမရတဲ့ ဒသေခံတှဟော ကြေးရှာအုပျခြုပျ ရေးမှူးတှကေ ကနျြရှိနတေဲ့စာရငျး ပွနျလညျစိစဈတငျပွပေးရငျ ထောကျပံ့ကွေးရမယျလို့ မြှျောလငျ့နကွေပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/chin-refugees-0928202005
သြှမျးပွညျ မွောကျပိုငျး သိနျးနီမွို့နယျ နမျ့စလပျကြေးရှာတှငျ မိုးသညျထနျးရှာသှနျးမှုကွာငျ့ နအေိမျနှငျ့ လယျယာပကျြစီး ဆုံးရှုံးမှုမြားကွောငျး စုံစမျးသိရသညျ။
စကျတငျဘာ ၂၆ ရကျ မနကျပိုငျး ၁ နာရီအခြိနျတှငျ မိုးသညျထနျးစှာရှာသှနျးပွီး တောငျကရြေ နှငျ့ ပေါငျးစပျမှုကွောငျ့ ရကွေီး ရလြှေံဖွဈပှားကာ နအေိမျမြားရဝေငျပွီး ပကျြစီးဆုံးရှုံးခဲ့ကွောငျး။ လယျယာမွမြေားစှာလညျး ပကျြစီးခဲ့ကွောငျး သိန်နီ ပွညျသူ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ စိုငျးဦးခမျး က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကို ပွောသညျ။“ မိုးက တဈညလုံးရှာပွီး တောငျကရြနေဲ ဆိုတော့ ရကွေီးသှားတာ။ အိမျခွေ ၃၆ အိမျ လောကျတော့ ရနှေဈသှားတယျ။ အိမျပကျြစီး ဆုံးရှုံးတာက တော့ (၃) အိမျရှိ တယျ။ ပွိုသှားတာအိမျတှကေ နဲနဲဟောငျးနပွေီး။ အိမျကလညျး ကွာနပွေီး” ဟု စိုငျးဦးခမျးက ပွောသညျ။
ထို့ပွငျ ရကွေီးမှုကွောငျ့ လယျယာမွမြေားစှာ နဈခဲ့ကွောငျး၊ လကျရှိမှာ ဆုံးရှုံးသှားသညျ့ လယျယာမွမြေားကို စာရငျး ကောကျနကွေောငျးလညျး သိရသညျ။ အဆိုပါ ရကွေီးမှု ဖွဈရခွငျးသညျ အဓိကအားဖွငျ့ ရမွေောငျးထဲအမှိုကျမြား စှနျ့ပဈ ခွငျး၊ သဈခုတျမှုမြားဖွဈပှားခွငျး၊ တို့ ကွောငျ့ ဖွဈကွောငျးလညျး စိုငျးဦးခမျးက ထပျလောငျးပွောသညျ။“ မိုးရှာက ည ၁၁ နာရီ လောကျက။ ၂ နာရီမှာ ရတှေေ အိမျထဲဝငျတော့ အိပျမရတော့ဘူး။ ညကွီးထှကျပွေးရတာ။ ဘာပစ်စညျးမှ မရခဲ့ဘူး။ အိမျ ထဲမှာရှိတဲ့ ပစ်စညျးတှေ အားလုံးဆုံးရှုံ့းတယျ”ဟု နနျးယိငျးဆိုငျ က ပွောသညျ။“ကမြတို့ လယျတှအေားလုံးပကျြစီးသှားပွီ။ ဘာမှ မရဘူး။ ဒီနှဈတော့ မလှူနိုငျ မဒါနျးနိုငျတော့ဘူး။ တခါမှ မဖွဈဖူးဘူး”ဟု စပါး ဆုံးရှုံးသှားသညျ့ အသကျ ၅၀ အရှယျရှိ အမြိုးသမီး ကပွောသညျ။ သိနျးနီမွို့နယျ နမျ့စလပျကြေးရှာရှိ ရဘေေးဒုက်ခသငျ့နသေညျ့ ပွညျသူမြားကို သကျဆိုငျရာမှ ကူညီထောကျပံ့ပွီး၊ ဆုံးရှုံးသှားသညျ့ ပစ်စညျးမြား၊ လယျယာမြားစာရငျးကို ကောကျပွီး ကူညီထောကျပံ့ပေးရနျလညျးရှိ ကွောငျးသိရသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/18679
၂၀၂ဝပွညျ့နှဈအထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှငျ တပျမတျောမှအပွညျ့အဝတာဝနျယူပါက ပလကျဝမွို့နယျတခုလုံး ကငျြးပနိုငျ မညျဟု ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး၊ခငျြးပွညျနယျအစိုးရပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ စညျပငျဝနျကွီး ဦးစိုးထကျ မှ ပွောသညျ။
“မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၁)ဘကျမှာဆိုရငျ ရပျကှကျကြေးရှာအုပျစုပေါငျး ၄၅ အုပျစုရှိတယျ၊ ၄၅ အုပျစုမှာ ကငျြးပလို့ရတဲ့ အုပျစု က ၃၄ အုပျစု ကငျြးပလို့ရတယျ၊ ကငျြးပလို့မရတာ ၁၁ အုပျစုရှိတယျ၊ အဲတာ ရာခိုငျနှုနျးနဲ့တှကျလို့ရှိရငျ ရ၅.၅၅ ရာခိုငျနှုနျး လောကျကကငျြးပလို့ရတယျလို့ ကြှနျတျောပွောလိုတယျ၊ ဒါမဲဆန်ဒနယျ(၁)၊ မဲဆန်ဒနယျ(၂)မှာတော့ ကြေးရှာအုပျစုပေါငျး (၅၇)အုပျစုရှိတယျ၊ ကငျြးပလို့ရတာ(၄၃)အုပျစုရှိတယျ၊ သူလညျးပဲ ရာခိုငျနှုနျးအရတှကျမယျဆိုရငျ ၇၅.၄၄ ရာခိုငျနှုနျးရှိတယျ၊ အဲတာကွောငျ့ မဲဆန်ဒနယျ (၁)ရော မဲဆန်ဒနယျ(၂)မှာရော နှဈခုလုံးက ကငျြးပလို့ရတဲ့ အနထေားရှိတယျ၊ကြှနျတျောတို့ သုံးပုံနှဈပုံ ကငျြးပလို့ရတဲ့ အနထေားရှိတာပေါ့နျော၊ကနျြတဲ့ သုံးပုံတဈပုံကလညျး တပျမတျောကသာလုံခွုံရေး အပွညျ့ဝ တာဝနျယူပေးမယျဆိုရငျလညျး ကငျြးပလို့ရတယျအဲတာလညျးပွောခငျြတယျ”ဟု စညျပငျဝနျကွီးဦးစိုးထကျမှပွောသညျ။
လကျရှိပလကျဝမွို့နယျ အခြို့နရောမြားတှငျ စဈဖွဈသညျ့နရေမြားဖွဈပွီး တဈမွို့နယျလုံးစဈဖွဈပွီး မအေးခမျြးသညျ့ နယျမွမေဖွဈသောကွောငျ့ ရှေးကောကျပှဲကငျြးပနိုငျသညျ့ အနထေားပိုမြားကွောငျးလညျးသိရသညျ။ ပလကျဝသှားမညျ့ ကုနျးလမျးသညျ လကျရှိမိုးရာသီအတှငျး သှားလာရေးအဆငျမပွမှေုကွောငျ့ မဲရုံသုံးပစ်စညျးမြား အပွညျ့အဝမရောကျရှိနိုငျသေ ကွောလညျးငျးသိရသညျ။ https://www.chinworld.org/2 020/09/28/%e1%80%90%e1%80%95%e1%80%ba% e1%80%99%e1%80
မူဆယျခရိုငျ မုံကိုးမွို့ကို ဖွတျသှားတဲ့ နယျမွရှေငျးလငျးရေး စဈဆငျလှုပျရှားနတေဲ့ မွနျမာစဈတပျ တပျမ (၉၉) တပျဖှဲ့ ရှမျးပွညျမွောကျပိုငျး မူဆယျခရိုငျအတှငျး ကခငျြလှတျလပျရေးတပျမတျော KIA အား နယျမွရှေငျးလငျးရေး’ စဈဆငျတိုကျ ခိုကျရာတှငျ စကျတငျဘာ (၂၈) တနင်ျလာနေ့ က မွနျမာ စဈသား အနညျးဆုံး (၆)ဦး သဆေုံးပွီး ဒဏျရာရရှိသူ အနညျးဆုံး (၅)ဦး ရှိကွောငျး KIA ဘကျမှ ဆိုပါသညျ။ တနင်ျလာနေ့ နံနကျပိုငျးမှ ညနပေိုငျး ထိ KIA တပျမဟာ (၆) လကျအောကျ တပျရငျး (၃၆) နယျမွေ ကွူကုတျ (ပနျဆိုငျး)မွို့နယျခှဲ သုံးနရောတှငျ တိုကျပှဲမြားဖွဈပှားကာ တပျမတျောဘကျက ထိခိုကျ သဆေုံးမှုနှငျ့ပတျသကျပွီး KIA တပျမဟာ (၆) အရာရှိ တဈဦး ကခငျြသတငျးဌာန KNG ကို ယခုလို ပွောပါသညျ။ “အနညျး ဆုံး (၆)ဦး (၇)ဦးခနျ့ သဆေုံးနိုငျတယျ။ ဒဏျရာ ရတာကတော့ (၅)ဦးမှ (၇)ဦးထိ ရှိနိုငျတယျ။”KIA ဘကျမှ ထိခိုကျမှု မရှိ ကွောငျး သူက ဆိုပါသညျ။
တပျမ (၈၈) စဈကွောငျးမြား မုနျးဘျော (Mungbaw) ကြေးရှာပတျဝနျးကငျြ တောငျးကုနျမြားရှိ KIA တပျရငျး (၃၆) စခနျးမြားကို သုံးနရောမှ ‘နယျမွရှေငျးလငျးရေး’ထိုးစဈဆငျတိုကျမှု ပွုလုပျပွီး ပွနျဆငျးလာစဉျ နှဈဖကျတိုကျပှဲဖွဈပှားခွငျး ဖွဈသညျ။ “မိုငျဖနျ (Mai Hpang) ဘကျကနေ ဆငျးလာတဲ့ စဈကွောငျးဟာ နမျတောငျး (Nam Tau)၊ မခေါယနျ (Mahkaw Yang)နားမှာ စောငျ့ကွိုတိုကျခိုကျတယျ၊ အဲဒီမှာ ထိခိုကျသဆေုံးမှု အနညျးငယျ ရှိတယျ။ မနကျပိုငျးမှာပဲ မနျနောငျယနျ (Man Nawng Yang)မှာ နှဈဖကျ ထိတှေ့ တိုကျပှဲဖွဈပှားတယျ၊ အဲဒီမှာတော့ အတျောလေး အထိနာလို့ ကွားရတယျ။ ညနပေိုငျး မှာတော့ မုနျဘျော (Mungbaw)မှ ပလဲခကျ (Pale Hkyet) ဘကျဆီ တကျလာတဲ့ စဈကွောငျးကို ခကနျြခရော့ (Hka Chyang Hkaraw) ဆိုတဲ့ နရောမှာ ထပျပွီး မိုငျးနဲ့ ဖောကျခှဲတိုကျခိုကျတော့ ထိခိုကျမှုမြားတယျ”ဟု လုံခွုံရေးအရ အမညျ မဖျောလိုသူ တိုကျပှဲဖွဈပှားရာ နယျမွမှေဒသေခံ တဈဦး ကခငျြသတငျးဌာန KNG ကို ပွောပါသညျ။
နှဈဖကျ တိုကျပှဲကွောငျ့ စဈဘေးရှောငျ ရှာသား (၆၀)ကြျောသညျ မနျနောငျကောငျ (Man Nawng Kawng) ကြေးရှာ ခရဈယာနျအသငျးတျော ဘုရားကြောငျးဝငျးတှငျ စကျတငျဘာ (၂၄)ကတညျး ခိုလှုံနကွေောငျး ကွားသိရသျောလညျး လကျရှိ တိုကျပှဲဖွဈပှားနသေညျေ့ အခွအေနကွေောငျ့ ပွငျပမှ အကူအညီမြား သယျလာပေးရနျ ခကျခဲနသေညျဟု မုနျးဘျော (Mungbaw)ကြေးရှာ လူမှုကူညီရေးအဖှဲ့ တဈဖှဲ့မှ သိရသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/09/29/%e1 %80%9b%e1%80%be%e1%80%99%e1%80%ba%e1
ရခိုငျပွညျနယျ၊ မွောကျဦးမွို့တှငျ အောငျတိုကျအုပျစု၊ မွို့သဈရပျကှကျတှငျနထေိုငျသော သုံးဘီးယာဉျမောငျး တဈဦးကို စကျတငျဘာလ ၂၇ရကျနေ့ တပျမတျော ၃၇၇ တပျရငျးက ဖမျးဆီးသှားပွီးနောကျ တဈရကျအကွာ ယနေ့ စကျတငျဘာလ ၂၈ ရကျနေ့ ဆေးရုံတှငျ အလောငျးသာ ပွနျလညျတှရှေိ့ရဟု သဆေုံးသှားသူ ဦးအေးကြျော၏ ယောက်ခထီးဖွဈသူ ဦးမောငျနု ကပွောဆိုသညျ။“ ဦးအေးကြျော (သဆေုံးသူ အမြိုးသားအမညျ) ဆေးရုံကိုရောကျနတေယျလို့ကွားလို့ လာရောကျတှတေဲ့ အခြိနျမှာတော့ ညနေ ၄နာရီ ၄ဝလောကျရှိပါတယျ။ ကြှနျတျော အလောငျးကို ခတ်ေတခဏ ကွညျ့လိုကျတဲ့အခါမှာ ခေါငျးမှာ သှေးတှယေိုပွီးတော့ စုတျပွဲပွီးတော့ဖွဈနပေါတယျ။ နောကျကိုယျခန်ဓာတှလေညျး ဘယျလိုဖွဈတယျဆိုတာ အခုတော့ ကြှနျတျောမကွညျ့ရသေးဘူး။ ဆရာဝနျဆီက အဖွမေရသေးတော့ ဘယျလို သဆေုံးလဲဆိုတာတော့ တိတိကကြမြသိရ သေးဘူး။ မွောကျဦးဆေးရုံကို ဆေးရုံကားနဲ့ပို့တာပါ ” ဟု ၎င်းငျးကပွောဆိုသညျ။
အဆိုပါ သဆေုံးသူ သုံးဘီးယာဉျမောငျး ဦးအေးကြျောသညျ စကျတငျဘာလ ၂၇ ရကျ နံနကျပိုငျးတှငျ လကျကြိုးနသေညျ့ အသကျ ၈၀ ကြျောအဖှားတဈဦးကို ဆေးကုသရနျ နထငျကြေးရှာသို့ သုံးဘီးဆိုငျကယျဖွငျ့ ပို့ဆောငျစဉျ ၃၇၇ တပျရငျးက ဖမျးဆီးခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး ၊ထိုသို့ဖမျးဆီးခံရခွငျးကွောငျ့ မိသားစုဝငျမြားက တပျရငျးသို့ သှားရောကျမေးမွနျးသျောလညျး ဖမျးဆီးထားမှုမရှိပွနျလညျပွောဆိုကွောငျး၊ ထိုကွောငျ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျမြား၊ နိုငျငံရေးပါတီမြားနှငျ့ မွောကျဦးမွို့ ရဲစခနျးကို တိုငျကွားပွီးနောကျ ယနတှေ့ငျ သဆေုံးလကျြပွနျလညျ တှရှေိ့ခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး ဦးမောငျနုကပွောဆိုသညျ။ မွောကျဦးမွို့နယျမှ ရခိုငျပွညျနယျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးထှနျးသာစိနျကလညျး တပျမတျော၏ ဖမျးဆီးခွငျးခံရသူ ဦးအေးကြျော သဆေုံးသှားကွောငျးကို မိသားစုဝငျမြား၏ ပွောကွားခကျြအရ သိရကွောငျး အတညျပွုပွောဆိုသညျ။
တပျမတျောသတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဗိုလျမှူးခြုပျဇျောမငျးထှနျးကို ဆကျသှယျမေးမွနျးသျောလညျး ဖုနျးပွနျလညျဖွဆေိုခွငျးမရှိပေ။ ရခိုငျပွညျနယျ ကြောကျတျောမွို့နယျ ကြောကျဂူစုကြေးရှာတှငျ စကျတငျဘာလ ၂၇ ရကျနေ့ ညနပေိုငျးက တပျမတျောစဈကွောငျး ရှာသို့ဝငျရောကျခဲ့ပွီး အမြိုးသားတဈဦးကို ဖမျးဆီးချေါဆောငျသှားကွောငျး ကြောကျတျောမွို့နယျ ရခိုငျပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးမောငျသနျးစိနျကပွောဆိုသညျ။ https://www.khitthitn ews.com/2020/09/ %e1%80%90%e1%80%95%e1%80 %ba%e1%80%99%e1%80
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျ(ဈ)ထိနျးခြုပျရေးလုပျငနျးမှာ ကုနျသှယျရေးလမျးကွောငျးတှေ ပိတျထားတဲ့အတှကျ ပွောငျးဝယျသူတှေ နညျးလာပွီးတော့ ဈေးတှလေညျး တဖွညျးဖွညျးထိုးကလြာတဲ့အပျေါ ပွောငျးစိုကျတောငျသူတှေ အခကျတှပွေီ့း စိုးရိမျမှုတှေ ရှိနကွေပါတယျ။ အခုလိုပွောငျးဈေးတှကေလြာတဲ့အတှကျ လုပျအားခနဲ့ကုနျကစြရိတျတှကေ အမွတျမရှိတဲ့အပွငျ အရှုံးပျေါ မှာကို စိုးရိမျနကွေရပါတယျ။
“ တဈကယျလို့ဈေးမရှိတဲ့အခြိနျဆိုရငျ အလုပျသမားချေါတဲ့အပျေါမှာလညျး တဈနကေို့ ၆၀၀၀ ကပျြ ပေးရတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကနြျောတို့တဈခါတဈလပွေနျတှကျကွညျ့မယျဆိုရငျ ဒီဈေးနှုနျးနဲ့ ဒီအလုပျသမားခနဲ့ ပွနျပွီးတော့ ရနိုငျမလား မရနိုငျဘူးလား ဆိုပွီး အဲ့လိုမြိုးစိုးရိမျတယျပေါ့။” လို့ ရုမျးပွညျနယျတောငျပိုငျး ဖယျခုံမွို့နယျ နောငျလှိုငျကြေးရှာ ကိုဘီးဒူ ကပွော ပါတယျ။
အရငျနှဈက အခုခြိနျဆိုရငျ ပွောငျးဈေး အနှိမျ့ဆုံး တဈပိသာ၄၁၀ ရှိပွီးတော့ ယခုခြိနျမှာတော့ ၃၇၀ ကပျြ အထိ ဈေးကြ သှားပွီး တဖွညျးဖွညျးဆကျကသြှားမှာကို ပွောငျးစိုကျ တောငျသူတှေ စိုးရိမျနကွေရတာဖွဈပါတယျ။“လာမယျ့ အစိုးရ တကျလာခဲ့မယျဆိုရငျလညျး ကနြျောတို့ပွောငျးတောငျသူတှအေတှကျ အဆငျပွတေဲ့ဈေးနှုနျးကို တိတိကကြသြတျမှတျပွီး တော့မှ တောငျသူတှမေနဈနာအောငျ တောငျသူတှအေကြိုးခံစားခှငျ့က အဲ့တာလေးပဲရှိတော့ တငျ့တငျ့မြှတတဲ့ဈေးနှုနျးကို စီစဉျပေးဖို့ကနြေျာ့အနနေဲ့ တောငျးဆိုခငျြတယျ။” လို့ ကှိုငျငံရှာဟောငျး ကြေးရှာနေ ဦးပိုပီးယို ကပွောပါတယျ။
ပွောငျးဈေးမကောငျးလို့ လကျရှိလုပျကိုငျနတေဲ့ ပွောငျးရုံကိုနားတော့မယျ့လို့ ဒေါးငံခါး ရပျကှကျ (၁) ပွောငျးရုံပိုငျရှငျ ဦးမောငျကောငျး က ပွောပါတယျ။“ ကနြျောတို့လညျး ဒီတဈစီးတငျပွီးရငျတော့ နားမယျလို့တော့ဆုံးဖွတျထားတယျပေါ့ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုရငျတော့ ဈေးကဆကျတိုကျကနြတေော့ နားမယျလို့တော့ စီစဉျထားတယျပေါ့။”လို့ပွောပါတယျ။ ပွညျသူ မြားကတော့ ထိုပွာသနာမြားပွလေညျဖို့ဆိုရငျ အစိုးရမှာတာဝနျရှိပွီး ကိုငျတှယျဖွရှေငျးပေးဖို့လိုတယျလို့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျ ပှဲ မှာ ဒီးမော့ဆိုမွို့နယျ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျကနေ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ ကယားပွညျနယျ ဒီမိုကရကျတဈ ပါတီမှ စေားခူးတလေ ကပွောပါတယျ။ ကယားပွညျနယျအတှငျးရှိကြေးရှာပေါငျး (၁၀၀)ရှိတောငျသူတှရေဲ့ ကြေးရှာအလိုကျ ဦးစားပေးသီးနှံတှကေို အခကျြအလကျလိုကျလံကောကျခံရာမှာ ပွောငျးသီးနှံက ဒုတိယအမြားဆုံး ဦးစားပေးစိုကျပြိုးတဲ့ သီးနှံ ဖွဈတယျလို့ LAIN နညျးပညာအထောကျအကူပွုအဖှဲ့ရဲ့ သီးနှံမြားရဲ့ ဈေးကှကျခြိတျဆကျမှု အတှကျ စဈတမျးစာအုပျမှာ ဖျောပွပါရှိပါတယျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-75825
ရခိုငျပွညျနယျမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျခံရတဲ့လူနာတှေ့ နစေဉျနဲ့အမြှ တိုးလာနသေလို စဈရေးပဋိပက်ခကွောငျ့ ထှကျ ပွေးရတဲ့ ဒသေခံတှေ နစေ့ဉျနဲ့အမြှ တိုးနပေါတယျ။ တိုကျပှဲတှေ မရပျရငျ ကပျရောဂါထိနျးခြုပျဖို့ မဖွဈနိုငျဘူးလို့ ရခိုငျဒသေ မှာ တာဝနျထမျးဆောငျနတေဲ့ ဆရာဝနျ တှကေ ထောကျပွပါတယျ။ ရခိုငျပွညျနယျမှာ ဒီနေ့ စကျတငျဘာလ ၂၈ ရကျနေ့ မနကျပိုငျးအထိ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈပိုးတှလေူ့နာ ၁၂၅၈ ဦးနဲ့ သဆေုံးလူနာ သုံးဦးအထိရှိနပွေီလို့ ကနျြးမာရေးနဲ့ အားကစား ဝနျကွီးဌာန က ထုတျပွနျထားပါတယျ။
ပိုးတှလေူ့နာတှေ တဈနတေ့ခွားတိုးလာသလို တဈဖကျမှာလညျး တိုကျပှဲတှနေဲ့ ပဈခတျမှုတှကွေောငျ့ ဒီလအတှငျး ရသတေ့ောငျမွို့နယျ အပါအဝငျ တခွားဒသေတှကေ လူပေါငျးသောငျးခြီ ဘေးလှတျရာကို ထှကျပွေးတိမျးရှောငျ နရေပါ တယျ။ ထှကျပွေးလာတဲ့ စဈဘေးဒုက်ခသညျတှဟော ရတဲ့နရောမှာ နထေိုငျရတာကွောငျ့ အစိုးရကထုတျပွနျထားတဲ့ ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျမှုကာကှယျရေး ညှနျကွား ခကျြတှနေဲ့အညီ နထေိုငျနိုငျတဲ့ အခွအေနမေရှိဘဲ ပိုးကူးစကျမှုကို ထိနျးခြုပျဖို့ အခကျအခဲဖွဈနတောပါ။ အဲဒီလိုပွေးလာသူတှဟော ပိုမို လုံခွုံတဲ့နရော ရောကျနပေမေယျ့ နရောသဈဟာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျမှုအန်တရာယျမြားတဲ့နရောဖွဈနတေယျလို့ ရသတေ့ောငျမွို့နယျက ဆရာဝနျဒေါကျတာ တငျမွငျ့ဦး က RFA ကို ပွော ပါတယျ။ ရသတေ့ောငျကနေ ထှကျပွေးလာရသူ အမြားစုဟာ စဈတှမွေို့က သောဗိတာရာမကြောငျး စဈဘေးဒုက်ခသညျ စခနျးနဲ့ နီးစပျရာ ဆှမြေိုးတှအေိမျမှာ ခိုလှုံနကွေပါတယျ။
ရသတေ့ောငျမွို့နယျ ရှလေောငျးတငျကြေးရှာကနေ စဈတှကေို ရောကျလာတဲ့ ဦးငွိမျးခမျြးကတော့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈထကျ ကညျြဆနျကို ပိုကွောကျရတယျလို့ ပွောပါတယျ။ လူတှအေစုလိုကျ အပွုံလိုကျထှကျပွေးလာတာဟာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ထိနျးခြုပျဖို့ အခကျအခဲဖွဈစတေယျလို့ စဈတှဆေေးရုံက အထူးကုဆရာဝနျ ဒေါကျတာ အောငျနိုငျလငျးက RFA ကို ပွောပါ တယျ။ ရခိုငျဒသေမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ထိနျးခြုပျရေး လုပျငနျးတှမှော ပါဝငျဆောငျရှကျနတေဲ့ ရခိုငျ လူသားခငျြး စာနာ ထောကျထားမှုဆိုငျရာ ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျရေးအဖှဲ့ (AHCT) အတှငျးရေးမှူး ဦးဇျောဇျောထှနျးကတော့ အခကျအခဲကွီး နှဈခုနဲ့ ရငျဆိုငျနရေတယျလို့ ပွောပါတယျ။ အိုးအိမျစှနျ့ခှာ ထှကျပွေးနရေသူပေါငျးကလညျး လကျရှိအခြိနျအထိ နှဈသိနျး တဈသောငျးကြျော လောကျရှိနပွေီလို့ REC က ဆိုပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/rathedaung-villag ers-flee-9282020035940.html
ကရငျပွညျနယျ၊ ဖားအံမွို့နယျ၊ ကော့ဒါနျးမယျရှာသားတဈဦးတှငျ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ(Covid-19) ရောဂါပိုး စဈဆေးတှရှေိ့ခဲ့ သညျ့အတှကျကွောငျ့ ၎င်းငျးနှငျ့ ထိတှဆေ့ကျဆံခဲ့သူမြားအား နှာခေါငျး၊ အာခေါငျ တို့ဖတျ(Swab)မြားကို (စကျ တငျဘာ ၂၈) တှငျ ရယူပွီးစီးထားကွောငျး သိရသညျ။ အဆိုပါ နှာခေါငျး၊ အာခေါငျ တို့ဖတျမြားကို အမြိုးသားဓာတျခှဲဌာန(ရနျကုနျ)သို့ ပေးပို့ စဈဆေးရမညျဖွဈပွီး ရောဂါပိုးရှိ မရှိ အဖွရေရနျ ရကျအတိအကြ မခနျ့မှနျးနိုငျကွောငျး ကရငျပွညျနယျ၊ ပွညျသူ့ ကနျြးမာရေးဦးစီးဌာနမှူး ဒေါကျတာ ကြျောစှာမွငျ့ က ယခုလို ပွောသညျ။“ရနျကုနျမှာက သောငျးဂဏနျးနဲ့ စဈရတာကိုး။ (အဖွသေိဖို့) သုံးလေးရကျ ကွာသှားတတျတယျ ပေါ့နျော။ အရေးတကွီး လညျးဖွဈတယျ။ ရောဂါသညျလညျး ဖွဈတယျဆို ဖားအံ(ဆေးရုံ)မှာ စဈလို့ရတာပေါ့။”ဟု ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
စကျတငျဘာလ ၁၉ ရကျနကေ့ ကော့လှိုကျကြေးရှာအုပျစု၊ ဝါးဆူးကြေးရှာ၌ ပွုလုပျခဲ့သော ကရငျအမြိုးသားဒီမိုကရကျတဈ ပါတီ-KNDP ၏ မဲဆှယျပှဲ ပွုလုပျခဲ့သော ကိုယျစားလှယျလောငျး ၃ ဦးနှငျ့အတူ စကျတငျဘာ ၂၃ ရကျနမှေ့စ၍ ဖားအံ တက်ကသိုလျဝငျးရှိ အဆောငျတဈခု၌ Q ဝငျခဲ့သညျ့ ဝါးဆူးရှာနှငျ့ အခွားကြေးရှာအခြို့မှ ရှာသူရှာသား ၄၇ ဦး၏ နှာခေါငျး၊ အာခေါငျ တို့ဖတျတို့ကိုမူ ယနမှေ့သာ စတငျ ရယူထားခွငျးလညျးဖွဈသညျ။ Q ဝငျနသေူ KNDP ၏ ဖားအံမွို့နယျ၊ မဲဆန်ဒနယျ အမှတျ(၁) ပွညျနယျလှတျတျော ကိုယျစားလှယျလောငျး နနျးစေးအှာ က “ကမြတို့ ကိုယျစားလှယျလောငျး ၃ဦးကတော့ ဒီနေ့ နှာခေါငျး၊အာခေါငျတို့ဖတျ ယူပွီးပွီပေါ့နျော။ ကနျြတဲ့သူတှကေိုလညျး အကုနျယူထားပွီးပါပွီ။”ဟု ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
လကျရှိအခြိနျတှငျ ကရငျပွညျနယျ အတိုငျးအတာဖွငျ့ ဓာတျခှဲစဈဆေးရနျ စောငျ့ကွညျ့ခံထားရသူ ၅၀၀ဦးခနျ့ရှိကွောငျး လညျး ဒေါကျတာကြျောစှာမွငျ့က ဖွညျ့စှကျ ပွောဆိုသညျ။ http://kicnews.org/2020/09/%e1%80%96%e1%80 %ac%e1%80%b8%e1%80%a 1%e1%80%b6 %e1%
ကခငျြပွညျနယျမွောကျဖြားပိုငျး ပနျနနျးဒငျမွို့သှားသညျ့လမျးတှငျ မိုးသညျးထနျစှာရှာသှနျးမှုကွောငျ့ တောငျမြားပွိုကကြာ လမျးပိတျဆို့မှုရှိနသေဖွငျ့ အလှနျခကျခဲနကွေောငျး ဒသေခံမြား ပွောဆိုခကျြမှ သိရသညျ။
မိုးအဆကျမပွတျရှာသှနျးမှုကွောငျ့ စကျတငျဘာလ ၂၇ ရကျနေ့ နောငျမှနျးမွို့မှ ပနျနနျးဒငျမွို့သို့ သှားသောလမျးမကွီးတှငျ တောငျကမျးပါးမြားပွိုကပြွီး၊ ကွိုးတံတားလညျး ပကျြစီးသှားကွောငျး နောငျမှနျးဒသေခံ ဦး ကူရှငျမငျးထံမှ သိရသညျ။“ပွီးတဲ့အပတျမှာဘဲ မိုးတအားရှာတော့ နောငျမှနျးကြေးရှာနဲ့ ပနျးနနျးဒငျဘကျ သှားတဲ့ လမျးမကွီးပျေါမှာ ၃နရောလောကျမှာ မွပွေိုကပြွီး လမျးတှလေူသှားလို့မရအောငျပိတျဆို့နတေယျ။ နောကျပွီး ပနျနနျးဒငျကိုသှားတဲ့ လမျးပျေါက ကွိုးတံတားလညျး ကမျးပါးတှပွေိုတော့ တဈဖကျစောငျးသှားတယျ။ အခုက သှားလို့မရတဲ့ အခွအေနဖွေဈနတေယျလို့တော့ ကွားတယျ” ဟု ပွောဆိုသညျ။ နောငျမှနျးမွို့မှ ပနျနနျးဒငျသို့သှားသောလမျးတှငျ ခကျခဲနသေဖွငျ့ ဒသေခံမြား၏ စာနပျရိက်ခာအတှကျလညျး မြားစှာအခကျအခဲရှိလာ နိုငျသောကွောငျ့လမျးအမွနျပွုပွငျပေးရနျ လိုအပျကွောငျး ၎င်းငျးက ဆကျလကျပွောဆိုသညျ။
“အရငျနှဈတှမှောက ပွိုတော့ပွိုတယျ။ ဒီလောကျဆိုးဆိုးရှားရှာမဖွဈဘူး။ ခြောငျးရတှေလေညျး တျောတျောကွီးတယျ။ အဲ့ဒီတော့ ပကျြနတေဲ့လမျးတှကေို အစိုးရက မွနျမွနျဆနျဆနျ မလုပျနိုငျသေးရငျ အဲ့ဒီဘကျမှာရှိတဲ့ ဒသေခံတှကေ စားရေး သောကျရေးအတှကျ အငျမတနျခကျခဲလာမယျလို့ ထငျတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ သူတို့ဘကျက စားနပျရိက်ခာတှကေ နောငျမှနျးမွို့ထဲကဘဲ လာဝယျယူကွတာလေ။ နောကျအဲ့မှာက တောငျယာတှလေညျး သိပျမလုပျကွဘူး။ အဲ့ကွောငျ့ လမျး ပကျြနရေငျ ဘယျသူမှ လာနိုငျကွမှာ မဟုတျဘူး။ ပွီးရငျ ကူညီထောကျပံ့ပေးမယျ့ သူတှလေညျး သှားလို့ရမှာ မဟုတျဘူး။ ဒါကွောငျ့ တာဝနျရှိတဲ့ သူတှအေနနဲ့ အခြိနျသိပျမဆှဲစခေငျြဘူး”ဟု ပွောသညျ။ https://burmese.k achinnews .com/ 2020/09/28/%e1%80%95%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%94%e1
ရှမျးပွညျနယျရှိ သိန်ဒီဟျောနနျးနှငျ့ မိုငျးပှနျဟျောနနျးတို့ကို တပျမတျော GE တပျက ပွုပွငျ ထိနျးသိမျးပေးမညျဖွဈရာ ယခု အခါ နယျမွကှေငျးဆငျးပွီး မွပွေငျအခွအေနမြေားကိုလလေ့ာခွငျး၊ ဓါတျပုံမှတျတမျးမြား ရယူခွငျးတို့ကို ဆောငျရှကျလကျြရှိ ကွောငျး သိရသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ၏ ကြိုငျးတုံနှငျ့လားရှိုး ခရီးစဉျမြားတှငျ ရှမျးစာပနှေငျ့ ယဉျကြေးမှုအဖှဲ့မြားနှငျ့တှဆေုံ့ခဲ့ရာ ယငျးအဖှဲ့မြားက ဟျောနနျးမြားကို ပွငျဆငျပေးရနျ တငျပွမှုမြားရှိသဖွငျ့ အထကျပါ အတိုငျး စတငျ ဆောငျရှကျခွငျး ဖွဈကွောငျး တပျမတျောမှ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဗိုလျခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက ပွောသညျ။“သမိုငျးကွောငျးတှရေယျ၊ အခုလောလောဆယျ လကျရှိ ရှိနတေဲ့ ပုံလေးတှရေယျ၊ သိန်ဒီဟျောနနျးကတော့ အစအဆုံး ပွငျရ မှာဆိုတော့ သူက ကွညျ့နတေုနျးပဲ ရှိသေးတယျ။ မိုငျးပှနျဟျောနနျးကတော့ ဘာတှေ ပွငျရမလဲဆိုတာ ထညျ့ရေးထားတာ ရှိတယျ။ ပွငျမှာကတော့ GE တပျက ပွငျမှာ”ဟု ဗိုလျခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက ပွောသညျ။
သိန်ဒီဟျောနနျးကို ရှမျးစာပနှေငျ့ ယဉျကြေးမှုအသငျးက ထိနျးသိမျးထားပွီး ယငျးဟျောနနျးကို စျောဘှားကွီးကိုယျတိုငျက စာ ခြှနျတေျာ့ဖွငျ့ ၎င်းငျးတို့အသငျးသို့ လှဲပွောငျးပေးထားခွငျး ဖွဈကွောငျး၊ ယခုအခြိနျတှငျ ဟျောနနျးမှာ အုပျခုံသာသာရှိပွီး အစိုးရ ကလညျး ၎င်းငျးတို့၏ ထိနျးသိမျးမှုအောကျတှငျ မရှိသဖွငျ့ ပံ့ပိုးကူညီမှု မပေးနိုငျကွောငျး သိနျးနီမွို့ ရှမျးစာပနှေငျ့ ယဉျကြေးမှု အသငျး ဥက်ကဌ ဦးစိုငျးမွငျ့ထှနျးက ပွောသညျ။“ကနြျောတို့ သှားတောငျးတာ မဟုတျဘူး။ အခုတော့ ကနြျောတို့ကိုချေါတှေ့ တာပေါ့။ ကနြျောတို့ ဖွဈခငျြတဲ့ ပုံစံလေးတှေ တပျခြုပျဆီကို တငျပွတော့ ဝိုငျးလုပျကွတာပေါ့။ ကူညီပေးပါ့မယျဆိုပွီ ရခဲ့ တယျ။ GE တပျကတော့ Survey ဆငျးနတေယျ။ ကနြျောတို့ကလညျး ဒါက တညျဆောကျရေး ကျောမတီ ဖှဲ့ ထားပွီးသား ရှိပါတယျ”ဟု ဥက်ကဌ ဦးစိုငျးမွငျ့ထှနျးက ပွောသညျ။
မိုငျးပှနျဟျောနနျးမှာလညျး အဆောကျအဦမှာ ပကျြစီးယိုယှငျးနပွေီး လိုအပျသညျ့ အပိုငျးလိုကျပွုပွငျမညျဆိုပါက အမိုးမိုးခွငျး၊ ကွမျးခငျးခငျးခွငျး၊ ရနေံခြေးသုတျခွငျး၊ ကှနျကရကျတိုငျအဖွောငျ့ ခွံစညျးရိုးကာရံခွငျးမြား ဆောငျရှကျရနျလိုအပျ လကျြရှိ ကွောငျး၊ ယငျးဟျောနနျးကိုပွုပွငျရနျ ကနျြရှိသူ မိသားစုဝငျမြား၏ သဘောထားကို ရယူထားကွောငျး သိရသညျ။ ရှမျးပွညျ နယျရှိ ဟျောနနျးမြားမှာ မိုငျးပှနျဟျောနနျး၊ ကြိုငျးတုံဟျောနနျး၊ ကြေးသီးဟျောနနျး၊ လဲခြားဟျောနနျး၊ သီပေါဟျောနနျး၊ မိုငျးပနျဟျောနနျး၊ မိုငျးပနျဟျောနနျး၊ ညောငျရှဟေျောနနျး၊ သိန်ဒီဟျောနနျး၊ မိုငျးနောငျဟျောနနျး၊ မိုးနဲဟျောနနျး၊ မိုးမိတျ ဟျောနနျး၊ မောကျမယျဟျောနနျ၊ မိုငျးကိုငျဟျောနနျးနှငျ့ ပငျလောငျးဟျောနနျးတို့ ဖွဈကွသညျ။ https://burma.irrawaddy .com/news/2020/09/28/230630.html
ကယားပွညျနယျ၊ ဖားဆောငျးမွို့တှငျ ကရငျအမြိုးသားပါတီက ဖားဆောငျး-မျောခြီး လမျးတလြှောကျ အငျးအား ရာခြီ လှညျ့လညျ မဲဆှယျပှဲကို စကျတငျဘာ ၂၆ ရကျနေ့၊ နံနကျပိုငျးတှငျ ပွုလုပျလြှကျရှိကွောငျး ကရငျအမြိုးသားပါတီ ဖားဆောငျး မွို့နယျ၊ ပွညျနယျအမှတျ-၁ ကိုယျစားလှယျလောငျး စောထောနမေူးက ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။ ၎င်းငျးက “ ဒီနမေ့နကျပိုငျး မှာ ဝတျပွုဆုတောငျးပွီးတော့ ဖားဆောငျးကနေ မျောခြီးကို ကနြျောတို့ ကားတှေ၊ ဆိုငျကယျတှနေဲ့ တကျလာတယျ။ လမျးက ကရငျမြားတဲ့ ရှာတှမှော ဟောပွောတယျ။ ဟောပွောတယျဆိုတာက အသံသှငျးထားတဲ့ အခှတှေကေို ဖှငျ့ပွတာ။ မျောခြီး ရောကျတော့ မိုးအရမျးရှာတယျ။ ကနြျောအခု ပွနျဆငျးလာပွီ” ဟု ပွောသညျ။
ကရငျအမြိုးသားပါတီ၏ ယနမေဲ့ဆှယျပှဲတှငျ ကား ၁၇ စီး၊ ဆိုငျကယျ အစီး ၃၀ နှငျ့ လူအငျအား ၂၀၀ ကြျောပါဝငျကာ ပါတီလကျကမျးစာစောငျမြားဝငှေခွငျး၊ ပါတီ တီရှပျမြားဝငှေခွငျးမြားလုပျဆောငျကာ ဒသေခံ ကရငျ ပွညျသူမြားကလညျး ကွိုဆိုမှုမြား ပွုလုပျခဲ့သညျဟု မဲဆှယျပှဲတှငျ ပါဝငျခဲ့သူမြားက ပွောသညျ။ ကရငျအမြိုးသားပါတီ အနဖွေငျ့ ကယားပွညျနယျ (ကရငျနီပွညျ) ဖားဆောငျးမွို့နယျတှငျ ပွညျသူ့လှတျတျော မဲဆန်ဒနယျတှငျ စောဆာကဘရူရှီး၊ အမြိုးသားလှတျတျောတှငျ ဦးကြျောစိုး (ခ) ဘိုဘိုရှနှေငျ့ ပွညျနယျ လှတျတျော အမှတျ -၁ တှငျ စောထောနမေူးတို့ အသီးသီးဝငျပွိုငျသှားမညျဖွဈသညျ။
ကယားပွညျနယျတှငျ ကယားပွညျနယျဒီမိုကရကျတဈပါတီ၊ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျတို့ စကျတငျဘာ ၂၅ ရကျနေ့ တှငျ အငျအားရာခြီကာ လှိုငျကျောနှငျ့ ဒီမော့ဆိုမွို့နယျတို့ တှငျ မဲဆှယျမှုအသီးသီး ပွုလုပျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ http://kicnews.org/2020/09/%e1% 80%96%e1%8 0%ac%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%86%e1%
အထှထှေရှေေးကောကျပှဲအတှကျ ခငျြးပွညျနယျတောငျ ပျေါဒသေတှငျ တာဝနျကရြာကြေးရှာမြားရှိ မဲရုံမြားသို့ သှားရောကျ ကွမညျ့ ကြောငျးဆရာ/ဆရာမမြားအနဖွေငျ့ အခကျအခဲမြားစှာရှိနကွေောငျးသိရသညျ။
ဖလမျးမွို့နယျ ဗနျဗား အ.လ.က ကြောငျးဆရာမ ဒျေါဝဝေတေငျက “ကြောငျးဖကျကလညျး အောကျတိုဘာလ (၁) ရကျနေ့ ရောကျရမယျလို့ ပွောတယျ အထကျကနေ အမိနျ့စာနဲ့ ဖွဈတဲ့အတှကျ မလာရငျလညျး ကိုယျ့ဘာသာ ဖွရှေငျးလို့ပွောတယျ နိျု့ဆို့အရှယျကလေးတှနေဲ့ဆိုတော့ အန်တရယျမြားတယျ လူလှတျဆိုရငျတျောသေးတယျ ကလေးနဲ့ဆိုတော့ အခုလိုမြိုး ကာလ မှာ လုံးဝအဆငျမပွဘေူး ကားတှကေလညျး မရှိဘူး အောကျတိုဘာလ (၁)ရကျနေ့ ရောကျပွီးတော့ Quarantine ကို (၂၁) ရကျ ကိုယျ့အိမျယာမှာ နရေမယျပေါ့ အဲလိုမြိုးပွောတယျ”ဟုဆိုသညျ။
ကိုဗဈကာလတှငျ ခငျြးပွညျနယျဖကျသို့ မဲရုံကိစ်စနှငျ့ ပကျသကျပွီး တာဝနျထမျး ဆောငျမညျ့ ကြောငျးဆရာ/ ဆရာမမြားတှကျ ပွညျနယျပညာရေးမှူးရုံး၊ ပွညျနယျ ကိုဗဈကာကှယျရေး ကျောမတီမြားနှငျ့ ဆှေးနှေးတိုငျပငျမှုမြား လုပျနကွေောငျး ပွညျနယျ ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျအရာရှိ ဦးလငျးကြျောက ပွောသညျ။ ပွညျနယျရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျအရာရှိ ဦးလငျးကြျောက “ကတြျောတို့နှဈပိုငျးခှဲပွီး စဉျးစားပါတယျ ပွညျနယျပညာရေးမှူးရုံးကနေ အောကျတိုဘာ(၁) ရကျနေ့ ချေါတာရှိတော့ ဒီလိုကာလမှာ ကနျ့သကျခကျြတှကေို တော့ ဆရာ/ဆရာမတှဖေကျကတော့ အခကျအခဲတော့ ကွုံရမှာဘဲ ကွုံရတဲ့အခါမှာ လညျး ဖွလြေော့နိုငျဖို့ ပွညျနယျအဆငျ့ ကိုဗဈကာကှယျရေး ကျောမတီလမျးညှနျခကျြက ဘာရှိမလဲမသိရသေးဘူး အစညျး အဝေးမှာတော့ ထညျ့သှငျး ဆှေးနှေးထားတယျ နောကျဆုံးမဖွဈမနေ လာပွီးတာဝနျထမျးဆောငျဖို့ ခကျခဲတဲ့ ဆရာ/ဆရာမ တှေ ရှိရငျ ဒီဖကျမှာရှိတဲ့ မဲစာရငျးမှာ ပါတဲ့သူ အမြားက လေးစားယုံကွညျတဲ့သူ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ လောငျး တှနေဲ့ အမြိုးမတျောတဲ့ မဲစာရငျးမှာပါတဲ့ သူတှကေို တာဝနျပေးနိုငျဖို့ကို လြာထားတာတှရှေိတယျ”ဟုပွောသညျ။
ခငျြးပွညျနယျတောငျပျေါဒသေဖကျတှငျ ကြောငျးဆရာ/ဆရာမတာဝနျထမျးဆောငျသညျ့အမြားစုမှာ မွပွေနျ့ဒသေမှ အမြားစု ဖွဈပွီး ကိုဗဈကာလတှငျ ခရီးသှား စသညျ့ ကနျ့သကျခကျြ မြားစှာရှိသညျ့တှကျ တာဝနျကြ ဒသေဖကျသို့ သှားရောကျရနျ အခကျခဲမြားစှာရှိကွောငျး သိရသညျ။ https://www.chinworld.org/2020/09/28/%e1%80%81%e1%80%bb%e1 %80%84%e1%80%ba%e1%80
မှနျအမြိုးသားပညာရေးကြောငျးတှကေ ဆရာ ဆရာမတှကေို အစိုးရမှ လစာထောကျပံ့ပေးဖို့ အပါအဝငျ အခကျြသုံးခကျြကို တောငျးဆိုထားတယျလို့ မှနျအမြိုးသားပညာရေးကျောမတီက ပွောပါတယျ။ ဒသေခံတှရေဲ့ အလှူငှတှေနေဲ့ ရပျတညျနရေတဲ့ မှနျအမြိုးသားကြောငျးတှဟော ဘဏ်ဍာရေးအခကျအခဲရှိနတော ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ တိုငျးရငျးသားရေးရာဝနျကွီးနဲ့ တှဆေုံ့ခဲ့ပွီး အစိုးရ ကြောငျးဆရာတှကေို ပေးတဲ့ လစာရဲ့ (၄၀)ရာခိုငျနှုနျးကို မှနျအမြိုးသားကြောငျးဆရာတှကေို ထောကျပံ့ ပေးဖို့ ၊မှနျအမြိုးသားကြောငျးတှလေညျး အစိုးရရဲ့ထောကျပံ့မှု ရရှိဖို့ နဲ့ ပကျြစီးယိုယှငျးနတေဲ့ ကြောငျးတှကေို ပွနျလညျ ပွငျဆငျပေးဖို့ အစရှိတာတှကေို တောငျးဆိုခဲ့တယျလို့ ပွောပါတယျ။
“အကုနျလုံးညိနှိုငျးထားပွီးပွီး သဘောတူတယျ။ အဓိကတော့ ကြောငျးဆရာတှရေဲ့ ထောကျပံ့လစာကို (၄၀) ရာခိုငျနှုနျး လောကျ ပေးဖို့ပေါ့။ ဥပမာ အစိုးရ ကြောငျးဆရာတှကေ တဈသိနျးရှဈသောငျးရရငျ အာ့တာရဲ့ လေးဆယျရာခိုငျနှုနျးလောကျ ကို ထောကျပံ့ပေးဖို့ပေါ့ ကနျြတာက အလှူရှငျတှရေဲ့ ထောကျပံ့မှုနဲ့ ပေးမယျပေါ့”လို့ မှနျအမြိုးသားကြောငျး တာဝနျခံဆရာ မငျးအောငျဇကေ ပွောပါတယျ။ မှနျအမြိုးသားကြောငျးတှဟော မွနျမာစကားနားမလညျတဲ့ ဒသေခံ တိုငျရငျးသား ကလေး တှကေို မိခငျမှနျဘာသာစကားအခွပွေုကာ မူလတနျးအဆငျ့မှစတငျပွီးတော့ မွနျမာစကားကိုသငျကွားပေးနတော ဖွဈပါ တယျ။ မူလတနျးပွီးမွောကျပါက မွနျမာစကားတတျမွောကျပွီးဖွဈလို့ အလယျတနျးအဆငျ့မှာ မှနျစာနဲ့ မှနျသမိုငျးကို ထပျဆောငျးဘာသာအနနေဲ့ သငျကွားနသေလို အစိုးရသငျရိုးညှနျးတမျးတှကေိုလညျးသငျကွားပေးနတော ဖွဈပါတယျ။
မှနျအမြိုးသားကြောငျးတှရေဲ့ ဆရာ ဆရာမတှဟော လစာနညျးပါးတဲ့အပွငျ အစိုးရရဲ့ အသိအမှတျပွုမှုကိုလညျး မခံရတာ ကွောငျ့ စတေနာရှထေ့ားပွီးတော့သာ လုပျကိုငျနရေတယျလို့ ဆိုပါတယျ။“ဆရာတှကေ စတေနာ ရှထေ့ားပွီးတော့ လုပျနကွေတာပါ လစာက နညျးတယျလေ အစိုးရရဲ့ အသိမှတျပွုမှုကိုလညျး မခံရဘူး စိတျဓာတျနဲ့ပဲ လုပျနရေတာပါ”လို့ မှနျပညာရေးဌာန(ဗဟို)တာဝနျခံ မိစာထားက ပွောပါတယျ။ မှနျ ကရငျ တနင်ျသာရီ ဒသေတှမှောတော့ မှနျအမြိုးသားကြောငျး ၁၃၃ ကြောငျးရှိပွီး ဆရာ ဆရာမ ၇၀၀ ကြျောနဲ့ ကြောငျးသူ ကြောငျးသား တဈသောငျးကြျောတို့က ပညာသငျကွား နပေါ တယျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-75823
ကပျရောဂါဖွဈပှားနတေဲ့ လကျရှိကာလမြိုးမှာ တပျမတျောက တဈနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာနဲ့ အပဈအခတျရပျစဲရေး ကွညော သငျ့တယျလို့ ဝဖေနျကွပမေယျ့ ရခိုငျပွညျနယျမှာ AA အဖှဲ့က တိုကျခိုကျနတောရှိတဲ့အတှကျ လကျတှေ့ အကောငျအထညျ ဖျောလို့မရဘူးလို့ တပျမတျောသတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဗိုလျခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက သတငျးစာ ရှငျးလငျးပှဲမှာပွောပါတယျ။ တပျမတျောသတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့က အငျတာနကျအှနျလိုငျးကနေ ဒီနေ့ နပွေညျတျောမှာ ပွုလုပျတဲ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ သတငျးထောကျ တဈဦးရဲ့ မေးခှနျးကို ဗိုလျခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက ဖွကွေားခဲ့တာပါ။
ကပျဘေးကာလအတှငျး ရခိုငျမှာ တပျမတျောက ထိုးစဈဆငျမှုတှနေဲ့ တိုကျပှဲတှကေို လြှော့ခဖြို့ နိုငျငံတကာအဖှဲ့အစညျး တှအေပါအဝငျ အရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးတှကေ တောငျးဆိုနတောနဲ့ ပတျသကျလို့ RFA သတငျးဌာနက မေးမွနျးရာမှာ တပျမတျောဘကျက ထိုးစဈဆငျတိုကျခိုကျတာတှမေရှိပဲ AA အဖှဲ့က စဈရယောဉျတှကေို ခြောငျးမွောငျးပဈခတျတဲ့အတှကျ ထိခိုကျဒဏျရာရတာတှရှေိပွီး ခုခံကာကှယျတဲ့အနနေဲ့ ပွနျလညျပဈခတျတာတှေ ရှိတယျလို့ ပွောပါတယျ။ ရခိုငျပွညျနယျ ထဲမှာ သွဂုတျလ လယျလောကျကစပွီး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈပိုး တဈကြော့ပွနျဖွဈပှားခဲ့ရာ အခုဆိုရငျ ရနျကုနျနဲ့ ပွညျနယျတိုငျး လေးခုတို့မှာ ကူစကျနှုနျးတှေ မွငျ့တကျနပေါတယျ။ ဒသေခံတှရေဲ့ ပွောဆိုခကျြအရ မယေုမွဈမှာရှိတဲ့ တပျမတျောဇကျ ရယောဉျက လကျနကျကွီးတှေ၊ လကျနကျငယျတှနေဲ့ ပဈခတျတာတှကွေောငျ့ ရှာထဲကို လကျနကျကွီးကညျြကပြွီး ရှာသား တှေ သဆေုံးတာ၊ ဒဏျရာရတာတှရှေိလို့ ကွောကျလနျ့ပွီး ထှကျပွေးလာရတာဖွဈတယျလို့ ပွောကွပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ တရားစီရငျရေးစနဈကို စိနျချေါတာ၊ အခြုပျအခွာအာဏာကို စျောကားတဲ့သဘောမြိုး ဖွဈနတေဲ့ အတှကျ အစိုးရကို ပွနျလှဲပွောငျးပေးသငျ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/cannot-stop-war-in-rakh ine-09262020063720.html
ရှမျးပွညျနယျ၊ သီပေါမွို့မှာ မနေ့ နလေ့ယျပိုငျးက မူးယဈဆေးဝါးဖမျးဆီးရာမှာ အပွနျအလှနျ ပဈခတျတာကွောငျ့ ရဲတပျဖှဲ့ ဝငျ ၁ ယောကျ ကဆြုံးခဲ့တယျလို့ မွနျမာနိုငျငံရဲတပျဖှဲ့က သတငျးထုတျပွနျပါတယျ။ မူးယဈဆေးဝါးတားဆီးနှိမျနငျးရေး ရဲတပျဖှဲ့က တပျဖှဲ့ဝငျတှဟော သတငျးအရ သီပေါတံတားအဝငျမှာ လားရှိုးမွို့ကနေ သီပေါမွို့ဘကျကို မောငျးနှငျလာတဲ့ Mark II အမြိုးအစား မျောတျောယာဉျကို စဈဆေးဖို့ တားဆီးခဲ့တာမှာ နောကျပွနျလှညျ့မောငျးနှငျထှကျပွေး သှားပါတယျ။
အတားအဆီးတှနေဲ့ ပိတျဆို့ခဲ့တာကွောငျ့ ကားရပျတနျ့ပွီး အမြိုးသား ၃ ယောကျ ဆငျးလာကာ ၁ ယောကျက သနေတျ အတိုနဲ့ ပဈခတျလို့ အပွနျအလှနျ ပဈခတျခဲ့တယျလို့ မွနျမာနိုငျငံ ရဲတပျဖှဲ့က ထုတျပွနျပါတယျ။
သနေတျနဲ့ပဈတဲ့ အမြိုးသားက ထှကျပွေးလှတျမွောကျသှားပွီး ကနျြ ၂ ယောကျကိုတော့ အရှငျဖမျးဆီးရမိတယျလို့ ဆိုပါ တယျ။ အပွနျအလှနျပဈခတျတာကွောငျ့ မူးယဈဆေးဝါးတားဆီးနှိမျနငျးရေးရဲတပျဖှဲ့က ရဲတပျကွပျကွီး အေးလှငျမှာ ကညျြထိ မှနျကဆြုံးခဲ့ပါတယျ။ ဖမျးဆီးရမိတဲ့သူတှကေတော့ သီပေါမွို့နယျ နမျ့လနျရှာနေ စိုငျးစံဌေးနဲ့ ကြောကျမဲမွို့နယျ မိုငျးတငျးရှာ နေ စိုငျးမှမျးဦးတို့ဖွဈပွီး ထှကျပွေးလှတျမွောကျသှားသူကတော့ မိုငျးကိုငျမွို့နယျ ရပျကှကျ ၂ မှာ နတေဲ့ စိုငျးစောထှနျး ဖွဈ တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ကားပျေါကနေ ဘိနျးဖွူ ၁၁၀ ဂရမျ၊ စိတျကွှရူးသှပျဆေးပွား ၁၁,၉၉၅ ပွား၊ ပှိုငျ့ ၂၂ ကညျြ ၁၇ တောငျ့ တို့ကို သိမျးဆညျး ရမိခဲ့ပွီး ကဆြုံးသှားတဲ့ တပျဖှဲ့ဝငျရဲ့ ကနျြရဈသူ မိသားစုကို လူမှုရေးထောကျပံ့ပေးမယျလို့ ရဲတပျဖှဲ့က ထုတျပွနျထားပါ တယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/413296
ကယားပွညျနယျအတှငျး ရှေးကောကျပှဲ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျကွမညျ့သူတှထေဲမှာ တဈသီးပုဂ်ဂလအနဖွေငျ့ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျ မညျ့ လူဦးရသေညျ ၁၃ ဦးရှိပါတယျ။ လကျရှိ ဖရူဆိုမွို့နယျ အမြိုးသားလှတျတျောအမှတျ(၅) ကိုယျစားလှယျတဈဦးဖွဈတဲ့ ဒျေါရှားမူ က အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျကနေ ပွနျလညျရှေးခွယျခွငျးမခံရတဲ့အတှကျ တဈသီးပုဂ်ဂလအနဖွေငျ့ ပွနျလညျ ဝငျ ရောကျယှဉျပွိုငျသှားမယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ” ပွညျသူပေးလာတဲ့တာဝနျတှကေို တဈခေါကျမဟုတျရငျ နှဈခေါကျ၊ နှဈခေါကျမဟုတျရငျ သုံးခေါကျ ရအောငျလုပျဆောငျပေးမယျ။ အရငျတုနျးကလညျး ဒီလိုပဲလုပျပေးခဲ့တယျ။ ဘာလုပျပေးမယျ၊ ညာလုပျပေးမယျ အနျတီကတိမပေးဘူး ပွညျသူက တောငျးဆိုလာတဲ့ဟာ အနျတီလုပျပေးမယျ။ ″ လို့ ဒျေါဆားမူက ပွောပါတယျ။
တဈသီးပုဂ်ဂလအနဖွေငျ့ ဒီးမော့ဆိုမွို့နယျ၊ ပွညျနယျလှတျတျောမဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၂)မှာ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ ခှနျးရို မောငျးဒို ကလညျး ၎င်းငျးအနဖွေငျ့ ရှေးကောကျပှဲဝငျရောကျယှဉျပွိုငျရသညျ့ အကွောငျးရငျးကိုအခုလိုပွောပါတယျ။ ″ အဓိက ကနြျောရဲ့ရညျရှယျခကျြက ၂၀၂၀မှာ နိုငျခဲ့မယျဆိုရငျ တောငျသူလယျသမားအရေး၊ အလုပျသမားအရေးကို ထိထိရောကျ ရောကျနဲ့ အတတျနိုငျဆုံး၊ ကနြျောတို့ တောငျသူလယျသမားက အရမျးကွီးနိမျ့ကတြာကော ကနြျောတို့ ကယားပွညျနယျ မှာလေး။ အဲ့ဒါ ကနြျောတို့ တောငျသူလယျသမားတှေ အမြားကွီးလိုအပျတာကိုး။ ကနြျောတို့ပွညျနယျမှာ အလုပျလကျမဲ့တှေ အမြားကွီးရှိတာကို။ ပွနျကွညျ့လိုကျပါ။ ကနြျောတို့တှေ အပငျလေးတှကေ ဖွဈလာတဲ့ဟာ ဈေးကှကျမရှိတာတှလေညျး ကနြျောတို့တှရေ့တယျ။ ဒါ တောငျသူတှေ ရငျဆိုငျရတဲ့ အခကျအခဲပေါ့နော။ ဒါတှကေို လုပျပေးမယျလို့ ကနြျောရညျရှယျ ခကျြရှိပါတယျ။″လို့ ပွောပါတယျ။
ရှေးကောကျပှဲမှာ ကယား(ကရငျနီ)ပွညျတှငျး ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျဖို့ ပါတီ (၁၃)ပါတီရှိပွီး ကိုယျစားလှယျလောငျးအပါအဝငျ ၂၇၂ ဦး ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့အထဲမှာမှ တဈသီးပုဂ်ဂလကအနနေဲ့ ၁၃ ဦးပါဝငျပါတယျ။ မွို့နယျအသီးသီးမှ တဈသီးပုဂ်ဂလ အနဖွေငျ့ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးတှကေ လှိုငျကျောမွို့နယျမှာ (၁)ဦး၊ ဒီးမော့ဆိုမွို့နယျမှာ (၁)ဦး၊ ဖရူဆိုမွို့နယျတှငျ(၅)ဦး၊ ဘောလခဲမွို့နယျမှာ (၁)ဦး၊ ဖားဆောငျးမွို့နယျ(၂)ဦး၊ မယျစဲမွို့နယျ(၂)ဦးနှငျ့ ရှားတောမွို့နယျ (၁)ဦး စုစုပေါငျး ၁၃ဦးဖွဈပါတယျ။ https://www.bn ionline.net/mm/news-75824
လကျရှိကရငျပွညျနယျတှငျ Covid-19 ရောဂါ ကူးစကျမှု အနညျးငယျတိုးလာသညျ့အတှကျ ကရငျပွညျနယျအတှငျးရှိ ကြေးရှာအမြားစုသညျ Covid ရောဂါပိုးကို ကာကှယျတားဆီးသညျ့အနဖွေငျ့ ပွငျပမှ လူဝငျလူထှကျ သှားလာခှငျ့ကို ပိတျထားသညျဟု သိရသညျ။ မိမိကြေးရှာအတှငျး ကပျရောဂါကူးစကျမှု မရှိစရေနျအတှကျ ပွငျပဧညျ့သညျမြား ကြေးရှာ အတှငျး ဝငျခှငျ့မပေးသညျ့ ရှာ မြားရှိသလို ကြေးရှာအတှငျး နထေိုငျသညျ့သူမြားကလညျး စားဝတျနရေေးအတှကျ လိုအပျမှ သာ အပွငျထှကျပွီး ထှကျပါကလညျး သကျဆိုငျရာကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူးထံ ထောကျခံစာပါမှ ထှကျခှငျ့ပေးကွောငျးလညျး သိရသညျ။ အဆိုပါ တငျးကွပျထားမှုသညျ မွို့ပွနှငျ့ နီးစပျသညျ့ ကြေးရှာမြားမှ ရောဂါပိုးတှရှေိ့သူနှငျ့ နီးစပျသညျ့ ကြေးရှာ အခြို့အပွငျ အစိုးရနှငျ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ အဖှဲ့အစညျးမြား နှဈဖကျ ရောနှောအုပျခြုပျနသေညျ့ ကြေးရှာမြားတှငျ ပို၍ တငျးကွပျထားကွောငျးလညျး သိရသညျ။
KNU ထိနျးခြုပျနယျမွေ ကော့ကရိတျတောငျပိုငျးတှငျ ဒသေခံမြား Covid ရောဂါ မကူးစကျရနျအတှကျ ကော့ကရိတျနှငျ့ မွဝတီမွို့မြားသို့ သှားခှငျ့မပွုသလို ကော့ကရိတျမွို့နယျ တောငျပိုငျးနယျမွတေဈခုလုံးကို ပိတျပငျမှု(Lock Down) ခထြား ကွောငျးလညျး သိရသညျ။ KNU ကော့ကရိတျမွို့နယျ Covid ၁၉ အရေးပျေါတုနျ့ပွနျရေးကျောမတီ အတှငျးရေးမှူး-၂ မနျးမွအေး က “အခု မွဝတီမှာ ပိုးတှလေူ့နာတိုးလာတယျ။ အဲဒီပိုးတှလေူ့နာနဲ့ ထိစပျတဲ့လူတှကေလညျး ကော့ကရိတျမွို့ မှာ သှားလာတာရှိတာ ကွောငျ့ ကနြျောတို့ ကော့ကရိတျတောငျပိုငျးတဈခုလုံးမှာ မွို့တှကေို လုံးဝ ပေးမသှားတော့ဘူး။ ကနြျောတို့ ဒီလိုလုပျ တာကလညျး အစိုးရအုပျခြုပျရေးအပိုငျးလညျး သူတို့အားပေးတယျ။ ဒါက ကိုယျ့ပွညျသူလူထုတှကေို ကွိုတငျကာကှယျ ပေးထားတာပဲ။”ဟု ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
“အောကျခွမှောတော့ အဲလိုသှားလာကနျ့သတျ စီစဈတာတှေ ရှိတယျလို့ သိရတယျ။ တရားဝငျတော့ ကနြျောတို့ စာထုတျ ထားတာတော့ မရှိဘူး။ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောရမယျဆိုရငျ အားကစားနဲ့ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနတို့ သကျဆိုငျရာ ပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့ကနေ ထုတျပွနျထားတာတို့ စသဖွငျ့ အဲဒီလိုပျေါမှာပဲ ကနြျောတို့က ထုတျရတာပေါ့နျော။ အခုတလော ကြေးရှာ သျောလညျးကောငျး၊ ကနျ့သတျတားဆီးတာတို့ စသဖွငျ့ ဒါနဲ့ပတျသကျပွီး ညှနျကွားထားတာတော့ မရှိပါဘူး။”ဟု ကအေိုငျစီ သို့ ပွောသညျ။ ပွညျထောငျစု ဝနျကွီးဌာနမြားမှ Covid-19 ကာကှယျ ထိနျးခြုပျတား ဆီးရေးအတှကျ စကျတငျဘာလ ၃၀ ရကျနအေ့ထိ ထုတျပွနျထားခဲ့သော ပွညျသူသို့ ပနျကွားခကျြ၊ အမိနျ့၊ အမိနျ့ကွျော ငွာစာ၊ ညှနျကွား ခကျြမြားအား အောကျတိုဘာလ ၃၁ရကျနအေ့ထိ ရကျတိုးမွှငျ့ သတျမှတျဆောငျရှကျထားပါကွောငျး COVID-19 ကာကှယျ၊ ထိနျးခြုပျ၊ ကုသရေး အမြိုးသားအဆငျ့ ဗဟိုကျောမတီက စကျတငျဘာလ ၂၈ ရကျ(ယမနျနေ့) တှငျ အသိပေး ကွညော လိုကျသညျ။ http://kicnews.org/2020/09/%e1 %80%80%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%
သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး မူဆယျ (၁၀၅) မိုငျ ကုနျသှယျရေးဇုနျတှငျ ကားသမားတဦးထံ ကိုဗဈ-၁၉ တှရှေိ့ကွောငျး စုံစမျး သိရသညျ။ အဆိုပါ ကားသမား၏ ဓာတျခှဲနမူနာကို မူဆယျဆေးရုံတှငျ စဈဆေးခဲ့ရာ ကိုဗဈ-၁၉ (positive) တှရှေိ့ပွီး၊ မန်တလေးသို့ ဓာတျခှဲနမူနာထပျမံစဈဆေးရနျ ပို့ထားကွောငျး မူဆယျမွို့ ဂရုဏာလူမှုရေး အသငျးမှ ဦးသောငျးထှနျး က သြှမျးသံတျောဆငျ့သို့ ပွောသညျ။ အဆိုပါ ကားသမားသညျ ကြောကျမဲမွို့တှငျ နထေိုငျသညျ့ အသကျ ၃၁နှဈ အရှယျ ဖွဈပွီး၊ယမနျနေ့(စကျတငျဘာ ၂၈) ရကျ တှငျ အနံ့မရခွငျး၊ ခေါငျးနှောကျခွငျး၊ မောခွငျး စသညျ့ ဝဒေနာခံစားရသဖွငျ့ ကိုဗဈ-၁၉ ပိုးရှိ၊ မရှိ စဈဆေးခဲ့ရာ ကိုဗဈ-၁၉ Positive တှရေ့ကွောငျး ဦးသောငျးထှနျး က ပွောသညျ။
ထိုကားသမားထံတှငျ ကိုဗဈ-၁၉ ဖွဈကွောငျးကို မူဆယျဆေးရုံ မှဆရာဝနျကွီး ကိုယျတိုငျ ပွောကွားခွငျးဖွဈကွောငျး၊ သို့သျော သခြောရနျ အတှကျ မန်တလေးကို ထပျမံပို့ဆောငျစဈဆေးခွငျးဖွဈကွောငျး လညျး သိရသညျ။“မန်တလေးကို ပို့တာက သခြောအောငျလို့ပါ။ ဒီနေ့ ည အဖွပေါခငျြပါမယျ။ ဒါပမေယျ့ မူဆယျ ဆေးရုံကတော့ Positive ဆိုတာ အတညျပွုတယျ” ဟု ဦးသောငျးထှနျး ကဆိုသညျ။ ထို ကာသမားနှငျ့ထိတှခေဲ့သညျ့ ကား (၄) စီး မှာ ကားသမား ၆ ဦးရှိပွီး ၎င်းငျးတို့ကိုလညျး ဓါတျခှဲနမူနာ စဈဆေးရနျ ဆောငျရှကျနပွေီဖွဈကွောငျး သိရသညျ။“သူနဲ့ ထိတှေ့ ဆကျစပျသူက အားလုံး ကား (၄) စီးမှာ သူအပါအဝငျဆို ၇ ဦးပါ။ ကနျြတဲ့သူတှကေိုလညျး ဆေးစဈဖို့ ဆောငျရှကျနပေါတယျ။ ၁၀၅ မိုငျမှာပဲ ကားတနျးနတေုနျးပဲ ရှိသေးတယျ” ဟု ဦးသောငျးထှနျး ကပွောသညျ။
ထိုကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျပွီး မူဆယျဆေးရုံမှ ကိုဗဈ-၁၉ ကာကှယျ၊တားဆီးရေး မှ ဆရာဝနျမြားကို သြှမျးသံတျောဆငျ့ မှ ဆကျသှယျခဲ့ရာ ဖုနျးကိုငျခွငျးမရှိခဲ့ပေ။ သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး မူဆယျမွို့သညျ မွနျမာ – တရုတျ နယျစပျဖွဈပွီး မွနျမာနိုငျငံ၏ အကွီးမားဆုံး ကုနျသှယျရေးဇုနျဖွဈသညျ။ မွနျမာနိုငျငံမှ တရုတျသို့ဝငျမညျ့ ကုနျကားမြားသညျ ယာဉျမောငျး အစားထိုး မောငျးရ ကွောငျးသိရသညျ။ https://burmese.shan news.org/archives/18688
ရခိုငျပွညျနယျ၊ မောငျတောမွို့မှာ မောငျတောခရိုငျရှေးကောငျပှဲကျောမရှငျဥက်ကဋ်ဌ အပါအဝငျ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါပိုးကူးစကျခံရ သူ လူနာသဈ ၈ ဦးနဲ့ ဘူးသီးတောငျမွို့မှာ လူနာသဈ ၂ ဦး ထပျတိုးလာပါတယျ။ မောငျတောမွို့နယျ ကိုဗဈ-၁၉ ကာ ကှယျ၊ ထိနျးခြုပျ၊ ကုသရေးကျောမတီ ဥက်ကဋ်ဌ မွို့နယျအုပျခြုပျမှူး ဦးအောငျရဲက “ဟုတျပါတယျ။ ခရိုငျရှေးကောကျပှဲကျောမ ရှငျ ဥက်ကဋ်ဌ အပါအဝငျ မောငျတောမှာ လူနာသဈ ၈ ဦး ရောဂါပိုးထပျတှတေ့ယျ။ ဆေးရုံကဆငျးတာက ၁၃ ဦးရှိတယျ။ ကနျြတာကတော ၂၀ ဦးကနျြတယျ။”လို့ ပွောပါတယျ။
မောငျတောခရိုငျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျဥက်ကဋ်ဌဟာ အနံ့မရတာကွောငျ့ ပွီးခဲ့တဲ့ ၆ ရကျလောကျက ဆေးရုံသှားပွရာမှ သူ့ကို Home Quarantine နထေိုငျစခေဲ့ပွီး သူရဲ့ နှာခေါငျးနဲ့ အာခေါငျတို့ဖတျတှကေို စဈဆေးရာမှာ စကျတငျဘာလ ၂၈ ရကျ ညနေ ၈နာရီ ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာနရဲ့ သတငျးထုတျပွနျခကျြအရ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါပိုးတှရှေိ့ကွောငျး သိရှိခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာ ကျောမရှငျဥက်ကဋ်ဌကို မောငျတောခရိုငျပွညျသူဆေးရုံကွီးရဲ့ အထူးကွပျမတျဆောငျ မှာ ဆေးကုသမှုခံယူနပွေီး ကနျြးမာနတေယျလို့ ခရိုငျကနျြးမားရေးဌာနက သိရပါတယျ။ မောငျတောမွို့က ကိုဗဈ-၁၉ လူနာ ၈ ဦးကတော့ မောငျတောခရိုငျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျဥက်ကဋ်ဌ ၁ ဦး၊ ဝသောလီကြေးရှာသား ၂ ဦး၊ မွို့မ ကညငျတနျး ကြေးရှာသား ၂ ဦး၊ နယျစညျးမခွားဆရာဝနျမြားအသငျးMFS မှ ပိုးတှသေူ့ရဲ့ မိသားစုဝငျ ၂ ဦးနဲ့ အနံ့မရတဲ့အတှကျ စဈဆေးရာမှ ပိုးတှသေူ့အမြိုးသမီး ၁ ဦး တို့ဖွဈကွပါတယျ။
မောငျတောခရိုငျအတှငျး ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါပိုးတှရှေိ့သူတှေ ဒုတိယလှိုငျးအဖွဈ သွဂုတျ ၂၆ ရကျမှ စတငျတှရှေိ့လာရာ စကျတငျဘာလ ၂၈ ရကျအထိ ရောဂါပိုးတှရှေိ့သူ မောငျတောမွို့မှာ ၅၉ ဦး၊ ဘူးသီတောငျမွို့မှာ ၂၉ ဦး စုစုပေါငျး ၈၈ ဦးအထိ ရှိလာနတောပါ။ http://burmese.dvb.no/archives/413293
ကိုဗဈ-၁၉ ကာလမှာ တရုတျနိုငျငံသို့ ကုနျတငျယာဉျ တဈရကျလြှငျ ကားအစီးရေ (၁၅၀) ဝနျးကငျြ သာ ပို့ဆောငျနိုငျကွောငျး သဈသီးဝလံ ကုနျစညျဒိုငျ မှ စုံစမျးသိရှိရသညျ။ သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး မူဆယျမွို့နယျရှိ မွနျမာ – တရုတျ နယျစပျမှာ မွနျမာနိုငျငံ ဘကျမှ တရုတျနိုငျငံသို့ တငျပို့ သညျ့ကုနျတငျယာဉျ တဈရကျလြှငျ ကားအစီးရေ (၁၅၀) ခနျ့သာ ရှိကွောငျး မူဆယျ ၁၀၅ မိုငျ သဈသီးဝလံ ကုနျစညျဒိုငျ ဒုဥက်ကဋ်ဌ ဦးခငျမောငျ က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကိုပွောသညျ။“တဈရကျကို ကား အစီး (၁၅၀) လောကျပဲ ဝငျလို့ရတယျ။ တနျးစီ ထားတဲ့ ကားတှကေ ၃၀၀ လောကျရှိတယျ။ အကုနျဝငျလို့ မရဘူး။ ” ဟု ဦးခငျမောငျ ကပွောသညျ။
မွနျမာနိုငျငံမှ တရုတျသို့ဝငျမညျ့ ကုနျကားမြားသညျ ယာဉျမောငျး အစားထိုးမောငျးရသဖွငျ့ အခကျအခဲရှိပွီး အခြိနျကုနျ ကွောငျး ၊ တရုတျပွညျသို့ဝငျရနျ အတှကျ တစီးလြှငျ တပတျစောငျ့ဆိုငျးရကွောငျး လညျး ဦးခငျမျောငက ပွောသညျ။ ကိုဗဈ-၁၉ မဖွဈခငျ ကာလတှငျ မွနျမာ မှ တရုတျနိုငျငံသို့ တဈရကျလြှငျ ကုနျတငျယာဉျပေါငျး (၆၀၀) ဝနျးကငျြခနျ့ရှိကွောငျး သိရ သညျ။“ကိုဗဈ မဖွဈခငျကတော့ ကုနျတငျယာဉျတှေ တဈရကျ ၅၀၀ ၊ ၆၀၀ လောကျ တရုတျဘကျခွမျး ဝငျလို့ရတယျ”ဟု ဦးခငျမောငျ ကပွောသညျ။ ရှလေီမွို့မှာ ကိုဗဈ -၁၉ အတညျပွု လူနာရှိသညျ့အတှကျ ရှလေီ၊ ကယျြဂေါငျနဲ့ ဝမျတိနျမွို့ တို့မှာ နထေိုငျသညျ့ ပွညျသူ အားလုံးကို ကိုဗဈ-၁၉ စဈဆေးပေးခဲ့ပွီး ပိုးတှလေူ့နာ မရှိသညျ့အတှကျ တရုတျဘကျမှ Lockdown ဖွလြေော့ပေးခဲ့ကွောငျးသိရသညျ။
မူဆယျ (၁၀၅) မိုငျ ကုနျသှယျရေးဇုနျသညျ မွနျမာနိုငျငံ၏ အကွီးဆုံးသော ကုနျသှယျရေးဇုနျ တဈခုဖွဈသညျ။မွနျမာ-တရုတျ နယျစပျ ဝငျ၊ ထှကျ ဂိတျမြားတှငျ ကုနျပစ်စညျး စီးဆငျးမှု သာဖှငျ့လှဈပေးခဲ့ပွီး၊ လူဝငျ ၊ လူထှကျမြားကို ဧပွီလ နှောငျးပိုငျး က စတငျပွီး ပိတျလိုကျကွောငျး သိရသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/18671
ထိုငျး-မွနျမာ နယျစပျ ကုနျသှယျရေးစခနျး တခုဖွဈသညျ့ တာခြီလိတျ- မယျဆိုငျ ကုနျသှယျရေး အကနျ့အသတျမြားကို ပွနျလညျ ဖွလြှေော့ရနျ ၂ နိုငျငံ သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ နှဈနိုငျငံမှ ကုနျသှယျရေးနှငျ့ အုပျခြုပျရေး တာဝနျရှိ သူတို့က ပွီးခဲ့တဲ့ စကျတငျဘာလ ၂၅ ရကျတှငျ အလှတျသဘော တှေ့ ဆုံ ညှိနှိုငျးပွီးနောကျ စကျတငျဘာလ ၂၈ (ယနေ့) တှငျ ထပျမံ ဆှေးနှေးကာ သဘောတူညီခကျြမြား ရရှိခဲ့ကွောငျး တာခြီလိတျ ကုနျသှယျရေးတာဝနျခံ ညှနျကွားရေးမှူး ဦးစိနျဝငျးက ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။“အကနျ့အသတျတှေ လုပျတာမှာနှဈဖကျ နားလညျမှု လှဲနတေဲ့ကိစ်စတှေ ပွနျလညျသှား တယျ။ ဒီဘကျက လြှော့ခပြေးဖို့တောငျးဆိုတဲ့ တခြို့အခှနျတှကေ ထိုငျးအစိုးရက ကိုဗဈ စဖွဈကတညျးက လြှော့ခြ ပေးထားပွီးပေါ့။ ဒါပမေယျ့ အောကျခွေ မှာက ဒီအတိုငျး ကောကျနတောမြိုး ဖွဈတာကို သူတို့ စိစဈပေးမယျလို့ ပွောသှား တယျ”ဟု ဆိုသညျ။
ယငျးကွောငျ့ ထိုငျးနိုငျငံဘကျသို့ ဝငျရောကျခှငျ့ပွုထားသော ကုနျတငျမျောတျောယာဉျအရအေတှကျ ၁၆၈ စီး(၁ရကျ ဝငျ ရောကျခှငျ့ပွုသော အရအေတှကျ) တှငျ မွနျမာမှတျပုံတငျ မျောတျောယာဉျသညျလညျး ပွနျလညျ အကြုံးဝငျပွီး ဖွတျသနျး ခှငျ့ ရရှိမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ ထို နှဈနိုငျငံကုနျသှယျရေးကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျပွီး ယနေ့ ဆှေးနှေးခဲ့ကွသော သဘောတူ ညီခကျြမြားကို ရှမျးပွညျနယျအစိုးရသို့ တငျပွပွီးခှငျ့ပွုညှနျကွားပါက စကျတငျဘာလ ၂၉ ရကျ သို့မဟုတျ စကျတငျဘာလ ကုနျပိုငျး၌ ပုံမှနျကုနျသှယျရေး အခွအေနနေီးပါး ပွနျလညျ ဖွဈနိုငျမညျ ဟု ညှနျကွားရေးမှူး ဦးစိနျဝငျးက ပွောသညျ။ တာခြီလိတျမွို့နယျ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးခမျြးမွစေ့ောက “ကားတှကေို မကနျ့သတျတော့ဘဲ ပုံမှနျအတိုငျး သှားမယျပေါ့။ နောကျ ဖွတျသနျးခှငျ့ စလဈ ရကျလှနျဒဏျကွေးတှေ မကောကျဘဲနဲ့ ဒီအတိုငျး ပွနျလုပျပေးသှားမယျ။ နောကျတံတား ဖွတျသနျးခှငျ့ စလဈအတှကျ ဘတျသုံးလေးသောငျးကိုလညျး ဘတျတသောငျးခှဲအထိ လြှော့ခပြေးသှားမယျဆိုပွီး သဘောတူညီမှုတှေ ရခဲ့တယျ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။
တာခြီလိတျ-မယျဆိုငျကွား ပုံမှနျအခြိနျကာလတှငျ ကုနျစညျယာဉျမြား ဖွတျသနျးမှုမှာ နစေ့ဉျ အစီးရေ ၂၀၀ ခနျ့ရှိပွီး ယခုတှငျ ကုနျစညျယာဉျဖွတျသနျးမှုသညျ အစီးရေ ၅၀ ခနျ့သာ ရှိတော့ပွီး ကုနျသှယျမှုပမာဏမှာ သုံးပုံတပုံခနျ့ လြော့ကြ သှားကွောငျး စီးပှားရေးနှငျ့ ကူးသနျး ရောငျးဝယျရေး ဝနျကွီးဌာနက သိရသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/09/28 /230649.html